ညဆိုး – Grab Love Story
ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ညတည အကြောင်း ။
ဆိုးဝါးတဲ့ လူတွေကြောင့် ရာသီဥတု ဆိုးဝါးနေတဲ့ ညတညသည် ညဆိုးတည ဖြစ်ခဲ့ရသည် ။
ထောင်မှူး သိန်းမင်းကျော်သည် တရားရုံး အချုပ်ကို ပို့ရမယ့် အချုပ်သားငါးယောက်ကို နေ့လည်က အချုပ်ကား မဆန့်လို့ မပို့ဖြစ်လိုက်တာကြောင့် အခု မိုးမချုပ်ခင် အမြန်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေသည် ။
ထောင် အမှုထမ်းတယောက် လာပေးတဲ့ အချုပ်သား စာရင်းကို ကြည့်လိုက်သည် ။
၁။ မောင်မောင်မျိုးလင်း (ဘ ဦးမဲကြုတ် )
၂။ ချစ်တိုင်းကောင်း ( ဘ ဦးမြင့်သိန်းလွင် )
၃။ဖိုးကံကောင်း ( ခေါ် )ကုလားမဲ ( ဘ ဦးပေါက်ကြီး )
၄။ကျွဲကြီး ( ဘ ဦးဘိုမင်း )
၅။ကျော်ထဲ ( ခေါ် )ကရင်လေး ( ဘ ဦးစောသာခေါင် )
ဒီအချုပ်သားတွေက မနက်ဖန်မှာ တရားရုံးထုတ်မယ့် အချုပ်သားတွေမို့ ဒီညနေထဲက ရောက်နေရမယ်လို့ တရားရုံး အချုပ်က ရဲအုပ်ဦးဇော်သိုက်က ဖုန်း လှမ်းဆက်တာ နှစ်ကြိမ် ရှိနေပြီ ။
မိုးကလည်း အုံ့နေသည် ။ ရွာတော့မယ့်ပုံ ။
သူ့လက်ထောက် ထောင်ကြပ်လှမြင့်စိုးက “ ထောင်မှူး..ကြည့်ပါအုံး…တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီအချုပ်သား အားလုံး ငါးယောက်စလုံးက ၃၇၆ တွေ ချည်းဘဲ…” လို့ တအံ့တသြ ပြောလိုက်သည် ။
ထောင်မှူးသိန်းမင်းကျော်လည်း “ ဒီလိုပေါ့ကွာ..တခါတလေလည်း တိုက်ဆိုင်တတ်တာဘဲ…..” လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ဘဲ ပြန်ပြောလိုက်ပြီး အချုပ်ကားနဲ့ လိုက်မယ့် ရဲတာဝန်ခံ ရဲကြပ်ကြီး လက်ထဲကို အချုပ်သားတွေရဲ့ စာရင်းကို ထည့်ပေးလိုက်သည် ။
“ ကဲ အချုပ်တရားခံတွေကို ကားပေါ် တက်ခိုင်းတော့..မကြာခင် မိုးရွာတော့မယ့် လက္ခဏာ ရှိတယ်….မမှောင်ခင် ရောက်အောင် ထွက်ကြတော့ဗျာ….” လို့ ပြောသည် ။
လက်ထိပ်ကိုယ်စီ ခတ်ထားတဲ့ အချုပ်သားတွေကို အချုပ်ကားပေါ်ကို တက်ခိုင်းကြသည် ။ အချုပ်ကားကို မောင်းမှာက ရဲကြပ် ထူးမောင်လင်း ။ ကွမ်းဝါးရင်း အချုပ်သားတွေ ကားပေါ် တက်နေတာကိုကြည့်နေသည် ။
မကြာခင် ဟောင်းနွမ်းစုတ်ခြာနေတဲ့ အချုပ်ကားပြာကြီးသည် ဂျုန်းဂျုန်းဂျိုင်းဂျိုင်း အသံစုံမြည်လျက် ရွှေသူဌေး ထောင်ကနေ စတင် ထွက်ခွာသွားပါသည် ။
ရဲကြပ်ထူးမောင်လင်းသည် ကားပြူတင်းပေါက်ကနေ ကွမ်းတံတွေးကို ပျစ်ကနဲ ထွေးထည့်လိုက်ပြီးနောက် အသံဝါကြီးနဲ့ သီချင်းအော်ဆိုလိုက်သည် ။
နိုင်ငံခြားက တိုင်းပြည်တွေမှာ ဆို ဒီလောက် အိုဟောင်း စုတ်ချာနေတဲ့ကား ဆိုရင် ကားသင်းချိုင်း ( Junk Yard )ကို ပို့ပြီးတာ ကြာမြင့်လောက်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ လက်ပူတိုက် ပြင်ဆင်ပြီး ဆက် သုံးနေဆဲပါဘဲ ။ အသံတွေ ဆူညံနေတဲ့ မီးခိုးမဲတွေ တလူလူနဲ့ ရဲအချုပ်ကားကြီး ထဲမှာ ယာဉ်မောင်း ရဲကြပ်ထူးမောင်လင်းရဲ့ သီချင်းသံတွေကို မကြားချင်ဘဲ အောင့်အည်း နားထောင်နေကြရသည် ။
“ ရွာမယ်ဆို ပြောထားလိုက်ပေါ့ ထွက်ခဲ့မယ်…လူတွေ အမြင်မှာ ရေတွေ ထင်ကာနေမယ်..ဝင်္ကဘာ လမ်းလျှောက်ခါရယ်……မောင်ငိုမယ် မိုးသဲထဲမှာကွယ် ……”
အချုပ်သားတွေလည်း ရဲကြပ်ထူးမေင်လင်းရဲ့ အသံအစောင်းလိုက်ကြီးနဲ့ အော်ဟစ် ဆိုနေတာကြီးကို ကြိတ်မှိတ် နားထောင်နေရပုံ ရှိသည် ။ စိတ်ညစ်ညူးနေတဲ့ မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ ။
သူ့ဘေးမှာ ထိုင်တဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတင်ရှိန်ကတော့ ထူးမောင်လင်း သည်လို သီချင်း အော်ဆိုနေတာကို ကြားဖူးတာ ကြာပြီမို့ ရိုးနေပြီ ။ တပ်ကြပ်ကြီးတင်ရှိန် စိတ်ပူနေတာက ကောင်းကင် တခုလုံး မဲမှောင်ပြီးမိုးတွေလေတွေ လာတော့မယ့် အခြေအနေကိုပါ ။
အသားနီစပ်စပ် ကတုံးဆံတောက် ဆံပင်နဲ့ အသက်၂၀လောက် အရွယ် ကျော်ထဲ ( ခေါ် ) ကရင်လေးသည် လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားရင်း မျက်နှာထား တင်းတင်းနဲ့မို့ သူနဲ့ လက်ထိပ် အတူတူ တွဲခတ်ထားခံရတဲ့ ကျွဲကြီးက “ ကောင်လေး….ဘာတွေများ တင်းနေလဲ..မင့်ကြည့်ရတာ ခုဘဲ လူထ သတ်တော့မယ့်ပုံကွာ…..” လို့ လေသံ အေးအေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျော်ထဲက “ တောက်….ကျုပ် ဒီအချုပ်ထဲမှာ တမိနစ် တစက္ကန့်တောင် မနေချင်ဘူးဗျာ..ကျုပ် တင်းနေတာတော့ အမှန်ဘဲ ..အခွင့်သာတာနဲ့ ပြေးမှာဘဲ…” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက “ ဟ..ဒါကတော့ မင်းပြောမှလား ကျော်ထဲရယ်….အခွင့်သာလို့ကတော့ ငါလည်း ပြေးမှာပေါ့..ငါတို့ လုပ်ထားတဲ့ အမှုတွေကလည်း အတွဲလိုက်ကြီးကွ….သိတဲ့အတိုင်းဘဲ ငါဆိုရင်
အခု ခေတ်စားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်နေတဲ့ “ သက်ငယ်မုဒိန်း ” လုပ်ထားတဲ့ကောင်….သေါးဏ်တောင် ထိချင် ထိမှာ….အခွင့်သာလို့ကတော့ ပြေးပြီ…ကောင်လေးရေ….” လို့ တိုးတိုး ပြော
ကျော်ထဲ ( ခေါ် ) ကရင်လေးသည် သံတောင်မြို့က ဖြစ်သည် ။ မြို့ပေါ်ကတော့ မဟုတ်ဘူး ။ အနီးအနား ရွာတရွာက ဖြစ်သည် ။
သံတောင်မြို့ပေါ်က စားသောက်ဆိုင်ကြီး တဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး ပုဂံဆေး အလုပ် လုပ်လာလုပ်ရင်း သံတောင်မြို့ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတကျောင်းမှာ ခရစ်စမတ် အတွက် ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့
တရားဟော ဆရာမလေး နှစ်ယောက်ကို အတင်း ဝင် ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီး ခံရပြီး မုဒိန်းမှုနဲ့ တရားစွဲခံထား ရတဲ့လူ ။
ကျော်ထဲ ( ခေါ် ) ကရင်လေးကို ခြေရာ လက်ဗွေရာ နဲ့ အခြားသဲလွန်စတွေ အရ ခြေရာခံလိုက်မိပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် မျက်မြင် သက်သေ မရှိ ။ အခင်း ဖြစ်ပွားချိန်က လူသူ ပြတ်လပ်တဲ့
ညဖက်ကြီး ဖြစ်တဲ့အပြင် တရားဟော ဆရာမလေး နှစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီးတဲ့နောက် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့လိုက်လို့ ဘာသက်သေ အထောက်အထားမှ မရကြ ။ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ ( ဒီအိုင်
ဒီ )က ရဲစုံထောက်တွေ စုံစမ်းထောက်လှမ်း သဲလွန်စ ရှာဖွေတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ အပြင်ဖက် မြေပျော့ပျော့မှာ တွေ့ရတဲ့ ခြေရာတွေနဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ လက်ဗွေရာတွေ တချို့ ကျော်ထဲ (
သို့မဟုတ် ) ကရင်လေး ဟာ မုဒိန်းလူသတ်သမား ဆိုတာ ညွှန်ပြနေသည် ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်ကြတာ ဖြစ်သည် ။
ကျော်ထဲသည် သည် အမှုကို သူ ကျူးလွန်ခဲ့သည် လို့ ဝန်မခံခဲ့ ။ ရဲတွေက ရိုက်နှက်ပြီး ဖြောင့်ချက်ယူ ဝန်ခံခိုင်းပေမယ့် ခေါင်းမာတဲ့ ကျော်ထဲက တင်းခံခဲ့သည် ။ ကျူးလွန်သည်လို့ ဝန်မခံခဲ့ ။
ထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဘဝတူ အချုပ်သားတွေက မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း ကျော်ထဲက သူကျူးလွန်ခဲ့သည် လို့ ဝန်မခံ ။
သူ့ဘေးက အတူတူ လက်ထိပ် တွဲခတ်ထား ခံရတဲ့ ကျွဲကြီး ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ သဏန်းကျွန်း ရပ်ကွက်က ဆိုးပေ လေလွင့်တဲ့ လမ်းဘေးလူမိုက် ။
မလွှကုန်း ရထားဘူတာမှာ ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးမလေးကို ရက်ရက်စက်စက် မုဒိန်းအကြိမ်ကြိမ် ကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ် လို့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အဖမ်းခံရ ပြီး တရားရုံးမှာ စွဲချက် အတင်ခံနေရသူ ။
ကျွဲကြီးကတော့ မိုက်ကန်းသလို ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက် ။ သူ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း လူတကာကို လျောက်ပြောသည် ။
ကျွဲကြီးက နံမည်နဲ့ လိုက်အောင် အသားမဲပြောင်ပြီး တုတ်ခိုင်တဲ့ ကိုယ်လုံးကြီး နဲ့ အရုပ်က ဆိုးသည် ။ ကမ်းကုန်အောင် မိုက်ကန်းတဲ့ လူမိုက်တကောင်မို့ ထောင်ထဲမှာလည်း ကျွဲကြီးကို
လန့်ကြသည် ။ ရှိန်ကြသည် ။
ကျွဲံကြီး ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ရေချိုးနေတဲ့အခါ သူ့ပေါင်ကြားက ထူးထူးခြားခြား ယောက်ျားတန်ဆာ မဲမဲ ရှည်ရှည်ကြီးကို တွေ့ကြရလို့ လူတွေက ကျွဲကို မြင်းလီး တပ်ပေးထားတာ လို့ ကွယ်ရာမှာ ပြော
ဆိုကြသည် ။ ကျွဲကြီးသည် ကလေးမလေးကို ရက်ရက်စက်စက် ကျင့်ကြံပြီး သတ်ပစ်ခဲ့သည် ဆိုပြီး ထောင်ထဲက တခြား လူမိုက်တွေက ကျွဲကြီးကို ဝိုင်းရိုက်ကြတဲ့အခါ ကျွဲကြီးက
အသင့်ရှာပြီး ဆောင်ထားတဲ့ သံပြားချွန်နဲ့ ပြန်ထိုးခဲ့တာကြောင့် လူမိုက်တယောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒါဏ်ရာတွေ ရခဲ့ရသည် ။ ကျွဲကြီးကို ဘယ်သူမှ ထပ် မကပ်ရဲကြတော့ဘူး ။ ကျွဲကြီးလည်း
ဒီအတွက်နဲ့ ထောင်ထဲမှာ တယောက်ထဲ အမှောင်ခန်းကျဉ်းလေးထဲ လှောင်ထား ( တိုက်ပိတ် ခံရ ) ပြီး တရားရုံးကို ထုတ်တဲ့အခါ လက်ထိပ်သာ မက ခြေထိပ် သံခြေကျင်းပါ အခပ် ခံရသည် ။
ကျွဲကြီးက ဒါကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေသည် ။
“ ငါက သေမထူး နေမထူးကွ….လူသတ်ကောင်..သတ်ရဲသေရဲတယ်…သေရဲမှ လာခဲ့ကြ…” လို့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ စိမ်ခေါ်တတ်သူ ။
ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကရင်လေးရဲ့ အနောက်ခုံတန်းမှာ ထိုင်ကြတဲ့ အချုပ်သား နှစ်ယောက်ကတော့ ချစ်တိုင်းကောင်း နဲ့ ဖိုးကံကောင်း ( ခေါ် ) ကုလားမဲ ဖြစ်သည် ။
သူတို့ နှစ်ယောက်က အသက် မငယ်တော့တဲ့ ဆယ်တန်း ကျောင်းသားကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာမကို အချိန်ပို စာခေါ်သင်ပေးတဲ့ အချိန်မှာ ဝိုင်း မုဒိန်းကျင့်လို့ ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆို
ခံကြရတဲ့ လူတွေ ။ ဆရာမကို တယောက်တလဲ ကျင့်ကြံပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ချစ်တိုင်းကောင်းနဲ့ ဖိုးကံကောင်း ( ခေါ် )ကုလားမဲက ဆရာမကို တနေရာကို ဖမ်းခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားနေတုံး တခြား
ဆရာတွေနဲ့ဆရာမတွေက ရပ်ကွက်လူကြီးတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဝိုင်းဖမ်းလိုက်ကြပြီး ရဲစခန်းကို ပို့ခဲ့တာ ဖြစ်သည် ။ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် အတန်းတိုင်း နှစ်တိုင်း ကျနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဆိုးတွေ
ဖြစ်ပြီး ဆရာမကို တချိန်လုံး ပြစ်မှား နေခဲ့ရာက စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြပေမယ့် ကျွဲကြီးတို့လို အသားကုန် မိုက်တဲ့ လူမိုက်တွေ မဟုတ်ကြလို့ ထောင်ထဲမှာ အချုပ်ကျနေတုံး ကျွဲကြီးတို့လို
လူမိုက်တွေကဗိုလ်ကျတာကို ခံကြရတဲ့ ကောင်တွေ ဖြစ်သည် ။
နောက်ဆုံးပိတ် ခုံတန်းမှာ တယောက်ထဲ ထိုင်နေတဲ့ အချုပ်သားကတော့ မောင်မောင်မျိုးလင်း ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းကလည်း ရှေ့က အချုပ်သားတွေလိုဘဲ မုဒိန်းမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး ခံရပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကောင် ။
သူက တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ။
သူက ကျွဲကြီးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် မုဒိန်းသမား ။
ကျွဲကြီးက သက်ငယ်မုဒိန်းသမား..မောင်မောင်မျိုးလင်းက သက်ကြီး မုဒိန်းသမား ။ သူနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အသက် ခြောက်ဆယ့်ရှစ်နှစ် အရွယ် မိန်းမကြီး တယောက်ကို အတင်း မုဒိန်းကျင့်လို့ ရပ်ကွက်က ဝိုင်းဖမ်းလို့ မိခဲ့တဲ့ အမှု ။ သူက မိန်းမကြီးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး ပြန်ထွက်သွားပြီး မကြာခင်မှာ နောက်ထပ် တခါ ပြန်ရောက်လာပြီး ထပ် ကျင့်လို့ ဘေးအိမ်တွေက သိသွားပြီး အဖမ်း ခံရတာ ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် သွေးအေးအေးနဲ့ ရက်စက်သူ ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာ ခိုင်းတဲ့ အိမ်ဖေါ်အကူ မိန်းကလေး တယောက်ကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး အခန်းထဲ လှောင်ထားခဲ့ဘူးသူ ။ ချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေက သက်ဆိုင်ရာတွေကို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး ဖုံးဖိခဲ့လို့
သည်ကိစ္စက မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည် ။သည် သက်ကြီး မုဒိန်းမှု မဖြစ်ခင်ကလည်း မိန်းကလေးတွေကို သူ့လိင်တန်ဆာကို လိုက်ပြသတဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့လို့ ကျောင်းက ရာသက်ပန် ထုတ်ပယ်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ အမှုအဟောင်း ရှိခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်သည် ။
ရဲကြပ်ထူးမောင်လင်းသည် မမှောင်ခင် ရောက်ဖို့ စိတ်စောနေလို့ ကား အရှိန်ကို မသိမသာ တင်လိုက်သည် ။ အချုပ်ကားရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို ပေါင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် တင်ပြီး အိပ်ငိုက် လိုက်ပါလာတဲ့ ရဲသား ထွန်းထွန်းသည် ကား လှုပ်ခါသွားလို့ ဖျတ်ကနဲ နိုးလာသည် ။
ဝါဇင်နဲ့ပြာဇင်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဒီနေ့ အတန်းမရှိလို့ အိမ်ကို စောစော ပြန်ရောက်နေကြတာကို သိတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သမီးတွေဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် အိမ်ကို မိုးချုပ်မှ ပြန်ရောက်လေ့ရှိသည်။
ဥပဒေဝန်ထမ်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ အမှုတွေ များပြားလှတာကြောင့် တော်တော်ဘဲ ပင်ပန်းနေပေမယ့် အိမ်ပြန်လို့ မရသေး ။ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကို ပြီးပြတ်အောင် လုပ်နေရသည် ။
သမီးတို့ ဖုန်းမကိုင်လို့ စိတ်က ပူလာသည် ။ အိမ်က လိုင်းဖုန်းကို ထပ်ခေါ်ကြည့်လိုက်သည် ။ ကိုင်ပြီ ။ ရပြီ ။
သမီးတို့ ကိုင်တာ မဟုတ် ။ အိမ်ဖေါ်မလေး နော်ပိုးကိုင်တာ ။
“ နော်ပိုး..သမီးတို့ ဘယ်မှာလဲ..ဘာလုပ်နေကြလဲ….”
“ မဝါဇင်က အိမ်နောက်ဖေးမှာ လေသေနတ် ပစ်နေတယ် အန်တီ..မပြာဇင်ကတော့ ကြက်ခြံမှာ ရောက်နေတယ်..”
“ သူတို့ ထမင်းစားပြီးကြပြီလားဟင်..နော်ပိုး…”
“ မစားကြသေးဘူး အန်တီ…ကျောင်းက မုန့်စားလာကြတယ် ပြောတယ်..ခဏကြာမှ စားမယ် တဲ့…”
“ အေး..အေး…ငါ နဲနဲ နောက်ကျမယ်…သူတို့ကို ပြောပြလိုက်.နော်ပိုး…”
“ ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ…”
ဝါဇင်သိန်းသည် အိမ်နောက်ဖေးက သရက်ပင်ကြီးရဲ့ ပင်စည်မှာ ကပ်ထူ စက်ဝိုင်း ပစ်မှတ်တခုကို သံမှိုနဲ့ ရိုက်ကပ်ပြီး လေသေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်နေတဲ့ အချိန် ပြာဇင်သိန်းသည် ခြံဘေးဖက်က ကြက် ဘဲ ငန်းတွေ မွေးထားတဲ့ ခြံတွေဖက်မှာ ကြက်တွေ ဘဲတွေ ငန်းတွေကို အစာကျွေးနေသည် ။ ဝက်တွေကိုတော့ အိမ်ဖေါ် နော်ပိုးက အစာကျွေးပြီးပြီမို့ ပြာဇင် ကျွေးဖို့ မလိုတော့ဘူး ။ ပြာဇင်သိန်း က
မွေးမြူရေး ဝါသနာပါသည် ။ ဒါကြောင့် အဖေ ဖြစ်သူက ကြက်တွေ ဘဲတွေနဲ့ ငန်းတွေကို မွေးဖို့ ခွင့်ပြုသည် ။ သူ ရှေ့တန်းက ပြန်လာတဲ့အခါ နို့စားနွားတွေ မွေးကြမည် လို့လည်း ပြောသွားသည် ။
ဝါဇင်သိန်းကတော့ အဖေ့သမီး စစ်စစ် ။ ယောက်ျားလေး တယောက်လိုဘဲ သေနတ်ပစ်ချင်သည် ။ မြင်းလည်း စီးချင်သည် ။ ပြိုင်စက်ဘီး စီးသလို တင်းနစ်စ်လည်း ရိုက်သည် ။ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါ ဗိုလ်သင်တန်း တက်ပြီး စစ်ဗိုလ် လုပ်ချင်သည် လို့လည်း ပြောသည် ။
ပြာဇင်သည် ဝါဇင့်ထက် ၂နှစ်ကြီးသည် ။ ဒါပေမယ့် ဝါဇင်သည် အားကစားတွေ လုပ်ပြီး အစားလည်း ပုတ်တာကြောင့် ထွားသည် ။ ညီအမနှစ်ယောက်သည် ရွယ်တူတွေလို့ ထင်ရသည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ခြံကျယ်ကျယ်ကြိုက်တဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူတာ ကြိုက်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် မြို့ပြင်မှာ နေရတာကို
တခါတခါတော့လည်း လူသူနဲ့ ကင်းဝေးလွန်းလို့ မြို့ပြင်မှာ နေရတာကို ကြောက်မိသည် ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗိူလ်မှူးဇင်မောင်သိန်းသည် သူနေချင်တဲ့ ခြံကြီးမှာ ကြာကြာ မနေနိုင် ။ အခု ရှေ့တန်းမှာ ရောက်နေသည် ။
မိုးကလည်းမဲမှောင်နေသည် ။ အလုပ်တွေကို အမြန် လက်စသတ်နေသည် ။
မနက်ဖန် မနက်မှာ အမှုတွေ များအုံးမည် ။ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေမှာ အရမ်း ပါခဲ့ နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မုဒိန်းမှုတွေ ကို မနက်ဖန် မနက် ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ တရားရုံးမှာ စစ်ဆေး ကြားနာမည့် ရုံးချိန်းတွေ ရှိသည် ။
ခရစ်စမတ် အချိန် အခါ အတွက် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းမှာ ပြင်ဆင်နေတဲ့ တရားဟောဆရာမလေးတွေကို ညဘက်ကြီး မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အမှု ရယ်..အသက်ခြောက်ဆယ့်ဂှစ်နှစ် အရွယ် မိန်းမကြီး တယောက်ကို ၂ခါပြန် မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အမှု ရယ်..အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျင့်တဲ့ မုဒိန်းမှု ရယ် ..။
နောက်တမှုကလည်း မုဒိန်းမှုဘဲ ။ အချိန်ပို စာခေါ်သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာမကို ကျောင်းသားတွေက အတင်း မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အမှု ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် နှစ်မှုလုံးမှာ ခံရတဲ့ မိန်းမသားတွေဖက်ကို စာနာပြီး အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ လူမဆန်တဲ့ လူဆိုးတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ဒါဏ် ကျခံကြစေဖို့ လွတ်ပေါက် လွတ်ကွက် မရှိအောင် အထူး ဂရုစိုက်ပြီး အမှုတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့သည် ။
သမီးလေး၂ယောက် ရှိတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် အကြမ်းဖက် အနိုင်ကျင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို တအားကို မုန်းတီး ရွံရှာသည် ။
ကိုယ့်အလုပ်ကလည်း မကောင်းတဲ့ လူဆိုး သူခိုးတွေကို ထောင်ကျအောင် တရားစွဲဆိုရတဲ့ ဥပဒေဝန်ထမ်း အလုပ် မဟုတ်လား ။ အမှုတွေ မျိုးစုံကို ကိုင်တွယ်ရတဲ့ အထဲ မိန်းမတွေကို နိုင်ထက်စီးနင်း အနိုင်ကျင့်တဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အမှုတွေကို ကြုံလာရရင် ဒီတရားခံတွေ သည် ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ဒါဏ် မရဘဲ လွတ်သွားကြမှာကို ဒေါ်မွှေးမွှေး မလိုလားဘူး ။ သူ့ဖက်က လပ်မစားဘဲ ဖိဖိစီးစီး အလုပ်လုပ်သော်ငြားလည်း ရဲတွေဖက်က ဖြစ်ဖြစ် တရားသူကြီးဖက်က ဖြစ်ဖြစ် ငွေယူ လပ်စားပြီး တကယ်ကျူးလွန်းတဲ့ မုဒိန်းကောင်တွေ လွတ်သွားတာတွေလည်း လုပ်သက် အတွေ့အကြုံအရ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ကြုံဘူးခဲ့ပြီ ။
သည် အမှုတွေကို သေသေချာချာ တည်ဆောက် ပြင်ဆင်နေလို့ အလုပ်က မပြီးပြတ်နိုင်သေး ။
ပြာဇင်သည် ကြက် ဘဲ ငန်းတွေ ထားတဲ့ ခြံလေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်…သူတို့တွေကို အစာကျွေး…ရေခွက်
တွေ ရေဖြည့်ပြီး အိမ်ဖက်ကို ပြန်လာတဲ့အချိန် လေသေနတ်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းပြီး လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ လျှောက်လာတဲ့ ညီမဝါဇင်ကို တွေ့လိုက်လို့..“ ဝါဝါ…..ထမင်းစားကြမလား…..နော်ပိုး….ငါးမွှေ ကြော်ထားတယ်….ပဲဟင်းနဲ့”လို့ လှမ်းပြောလိုက်သည် ။ ဝါဇင်က “ စားမယ်…မမ…ဝါဝါ…ဘိုက်တအား ဆာနေတယ်..မေမေက နဲနဲနောက်ကျမယ် တဲ့မေမေ့ကို မစောင့်တော့ဘူး….” လို့ ပြန်ဖြေသည် ။ ညီအမနှစ်ယောက် အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့အချိန် ဝေါကနဲ မိုးရွာချလိုက်လို့ ပြာဇင်က “ မိုးကတော့ သည်းပြီ….မီးပြတ်မှာ စိုးရတယ်…စောစောစီးစီး ထမင်းစားထားတာ အကောင်းဆုံးဘဲ ” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဘေးကို ရောက်လာတဲ့ နော်ပိုးကို “ ရေပြေးချိုးလိုက်အုံးမယ်…ထမင်းပြင်ထားလိုက်..ဝါဝါလည်း စားမယ်…”လို့ ပြောပြီး အပေါ်ထပ်ကို ပြေးတက်လိုက်သည် ။
အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ မိမွေးတိုင်းကိုယ်နဲ့ ရေချိုးခန်းလေးထဲကို အမြန်ပြေးဝင်သည် ။ ရေပန်းကို ဖွင့်သည် ။ ရေချိုးခန်းထဲက မှန်ချပ်ကြီးထဲမှာ ပြာဇင် သူမကိုယ်ကို မြင်နေရသည် ။ ရက်ရက်စက်စက် အလှသွေးကြွယ်နေတဲ့ ကောင်မလေး ။
ကိုယ့်ရုပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လုံး ဘယ်လောက် လှတယ် ကြည့်ကောင်းတယ် ဆိုတာ ပြာဇင်သိသည် ။ ဒါကြောင့်လည်း ပြာဇင်သည် တော်ရုံ ဘဲ ဆိုရင် ရှိတယ်တောင် မထင်ဘူး။ အလှဂုဏ်မောက်သည်လို့ ပြောမလား။အလှမာန်တက်သည်လို့ ပြောမလား ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လွန်းတဲ့ ပြာဇင့်ကိုယ်လုံးတွေက အချိုးကျ လှပလွန်းနေကြသည် ။ တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားတွေက အကြီးကြီးလည်း မဟုတ် သေးသေးလေးလည်း မဟုတ် ။ အနေတော် လှလွန်းနေကြသည် ။
သေးကျဉ်နဲ့ ခါးနဲ့ ဝမ်းပျင်သား ရှပ်ရှပ်တွေ…စွင့်ကားလုံးဝန်းတဲ့တင်ပါးတွေကလည်း လှပလွန်းနေသည် ။ ပေါင်တန်တွေ ကြား ဂွဆုံနေရာက မို့အိတဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီးမှာ အမွှေနုလေးတွေ ခပ်ရေးရေး ပေါက်နေကြတာကလည်း မြင်ရတာ ကြည့်ကောင်းလှသည် ။
တဖျန်းဖျန်းကျနေတဲ့ ရေပန်း အောက်ထဲ ဝင်ရပ်ပြီး ရေချိုးရင်း ပြာဇင်တယောက် ဆပ်ပြာတိုက်တဲ့အချိန် မိမိကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လက်အစုံနဲ့ ပွတ်သပ်မိရသည် ။ ရင်သီး ( နို့သီးခေါင်း ) လေးတွေကို လက်ဖဝါးနဲ့ ထိမိတော့ ဂှိန်းဖိန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ရသလို ပေါင်ကြားက အကွဲကြောင်း အင်္ဂါစပ်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ပွတ်တိုက် ဆေးကြောတော့လည်း ကြက်သီးထစရာ ခံစားချက်တွေနဲ့ အပျိုမလေး ပြာဇင် တုန်ခါနေရသည် ။
ကျောင်းနေဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိန်းကလေးချင်း တီးတိုး စကားပြောကြတဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဖက် ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကြောင်းက မပါမပြီးတော့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြာဇင်တို့ပြောဖြစ်ကြသည် ။ အင်တာနက်က အပြာဇာတ်လမ်းတွေကို ဖတ်ဖူးကြသလို လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို
ကြည့်ဖူးကြလို့ လက်နဲ့ ကိုယ့်ဖါစာ ပွတ်သပ် အာသာဖြေတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း နားလည် သဘောပေါက် စမ်းသပ်ဖူးနေပြီ ။
အခုတော့ ညီမ ဝါဝါနဲ့ ညနေစာ အတူတူ စားကြမှာမို့ အာသာဖြေတဲ့ ကိစ္စကို မလုပ်တော့ဘဲ ရေကို ခပ်မြန်မြန် ပြီးအောင် ချိုးလိုက်သည် ။
ပြာဇင် အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ နော်ပိုးသည် ထမင်းပွဲ ပြင်ထားပြီး ဖြစ်သလို ညီမ ဝါဇင်လည်း ထမင်းစား စားပွဲမှာ ရောက်နေပြီ ။
နော်ပိုး ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေကို ညီအမနှစ်ယောက် ထိုင်စားကြတဲ့အချိန် ဝါဇင်က ကျောင်းမှာ သူ့ကိုလိုက်ပြီး စကားပြောတဲ့ ဝေ.ယံဟိန်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး အကြောင်းကို စကားစသည် ။ ဖေဖေမေမေတို့ မရှိလို့ဝါဝါလည်း အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောလို့ ရနေတာ ။ ဖေဖေမေမေတို့က ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ကို ကျောင်းစာကိုဘဲ အဓိကထား စေချင်ကြပြီး ရည်းစားထားမှာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ပင်ခဲ့ကြလို့ အိမ်မှာ သူတို့ ညီအမ စကားပြောဆိုတာ သတိထားခဲ့ကြရသည် ။ ဖေဖေမေမေတို့ အရှေ့မှာ ယောက်ျားလေးတွေ အကြောင်း ဘာမှ မပြောမိအောင် နေကြရသည် ။
“ ဘာလိုလဲ မပြာဇင်….”
“ ဖထီးကိုလည်း ထမင်း စားခိုင်းလိုက်အုံးနော်..တော်ကြာ မိုးပိုသည်း လေပြင်းတိုက်ပြီး မီးပျက်သွားမှ အမှောင်ကြီးထဲ စားနေရမယ်….”
“ ဟုတ်ကဲ့ ကျမ ကျွေးလိုက်မယ်….သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ်…..”
ဝါဝါက ငါးမွှေကြိုက်သည် ။ ပဲဟင်းနဲ့ အားရပါးရ စားနေသည် ။ ပြာဇင်ကတော့ တီဗီက လာနေတဲ့ နို့စားနွားတွေ မွေးတဲ့အကြောင်းကို ပို စိတ်ဝင်စားနေသည် ။
ဒုရဲအုပ်အောင်ကောင်းသော်သည် တရားရုံး အနောက်ဖက်ထဲက ရုံးခန်းလေးထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တစေ့တစောင်း ချောင်းမြောင်းနေသည် ။
အောင်ကောင်းသော်သည် တောင့်တင်းစိုပြေလှတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သဘောကျနေတာ ကြာပြီ ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ကလေးနှစ်ယောက် အမေ ဆိုပေမယ့် တကယ့်ကို ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ ရင်ထွားထွားတင်းတင်း တင်ကားကား ဝိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ အလှသွေး ကြွယ်နေဆဲ မိန်းမချော တယောက် ဆိုတော့ လင်ရှိ မိန်းမတယောက် ဆိုတာ သိရက်နဲ့ အောင်ကောင်းသော် မနေနိုင်ဘူး ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တပ်မက်နေတာ ကြာပြီ ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သူ စိတ်နဲ့ ပစ်မှားနေမိတာ ကြာပြီ ။ သူ့လင် ဗိုလ်မှူးဇင်မောင်သိန်းကလည်း တိုက်ခိုက်ရေး တပ်က ဆိုတော့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကို ခဏ ခဏ သွားသွားနေရသည် ။ တခါတခါ သွားလိုက်ရင် ခြောက်လ ဆိုတာက အနည်းဆုံးဘဲ ။
လင်မရှိတဲ့အချိန် ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စိုပြေတောင့်တင်းတဲ့ သည်စော်ကြီးသည် စိတ်မလာဘဲနေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အောင်ကောင်းသော် သူ့ဖါသာ တွက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကို စိတ်ကူးနဲ့ ကာမစပ်ယှက်နေခဲ့သည် ။
ဥပဒေဝန်ထမ်းနဲ့ တရားရုံး အမှုလိုက်ရဲ ဆိုတာကလည်း အမြဲ တွေ့ကြ ခင်မင်နေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးနဲ့ အောင်ကောင်းသော်တို့သည် ခင်ခင်မင်မင် ရှိကြပါသည် ။တရုံးထဲ အတူတူ လုပ်နေကြပြီး လုပ်ငန်းချင်းကလည်း ဆက်စပ်နေတော့ လဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ထမင်းဆိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေမှာ ဆုံနေကျ တိုးနေကျ အတူတူလည်း စားနေကျ ။
အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ အကြည့်အရှုတွေက သူမ အပေါ်မှာ မရိုးသားမှန်း ဒေါ်မွှေးမွှေး ရိပ်မိသည် ။ သူ့အကြည့်တွေက သူမရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ထိုးဖေါက်ပြီး မြင်နေရလို့ တပ်မက်မှု အပြည့်နဲ့ ကြည့်နေတဲ့ အကြည့် ။
ပေါင်ကြား ဆီးစပ်နေရာကို စိုက်ကြည့်တာကို ခံရတဲ့ အခါ ဒေါ်မွှေးမွှေး ကြက်သီးတွေ တအား ထထသွားရသည် ။ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ မရိုးသားတဲ့ အကြည့်ရိုင်းတွေကြောင့် ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း အရင်ကလောက် သူနဲ့ မရောတော့ဘဲ ခပ်တန်းတန်း နေလိုက်သည် ။
ဒါကို အောင်ကောင်းသော်ကလည်း သိသည် ။
အောင်ကောင်းသော်သည် လူပါးလူလည် တယောက် ။ ဒုရဲအုပ်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့။
ဒေါ်မွှေးမွှေး သူ့ကို ရှောင်နေသည် ဆိုတာကို သိသည် ။
ဂွင်ဖန်တတ်သလို ရိုက်လည်းစားတတ်သည် ။ သူ့အပိုင် နယ်မြေထဲမှာ သူ တိတ်တိတ်ပုန်း ဝါးနေစားနေ
တဲ့ အနှိပ်ခန်းက ကေတီဗီက စော်လေးတွေ အများကြီးဘဲလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ကြားဖူးသည် ။
လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကို မြန်မြန် အပြီး ဖြတ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေး အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်လိုက်သည် ။
မယောင်မလည်နဲ့ သူ့ကို အကဲခတ်နေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို ဒေါ်မွှေးမွှေး မြင်သည် ။ မမြင်ယောင်ဆောင်ပြီး အိမ်ကို ယူမယ့် ထမင်းဘူး..အပါအဝင် ပစ္စည်းလေးတွေကို လက်ဆွဲခြင်းထဲ ထည့်သည် ။ လက်ကိုင်အိတ်ကို စားပွဲ အံဆွဲထဲက ထုတ်သည် ။ သွားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ ။
ရုံးထဲက ဝန်ထမ်း တယောက်ရဲ့ “ ဟာ..မိုးစရွာပြီ….လေက တော်တော် ထန်တာဘဲ….” လို့ ပြောလိုက်သံကို ကြား
လိုက်ရသည် ။ မမ ပြန်တော့မလား…..လို့ အောင်ကောင်းသော် နုတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့် ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း..“ ဟုတ်တယ်…ပြန်ပြီ….” လို့ တိုတိုတုတ်တုတ်ဘဲ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ မကောင်းတတ်လို့ ။
တနေရာထဲ အတူတူလုပ်နေကြပြီး လုပ်ငန်းချင်းကလည်း ဆက်စပ်နေတော့ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ အကြည့်တွေကို မကြိုက်ပေမယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေး မသိကျေးကျွန်ပြုနေခဲ့တာ ကြာပြီ ။
တရားရုံးဝင်းကွက်လပ်ထဲ ရပ်ထားတဲ့ ကားဆီကို လျှောက်သွားဖို့က ထီးလိုသည် ။ အရေးထဲ ထီးက မပါ။
မိုးကလည်း တဝေါဝေါ ရွာနေသည် ။
“ မမ…ကားဆီကို ကျနော် လိုက်ပို့ပေးမယ်….”
အကွက်စောင့်နေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် ထီးကို ဖွင့်ပြီး အပေါက်ဝက ကြိုစောင့်နေလို့ “ နေပါစေ…မလို
ဘူး..” လို့ ပြောရင်း ငြင်းပယ်လိုက်ပေမယ့်..“ မိုးသည်းနေတယ်…..မမ….မမစိုကုန်လိမ့်မယ်….” လို့ သူကပြောပြီး
အတင်း ထီးမိုးပေးလို့ မငြင်းသာဘဲ သူနဲ့ ထီးတချောင်းထဲ ဆောင်းပြီး ရုံးထဲကနေ ကားဆီကို လျှောက်သွားလိုက်ရသည် ။
အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ထိမိကပ်မိနေသည် ။ သူ့ကို ရှောင်နေပါတယ် ဆိုမှ သူက ပူးပူးကပ်
ကပ်လာလုပ်နေသည် ။ မကောင်းတတ်လို့..“ သိုင်းကျူး…”လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်ရသည် ။
ကားမောင်းထွက်လိုက်တာကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို ရွံရှာမုန်းတီးမိတဲ့စိတ်ကြောင့်
( ဒီကောင် မဟုတ်တာ လုပ်တာ တခုခုများ တွေ့လို့ သိလို့ သေချာလို့ကတော့ ခရိုင်ရဲမှူးကို တိုင်ပြီသာ မှတ်)
လို့ စိတ်ထဲမှာ ကြုံးဝါးမိလိုက်သည် ။
မိုးသည်းတဲ့ညနေခင်းက မှောင်လွန်းတာကြောင့် အိမ်က သမီးနှစ်ယောက်အတွက် စိတ်ပူလို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်မိရ
ပြန်သည် ။ ဖုန်းကိုင်တာက နော်ပိုး ။
“ နော်ပိုး…မိုးတွေ တအားရွာနေတယ်…မီးလာရဲ့လား…..”
“ ဖထီးကို ခြံတံခါးတွေ သေချာ ပိတ်ခိုင်း ..ငါ့ကားလာမှ လာဖွင့်ပေးလို့ပြော..အခု ငါ ထွက်လာနေပြီ…..”
ဖထီးသည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ယောက်ျား ဗိုလ်မှူးဇင်မောင်သိန်းရဲ့ အရင်တုံးက ယာဉ်မောင်းရဲဘော်ကြီး ဖြစ်သည် ။ ဖထီးသည် စစ်တပ်က ပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက် သံယောဇဉ်ရှိခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးရဲ့ အိမ်မှာ ကားလာမောင်းပေး..ခြံစောင့်ပေးနေတဲ့ ရိုးအတဲ့ ကရင်လူမျိုး အဖိုးကြီး ။
ဖထီးနံမည်က စောအားမေ ။
မိုးတွေက တဝေါဝေါနဲ့ အညှိုးကြီးကြီးနဲ့ ရွာချနေသလား ထင်ရသည် ။မဲမှောင်နေတဲ့ ကောင်းကင်က ညသန်းကောင်အချိန်လား ထင်မှတ်ရသည် ။ တဗြန်းဗြန်း တဝေါဝေါ အသံတွေ ဆူညံနေသလို တချက်တချက် ကစ်လိုက်တဲ့ မိုးကြိုးသံက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြက်သီးတွေ ထသွားစေသည် ။ ပြင်းထန်တဲ့ လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဒေါ်မွှေးမွှေး တယောက် ကား မနည်း ထိန်းမောင်းနေရသည် ။ ကားသည် ညာဖက်ကို ဆွဲဆွဲသွားနေသည် ။
မိုးများလွန်းလို့ ကားရှေ့ဖက်ကို ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရလို့ တခါတခါ ကားကို လမ်းဘေးမှာ ထိုးကပ် ရပ်ထား
လိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေမိသည် ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဘီးလှိမ့်ရုံလေး မောင်းနေရလို့ ဘယ်တော့များမှ အိမ်ရောက်ပါမလဲ
စိတ်ထဲမှာ ပူပန်မိနေသည် ။ စောစောထဲက ပြန်လိုက်ရင် ကောင်းသား လို့လည်း နောင်တ ရမိလိုက်သည် ။
အောင်ကောင်းသော်သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကားဆီကို ထီးမိုးကာ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကိုယ်နဲ့ သူ့ကိုယ်
မတော်တဆ ထိမိလိုက်မိခဲ့တာလေးတွေကို ကျေနပ်နေမိပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို အနီးကပ် ရှိုး
လိုက်ရလို့လည်း စိတ်တွေ ထကြွနေသည် ။ မိုးရေစိုနေလို့ အသားနဲ့ ထမိန် ကပ်နေတာကြောင့် တင်းကားတာတွေကို သေသေချာချာ တွေ့လိုက်ရသည်လေ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်က အောင်ကောင်းသော်သည် သည်လိုဘဲ ဒေါ်မွှေးမွှေး အိမ်အပြန်မှာ စိတ်တွေ ထကြွ
ခဲ့ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကား ကို နောက်ယောင်ခံပြီး လိုက်သွားမိခဲ့သည် ။ ရဲတယောက်မို့ နောက်ယောင်ခံတဲ့အလုပ်က သူ့အတွက် မဆန်းတော့ ။ သူ့ရဲ့ ကိုရိုလာကားဟောင်းလေးနဲ့ ခပ်ခွာခွာ လိုက်သွားလိုက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ခြံနဲ့အိမ်ဆီကို ရောက်သွားသည် ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဝါးရုံတောထဲမှာ ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ရဲ့ ခြံဆီကို သူ တိတ်တဆိတ် တိုးကပ်ရောက်သွားခဲ့သည် ။
အဲဒီနေ့ညက အောင်ကောင်းသော်သည် ရဲအရာရှိတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက မဟုတ်တာတွေကို လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ “ ဇ”ကလေးက ပါလာသူမို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး အနောက်ကနေ လိုက်ပါသွားပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံထဲကို သူ တိတ်တဆိတ် ခိုးဝင်ခဲ့သည် ။
တကယ့်ကို ရင်ခုံစရာ စွန့်စားခန်း တခုပါဘဲ ။ အောင်ကောင်းသော်သည် ခြံအနောက်ဖက်က တဲအိမ်ကလေးကို
တွေ့သည် ။ ခြံစောင့် ကရင်အဖိုးကြီးသည် တခေါခေါနဲ့ အိပ်ပျော်နေတာကို အောင်ကောင်းသော် တွေ့ရလို့ အ
ရမ်း သဘောကျသွားပြီး အိမ်ကြီးဆီ ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချဉ်းကပ်သွားခဲ့လိုက်သည် ။
ငယ်ငယ်ထဲက ကာတွန်းမောင်လွင်ရဲ့ သူခိုးကြီး ငတက်ပြား ဇာတ်လမ်းတွေကို သဘောကျအားကျခဲ့တဲ့ အောင်
ကောင်းသော်လည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ်က မီးလင်းနေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေကနေ အိမ်အတွင်းကို ကြည့်ဖို့ အနီးက သရက်ပင်ကြီးပေါ်ကို ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာနဲ့ တက်လိုက်တဲ့အခါ အိမ်အတွင်း
ကို ထင်းလင်းစွာနဲ့ မြင်နိုင်သွားသည် ။
အနီးဆုံး ပြူတင်းပေါက်က မြင်လိုက်ရတာက အလုပ်က ပြန်လာပြီး ရေချိုးဖို့ တနေကုန် ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်
အစားတွေကို အားလုံး ချွတ်ပစ်နေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကိုပါဘဲ ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် အိမ်အမြင့်ပေါ်က အိပ်ခန်းထဲမှာ
ဖြစ်သလို ကိုယ်ချည်းသက်သက် ခြံကျယ်ကြီးနဲ့ နေနေတာမို့ ပြူတင်းပေါက်ခန်းစီး ပွင့်နေပေမယ့် သိပ် ဂရုမစိုက်
နေဘဲ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ အားလုံးကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်နေတာ ဖြစ်သည် ။
သရက်ပင်ဂွကြားမှာ ထိုင်ပြီး ချောင်းနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် ဖြူဖြူဝင်းဝင်း ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ဒေါ်မွှေး
မွှေးကို မထင်မှတ်ဘဲ မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ မျက်တောင် မခပ်တမ်း စူးစိုက်ငေးကြည့်ရင်း အရမ်းကို သဘောကျ
နေသည် ။ ကော့တင်းဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားကြီးတွေက ကုတင်ပေါ်က ထမိန်လေးကို လှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန် တုံခါ
လှုပ်သွားကြသလို ပေါင်တန် ဖြူဖြူ နှစ်ချောင်းနဲ့ ဂွဆုံက အမွှေးရေးရေးနဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို တွေ့လိုက်ရ
တော့ သူ့ပေါင်ကြားက ယောက်ျားတန်ဆာက ချက်ချင်း မာကျောတင်းထောင်လာသည် ။
ထမိန်ကို ကောက်ဝတ်မယ် ကြံပြီးမှ မဝတ်တော့ဘဲ လက်က ကိုင်လို့ ရေချိုးခန်းဆီကို ခပ်သွက်သွက် လှမ်း
လျောက်သွားတဲ့အချိန် နောက်ကျောကနေ တင်ပါးထယ်ထယ်အိအိကြီးတွေကို သူ မြင်လိုက်ရပြန်တော့ တင်းမာ
လွန်းနေတဲ့ သူ့တန်ဆာကို သူ့ဖါသာ ကိုင်ဆုပ်လိုက်မိသည် ။ လက်တဖက်က သစ်ကိုင်းတကိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်
ထားသလို ကျန်လက်တဖက်က သူ့တန်ဆာကို ကာကီဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ဆုပ်ထားမိတာ ဖြစ်သည် ။
ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်သွားတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သူ ထပ် မမြင်ရတော့ ဘေးဖက်က ကျန်တဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေကို
မြင်ရဖို့ သစ်ကိုင်းတကိုင်းကနေ နောက်တကိုင်းကို သူ ကူးဖို့ ကြိုးစားသည် ။ သန်မာတဲ့ လက်တွေနဲ့ မြဲမြံစွာ
ဆုပ်ကိုင်ပြီး မျောက်တကောင်လို သွက်သွက်လက်လက် ကူးသွားနိုင်တဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် နောက်ပြူ
တင်းပေါက်ကနေ ထူးခြားနဲ့ မြင်ကွင်းသစ်တွေကို တွေ့လိုက်ရပြန်လို့ မျက်လုံး အပြူးသားနဲ့ ငေးမောလို့ နေပြီ ။
သူ တွေ့မြင်လိုက်ရတာကတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ သမီးငယ်လေး ဝါဇင်သိန်း ကိုပါဘဲ ။ ဝါဇင်သိန်းသည် တနေကုန် အားကစားလုပ် သေနတ်ပစ်ထားတာမို့ ချွေးတွေ တလုံးလုံးနဲ့ ညစ်ပတ်နေပေမယ့် ရေမချိုးသေးလို့ ရုံးက ပြန်လာတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ရေချိုးဖို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် သူ့အမေ ရေချိုးတဲ့အချိန်နဲ့ တပြိုင်နက် အချိန်မှာ သူမတို့
ညီအမတွေအတွက် သီးသန့်ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ရေချိုးနေတာ ဖြစ်သည် ။
ကံကောင်းလှတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် ခုနလေးတင်က အမေဖြစ်သူကို ကိုယ်လုံးတီး မြင်တွေ့လိုက်ရပြီး အခုတဖန် သမီးငယ် နုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုပါ ကိုယ်တုံးလုံး အနေအထားနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ တခါထဲ ပြေးဝင်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေတောင် ပေါက်သွားရသည် ။
ဝါဇင်သိန်းလေးရဲ့ ဖြူနုဝင်းဖန့်တဲ့ အသားအရည် တောင့်တင်း ဖွံ့ထွားတဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ပကတိအတိုင်း ကွက်
ကွက်ကွင်းကွင်း တွေ့နေရတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် သူ့ကာကီဘောင်းဘီ ရဲ့ ဇစ်ကို ဆွဲချပြီး သူ့တန်ဆာကို
ဆွဲထုတ်လို့ ကွင်းတိုက်ကစားမိရတဲ့ အထိ တဏှာရာဂစိတ်တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထကြွနေရပြီ ။
အောင်ကောင်းသော်သည် ထီးတောင် ဆောင်းမနေတော့ဘဲ သူ့ကားလေးဆီကို အမြန်ပြေးလိုက်သည် ။
မိုးတွေက တဝုန်းဝုန်းနဲ့ တအား ချနေပြီ ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ရွှေငါးကားလေးရဲ့ နောက်မီးအနီလေးတွေကို သူ တွေ့နေရဆဲ အချိန် တရားရုံး ကွက်လပ်ထဲကနေ မောင်းထွက်လိုက်သည်
။ ဒေါ်မွှေးမွှေး အနောက်ကို သူ လိုက်သွားလိုက်သည် ။
ဘာကြောင့် လိုက်မိသလဲတော့ သူ့ဖါသာလည်း မသိ ။ ဟိုတညကလို ချောင်းရင်း နစ်ကက် ( တုံးလုံး ) အလှအပတွေများ တွေ့ရမလား ဆိုတဲ့
ရမက်စိတ်နဲ့ လိုက်မိသည်လို့ ဆိုရမလား ။
ဟိုတညက သရက်ပင်ကြီး ဂွကြားမှာ ထိုင်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး အလှအပတွေကိုရော သမီးငယ်လေး ဝါဇင်သိန်းရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး
ကိုယ်လေးတွေကိုရော ပီပီပြင်ပြင် ရှုစားရင်း သူ့တန်ဆာကြီးကို ကွင်းတိုက်မိရတဲ့ အထိ သူ ထန်ခဲ့သည် ။
ဝါဇင်သိန်းရဲ့ နုနုထွတ်ထွတ် ရင်သားလှလှလေးတွေနဲ့ အမွှေးတောင် မပေါက်သေးတဲ့ အင်္ဂါစပ်လေးကို အာသာ တငမ်းငမ်းနဲ့ ငေးစိုက်ကြည့်ပြီး
တန်ဆာကို ဆောင့်ဆောင့်ထုတာ ။ ပြင်းထန်တဲ့သုတ်ရည်တွေ အများကြီး ပန်းထွက်သွားရတဲ့အထိဘဲ ။
တအားထန်တာမှ နောက် ပြူတင်းပေါက်တခုကိုပါ သစ်ကိုင်းကူးပြီး ချောင်းကြည့်ခဲ့လို့ သမီးကြီး ပြာဇင်သိန်း စာကျက်နေတဲ့ အချိန် သူမရဲ့ ဆူဖြိုးတဲ့
ရင်သားစိုင်တွေကို ကိုင်စမ်းတာတွေ ပေါင်ကြားကို ကိုင်နှိုက်တာတွေကိုပါ မြင်ခဲ့ရပြီး နောက်ထပ်တခါ ကွင်းတိုက်မိခဲ့ရသည် ။
တော်တော်ကြာကြာ ထိုင်ငေးပြီးမှ လာရာလမ်းအတိုင်း ခြံထဲက ပြန်ထွက်ခဲ့သည် ။ ခြံစောင့်ကြီး စောအားမေကတော့ တခူးခူး တခေါခေါနဲ့
အိပ်လို့ ကောင်းနေဆဲ ။ ဒီနောက်ပိုင်း သုံးရက်မှာလည်း
ဒေါ်မွှေးမွှေး အလုပ်က အပြန်တွေမှာ အောင်ကောင်းသော် လိုက်ချောင်းဖို့ ကြံခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးက အိမ်တန်း မပြန်ဘဲ
တခြားအိမ်တွေကို ခြေရှည်နေခဲ့လို့ သူ မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ ဒီနေ့ မိုးတွေ သဲသဲမဲမဲ ရွာနေတဲ့အချိန် အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ စိတ်တွေ
ပိုလို့တောင် ဖေါက်ပြန်နေခဲ့လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးအိမ်ကို မိုးထဲလေထဲ လိုက်သွားပြီး ချောင်းမြောင်းဖို့ ကြံစည်မိသည် ။
မိုးတွေလေတွေက သူ့တဏှာရာဂမီးကို မငြှိမ်းသတ်နိုင်ဘူး ။ တညီးညီးတောက်လောင်နေတဲ့ ရာဂမီးလျံက မ
လုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးနေသည် ။
အဲဒီနေ့က တဏှာစိတ် လွန်ကဲပေမယ့်ထန်ပေမယ့် အောင်ကောင်းသော်သည် လွန်မသွားစေဖို့တော့ သူ့ဖါသာ စိတ်ကို ထိန်းသည်
။ ရှေ့ဆက်တိုးရင် အမှားကြီးတွေ ကျူးလွန်မိမှာမို့အသာ ပြန်နောက်ဆုတ်ခဲ့သည် ။ အခုလည်း မကောင်းမှုကို လုပ်ချင်တဲ့ သူ့စိတ်ရိုင်းတွေရဲ့
လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် မိုးထဲလေထဲ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ကား အနောက်ကို လိုက်သွားမိခဲ့ပြန်ပြီ ။ ဒီနေ့လည်း တကယ်ဆို ဒီလောက် မိုးသည်းလေထန်နေတာ
ကိုယ့်ဖါသာ ရမ်ပုလင်းလေးနဲ့ ဖီလင်ယူနေရမှာ ။ အရက်သောက်ချင်စိတ်ထက် ဗိုလ်မှူးကတော် မိန်းမချောကြီးနဲ့ သမီးချော နှစ်ယောက်ကို ထန်ပြီး
ဘာများတွေ့ရမြင်ရအုံးမလဲ ဆိုပြီး လိုက်သွားလိုက်တာ ။
ကံဇာတာ ထပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တက်ဖိရခွင့်များ ကြုံဆုံလေမလား ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ သူ့စိတ်ကူးယဉ်တခုပေါ့ ။
အောင်ကောင်းသော်သည် ဥပဒေဘက်တော်သား တယောက် ဖြစ်နေပေမယ့် ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ဖို့ ဝန်
လေးတဲ့လူတယောက် မဟုတ်ဘူး ။ ငယ်ငယ်ထဲက ကိုယ့်တအိမ်ထဲ အတူတူ နေခဲ့တဲ့ အမညီမ ဝမ်းကွဲတွေ ရေချိုးတာ
အိမ်သာတက်တာတွေကိုတောင် ချောင်းကြည့်ခဲ့သလို လက်သွက်သွက်နဲ့ အိမ်မှာ ကူညီဖို့ ခေါ်ထားတဲ့ အိမ်ဖေါ် မိန်းကလေးတွေကို ကြံစည်ခဲ့
ကျင့်ခဲ့တဲ့ လူတယောက် ။
ဗီဇအကျင့်ဆိုတာ ဖျောက်ဖို့ ခက်ခဲလှသည် ။ ရဲတယောက် ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူသည်
မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကမ်းကုန်အောင် မိုက်ကန်းသူ ဖြစ်သည် ။ ငွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း
စိတ်ချရသူ မဟုတ် ။ သဒ္ဒါလို့ ပေးကျွေးတာကို ယူမည် ဆိုတဲ့ ရဲမျိုး မဟုတ်ဘူး ။ ဟောက်စား ခြောက်စား အတင်းတောင်းတဲ့ ရဲဆိုးတယောက် ဖြစ်သည် ။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူမသိအောင် ရုပ်ဖျက်နိုင်ဖို့ မျက်စိပေါက်တွေဘဲ ပါတဲ့ သိုးမွှေးခေါင်းစွပ်တခုလည်း
သူ့ကားထဲမှာ ပါခဲ့သည် ။ မလွဲမရှောင်သာလို့ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရရင် ခုခံဖို့ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်လည်း သူ့
ခါးကြားမှာ ပါခဲ့သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မိုးတွေ လေတွေ ကြားထဲ ကြိုးစားပြီး မောင်းနေသည် ။
လမ်းပေါ်မှာ ကား အသွားအလာ သိပ် မရှိ ။ တချို့ကားတွေ လမ်းဘေးမှာ ရပ်နေတာကိုတော့ တွေ့သည် ။ သမီးတွေ ဆီကို ဖုန်းခေါ်ကြည့်သည် ။ မရတော့ ။ ရပ်လိုက် မောင်းလိုက်နဲ့ စိတ်တွေလည်း ခြောက်ခြားနေသည် ။
မိုးတွေ မဲမှောင်ပြီး မိုးသက်မုန်တိုင်း ကျတော့မည် ဆိုတာကို သူမ သိရက်နဲ့ စောစော အိမ် ဘာလို့ မပြန်လိုက်ပါလိမ့်..ဆိုတဲ့ နောင်တ တရားလည်း ရနေသည် ။
ကံအားလျော်စွာ ဖြည်းဖြည်း မောင်းရင်း မိမိတို့ ခြံထိပ်ကို ရောက်သွားရလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး စိတ်နည်းနည်း သက်သာသွားသည် ။ ခြံတံခါးထိပ်ကို ကား ထိုးလိုက်တဲ့အချိန် ဝါးခမောက်ကြီးဆောင်းထားတဲ့ဖထီး ပြေးလာနေတာကို သည်းနေတဲ့ မိုးတွေလေတွေ ကြားထဲ မြင်လိုက်ရသည် ။
ဟောင်းအိုနေတဲ့ ရဲအချုပ်ကားကြီးသည် သည်းလွန်းတဲ့ လေပါတဲ့ မိုးထဲ အပြင်းမောင်းနေသည် ။
မဲမဲမှောင်နေပြီ ။ သည် ကားပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ အချုပ်သားတွေကို တရားရုံး အချုပ်ထဲကို ပို့နိုင်ဖို့က အရေးကြီးနေလို့ ရဲကြပ်ကြီးတင်ရှိန်သည်
ကားမောင်းနေတဲ့ ရဲကြပ်ထူးမောင်လင်းကို အမြန်မောင်းဖို့ဘဲ တလစပ် ပြောနေသည် ။ ထူးမောင်လင်းသည် ဆရာကြီးတင်ရှိန် ပြောနေတာကို
မကြိုက်ပေမယ့် သူက အင်ချပ်မို့ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ နေနေသည် ။ စောစောကလို သီချင်းတော့ အော်မဆိုတော့ ။
လေမိုးထန်နေလို့ ရှေ့ကို သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ ။ ကားရဲ့ ရေသုတ် ဝိုက်ပါတွေကလည်း မကောင်း ။
ရဲကြပ်ကြီးတင်ရှိန်ရဲ့ စကားပြောစက်လေးသည် တဖက်က တယောက်ယောက် ခေါ်နေသည် ဆိုတာ သိပေမယ့် ဝူးဝူးဝါးဝါး အသံတွေနဲ့
ပြတ်ပြတ်သားသား မကြားရ ။
“ကြိုးကြာက မိုးပြာ…ကြိုးကြာက မိုးပြာ….အသံအား မကောင်းဘူး ….ကြားမကြား….အကြောင်းပြန်……”
အော်ပြောနေပေမယ့် ဘာမှ မသဲကွဲ ။ ရွှေသူဌေးထောင်က ခေါ်တာ ဖြစ်ဖို့ များသည် ။
ကားနောက်ဆုံးခုံမှာ ထိုင်ငိုက်လာတဲ့ ရဲသားလေး ထွန်းထွန်းကတော့ ခေါင်းငိုက်ဆိုက်… အိပ်ပျော်နေသည် ။
အချုပ်သားတွေကတော့ အိပ်တဲ့လူက အိပ် မအိပ်ဘဲ အချင်းချင်း စကားပြောနေတဲ့လူတွေလည်း ရှိ
မိုးများလွန်းလို့ တျို့နေရာတွေမှာ ကားလမ်းပေါ် ရေကျော်နေသည် ။
တဖက်တချက်မှာ လယ်ကွင်းတွေဘဲ ရှိတဲ့ သရက်ကုန်းဖက်ကို ရောက်နေပြီ ။ နောက်ထပ် ဆယ်မိုင်လောက် လိုသေးသည် ။
တဗျောင်းဗျောင်းတဝေါဝေါ မိုးသံတွေ ဆူညံနေတဲ့ကြားမှာ ကျော်ထဲ ( ခေါ်) ကရင်လေးသည် လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားရင်း
သူနဲ့ လက်ထိပ် တွဲခတ်ထားတဲ့ ကျွဲကြီးကို “ ကားစုတ်ကြီး မိုးရေထဲ ပျက်ပါစေ..ဒါမှ မဟုတ် ဘီးပေါက်ပါစေ….လို့ ဆုတောင်းနေတယ်…ကိုကျွဲကြီး…..လစ်တာနဲ့
တွယ်ပစ်မယ်နော်..ညီတယ် မဟုတ်လား….” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တော့ ကျွဲကြီးက “ ညီတယ်…ကရင်လေး..စိမ်လိုက်လေ….အဖေါ်ကောင်းလို့ကတော့ မဟာ အဝီဇိထိ ဆင်းပြီး ပျော်ပစ်
လိုက်မယ်….” လို့ ပြန်ပြောသည် ။ ကျော်ထဲက “ အဖိုးကြီးဆီမှာ အတိုတလက် အနောက်ဆုံးက ကောင်လေးဆီမှာ အရှည်တလက် ရှိတယ်..ဆော်ရင် သူတို့ နှစ်ယောက်ကို အရင် အမိအရ ဆော်ရ
မယ်..”လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက “ ငါက ပုလိပ်ဆို ကြည့်လို့ မရတာ ကြာပြီ….ငါ့ကို ဖမ်းတုံးက အချုပ်ခန်းထဲမှာ ဝိုင်း နှိပ်ကြတာ အတော် ခံခဲ့ရတယ်….ငါ တေးထားခဲ့တာကွ….ဆော်လို့က
တော့ အသေ ဆော်မှာ…”လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးသည် သေဒါဏ် ဖြစ်စေ တသက်တကျွန်းဖြစ်စေ ကျမှာမို့ အခွင့်အရေး ရရင် ထွက်ပြေးချင်နေသူ ။
“ ထွက်ပြေးဖို့ အခွင့်သာပြီး လွတ်သွားလို့ကတော့လားကွာ….နုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေကို ထပ်ကို ကျင့်အုံးမှာ…ဟင်း……ငါ ကျင့်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကွာ…ခုထိ….မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေ
တယ်…ပိန်ကပ်ကပ်လေး ဆိုတော့ ပေါင်သွယ်သွယ်လေးတွေ ကြားထဲ အဖုတ်က ဖေါင်းကြီး ကြီးသလို ထင်ရတယ်…. ငါက သတ်ပစ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး..ဖမ်းခေါ်ထားပြီး လိုးနေချင်တာ…ပေါ်မှာ ကြောက်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်ရတာ…တောက်..နှမျောစရာ စောက်ဖုတ်လေးကွာ……”
“ အိုး..ကျုပ် သတ်လိုက်တဲ့ တရားဟောဆရာမလေးတွေရော အဲလိုဘဲဗျ…..ဖြူဖွေးဆွတ်ပြီး တအား ကြည့်ကောင်းတာ…လိုးလို့ကို အားမရဘူး…..လိုးပြီးရင်း လိုးချင်ရင်း….နှစ်ယောက်စလုံးကို စိတ်
တိုင်းကျ လိုးပစ်လိုက်တာ…ဖင်ကိုပါ လိုးတာ..ဟင်း….ခင်ဗျားလိုဘဲ ပေါ်မှာ စိုးလို့ ရှင်းပစ်လိုက်ရတာ…”
သူတို့ အနောက် ခုံတန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ချစ်တိုင်းကောင်းနဲ့ ဖိုးကံကောင်းတို့က ခေါင်းတွေ ငိုက်ကျနေပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ပုံတွေ ပေမယ့် တကယ်တော့ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည် ။
ကားပျက်ရင် ဖြစ်စေ ကားဘီးပေါက်ရင် ဖြစ်စေ ကားရပ်သွားလို့ကတော့ လွတ်မြောက်လမ်းကို ရှာဖို့ စိတ်တွေထဲ ကြံစည်နေကြသည် ။
“ တခုခု ဖြစ်လို့ကတော့ နီးရာ ရဲကို ဆော်သာဆော်….ပြေးကြမယ်……”
ဖိုးကံကောင်းသည်လည်း ထောင် နှစ်ရှည် ကျမှာကို ကြောက်နေတာမို့ ထွက်ပြေးလို့ အခွင့်သာရင် ပြောချင်နေတာ…။
သူတို့ရဲ့ အနောက်ဖက် ခုံတန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်း ဆိုတဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် မိန်းမကြီးကို နှစ်ခါ ကျင့်ခဲ့တဲ့ ကောင်ကတော့ မျက်လုံး ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ ဟိုကြည့်လိုက် ဒီကြည့်လိုက်နဲ့ ..။ သူ့လက်တွေက တုန်ခါနေသည် ။ သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း ကား တခုခု ဖြစ်ပြီး ရပ်သွားလို့ကတော့ ရဲတွေကို ဝင်လုံး တိုက်ခိုက်ပြီး သေနတ်လုယူမည် လို့ စဉ်းစား နေသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် သည် အမှုနဲ့ ထောင်မကျလည်း ကျစရာ အမှုတွေက အများကြီးဘဲ ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ မိသားစု ကိုက မဟုတ်တာကို လုပ်ဖို့ ဝန်လေးတဲ့ လူတွေ မဟုတ်ဘူး ။ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူတန်းစားတွေထဲက ။
အိမ်ဖေါ်တွေကို နှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာ နံမည်ကြီးသည် ။ ခွေးလှောင်အိမ်ထဲ ထည့်ပြီး အပြစ်ပေးတာတို့….သံပူပြားနဲ့ ကျောကုန်းကို ကပ်တာတို့. လုပ်လွန်းလို့ သိသူတွေက တိုင်လို့ အမှုဖြစ်နေတဲ့ တန်းလန်းကြီး ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် မျက်နှာမြင် အမြင်ကပ်ပါစေ လို့ ပြောစရာ မထီမဲ့မြင် ပုံစံနဲ့ လူတွေက “ ရိုက်ပေါက် ” လို့ ပြောတာ ခံရတဲ့ကောင် ။
မုဒိန်းမှုနဲ့ ရုံးထုတ်လာတာကို နေကာမျက်မှန် အနက်ကြီး တပ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ အတော့်ကို အထင်ရောက်နေတဲ့ကောင် ။
အချုပ်ခံနေရလို့ စိတ်ဆင်းရဲ မစားနိုင် မသောက်နိုင် ဖြစ်ပြီး ပိန်ကျသွားရမှာ ။ သူကတော့ အိမ်က လာပို့တဲ့ ဒန်ပေါက်ထမင်းနဲ့ မလိုင်လုံးတွေ အချုပ်ထဲ တအားနင်း စားပြီး ဘိုက်ကလေးက စူလို့ ။
ထွက်ပြေးနိုင်လို့ကတော့ ငွေကြေး ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုကမို့ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် တဖက်နိုင်ငံတွေကို တိမ်းရှောင်သွားနိုင်တဲ့ လူ ။
ကားမောင်းနေတဲ့ ရဲကြပ်ထူးမောင်လင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ အချုပ်သားငါးယောက်နဲ့ လမ်းမှာ ကားပျက်မှာကို စိုးရိမ်နေသည် ။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး တခုလုံးသည် မဲမဲမှောင်ပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်တာက
လည်း ကားတောင် လှုပ်လှုပ်သွားသည် ။ အရှေ့ကို ကောင်းကောင်း သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရလို့ မောင်းသာ မောင်းနေရတယ်…အခြေအနေက မကောင်းဘူး…။
မိုးခြိမ်းသံတွေက ကျယ်လောင်ပြင်းထန်လှသည် ။
ရဲကြပ်ကြီးတင်ရှိန်လည်း ရာသီဥတု ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့အထဲ သူတို့ ရောက်နေရတာကို တော်တော် စိုးရိမ်နေသည် ။ မတော်တဆ အချုပ်သားတွေ လွတ်ပြေးသွားမှာကို အရမ်း စိတ်ပူနေသည် ။ ညာဖက် ခါးမှာ အိတ်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးရဲ့ ဒင်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားနေမိသည် ။
ကားပေါ်ပါလာတဲ့ အချုပ်သား အားလုံးသည် မုဒိန်းမှု တရားခံများ ဖြစ်ပြီး တချို့က မုဒိန်းကျင့်အပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်နေသည် ။ အပြစ်ကျပါက သေဒါဏ် ကျခံနိုင်တဲ့ လူတွေ ပါသည် ။ သူတို့သည်အခွင့်အရေးရရင် ခုခံပြီး ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြမည် ဆိုတာကို ဆရာကြီးတင်ရှိန် သိနေသည် ။
ကားနောက်ဆုံးခုံတန်းမှာ လိုက်ပါလာတဲ့ ရဲသားထွန်းထွန်းကို သူ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ထွန်းထွန်းသည် ခေါင်းငိုက်ဆိုက်ကျပြီး အိပ်ပျော်နေသည် ။ ဟာ…သောက်ဂွဘဲ…ဒီကောင်..သေနတ်ကြီး ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အိပ်ပျော်နေတယ်….။ သူ ထွန်းထွန်းကို မအိပ်ဖို့ ပြောချင်ပေမယ့် သူနဲ့ အလှမ်းဝေးနေသည် ။ ကားရပ်ပြီး ဆင်းပြောမှ ရမည် ။ ထွန်းထွန်းကို ရှေ့ခြမ်းနဲ့ နောက်ခြမ်း ခြားထားတဲ့ အပေါက်လေးကနေ ကြည့်လိုက်တာ ဖြစ်သည် ။
အရှေ့ကို ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့ အချိန် သူ ကားမောင်းသူ ထူးမောင်လင်းကို တအားအော်ပြီး သတိပေးလိုက်သည် ။
သို့ပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ ။ ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးနေတဲ့ ဧရာမ ကျွဲကြီးတကောင်ကို ထူးမောင်လင်း မမြင်ဘဲ အုန်းကနဲနေအောင် တိုက်ချလိုက်သည် ။
အချုပ်ကားကြီး လမ်းရဲ့ညာဖက်ကို ယိုင်လဲကျသွားသည် ။
ခါးပတ်ပတ်မထားတဲ့ ထူးမောင်လင်းသည် ဆရာကြီးတင်ရှိန် အပေါ်ကို ပိကျလာသည် ။ ဆရာကြီးတင်ရှိန်သည် ခေါင်းနဲ့ ကားခေါင်မိုး ပြင်းထန်စွာ တိုက်မိသွားလို့ အား…ကနဲ အော်လိုက်သံကြီးနဲ့
ထူးမောင်လင်းရဲ့ ကိုယ်ကြီး အောက်မှာ ပိနေသည် ။
ကျော်ထဲ နဲ့ ကျွဲကြီး မျှော်လင့်ထားတာ တကယ် ဖြစ်သွားပြီ ။
ကျွဲကို တိုက်မိလိုက်ကထဲက ကျော်ထဲနဲ့ ကျွဲကြီးသည် ကားထိုင်ခုံ လက်ရန်းတွေကို စွဲမြဲအေင် ကိုင်ထားလိုက်ကြသလို ခြေထောက်တွေနဲ့လည်း အရှေ့ခုံနောက်ကျောဖက်ကို တောင့်ခံ ကန်ထားလိုက်ကြတာကြောင့် ကားကြီး တိမ်းမှောက်သွားတဲ့ အချိန် ထိမိခိုက်မိခြင်း မရှိကြဘူး ။
သူတို့ အနောက်ဖက် ကပ်ရက်က ထိုင်နေကြတဲ့ ချစ်တိုင်းကောင်းနဲ့ ဖိုးကံကောင်းတို့ကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး သတိလက်လွတ် လိုက်ပါလာကြတာမို့ ကားလဲမှောက်ရော လွင့်ထွက်ပြီး ကားရှေ့ခန်းနဲ့ ခြားထားတဲ့ ဘော်ဒီနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်မိသွားကြရသည် ။
သူတို့ အနောက်က မောင်မောင်မျိုးလင်း ကတော့ ကျွဲကို တိုက်မိလိုက်တာနဲ့ ခုံတန်းက သံပိုက်လက်ကိုင်တွေကို တအားဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ခြေထောက်တွေကလည်း ကျားကန်ထားလိုက်တာမို့ ဘာမှ မဖြစ် ။
သူ့ဘေးကို လဲပြိုလာတဲ့ သေနတ်ကိုင် ရဲသားထွန်းထွန်းသည် ခေါင်းဆောင့်မိသွားလို့ ခေါင်းကို လက်နဲ့ အုပ်ပြီး တအူးအူး အော်နေသည် ။ သေနတ်တခြား လူတခြား…။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည်
သွက်လက်စွာနဲ့ ကျနေတဲ့ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို ပြေးကောက်ဆွဲလိုက်ပြီး သေနတ်ဒင်နဲ့ ရဲသားထွန်းထွန်းကို ထုရိုက်လေသည် ။
ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ လူးလဲထပြီး အချုပ်ကား တံခါးကနေ ထွက်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။ “ ပေးစမ်း….” ကျွဲကြီးက မောင်မောင်မျိုးလင်း ရဲ့ လက်ထဲက ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို ဆွဲယူလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးသည် မိုးတွေ လေတွေ သည်းထန်နေတဲ့ ကြားထဲ ကားရှေ့ခန်းဆီကို ပြေးသွားသည် ။ ကားမောင်းသူ ထူးမောင်လင်းသည် သတိလစ်နေပေမယ့် ရဲကြပ်ကြီးတင်ရှိန်ကတော့ ကားတံခါးထဲက အတင်းတိုးထွက်လာသည် ။ ကျွဲကြီးနဲ့ ပက်ပင်းတိုးပြီ ။ ခါးက ခြောက်လုံးပြူးကို ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ကျွဲကြီးက ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဒင်နဲ့ လွှဲရိုက်ထည့်လိုက်လို့ နောက်ပြန်လန်ကျသွားတဲ့
အချိန် ကျွဲကြီးက “ ကျော်ထဲ..သေနတ်ကို ယူလိုက်..” လို့ အော်ပြောရင်း ဆရာကြီးတင်ရှိန်ရဲ့ ခေါင်းကို ရိုင်ဖယ်ဒင်နဲ့ ဆက်တိုက် ထုချနေသည် ။
တလောကလုံးသည် မဲမဲမှောင်ပြီး လေရော မိုးရော သဲထန် ကြမ်းတမ်းနေသည် ။ အချုပ်သား ငါးယောက် အနက် ကျော်ထဲ ကျွဲကြီး မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ လွတ်မြောက် ထွက်ပြေးသွားသည် ။
ကျွဲကြီးရဲ့ လက်ထဲမှာ ရိုင်ဖယ်သေနတ် ကျော်ထဲရဲ့ လက်ထဲမှာ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်တွေ ကိုင်လျက် ။
ရွှေသူဌေးထောင်က ထောင်မှူး သိန်းမင်းကျော်သည် တရားရုံး အချုပ်စခန်းကို ဖုန်း လှမ်းဆက်နေသည် ။ အချုပ်ကား ရောက်လာပြီလား လို့ မေးသည် ။
အချုပ်စခန်းက မရောက်သေးဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ ထောင်မှူး သိန်းမင်းကျော် တအား စိတ်ပူနေသည် ။ အထျုပ်ကားက ရဲတွေကို စကားပြောစက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ကြည့်ပေမယ့် မရ ။
ထောင်မှူးသိန်းမင်းကျော်သည် အချုပ်ကားသည် အစုတ်ကြီးမို့ လမ်း တနေရာမှာ ပျက်နေသလား ဘီးပေါက်နေသလား တခုခုဘဲ လို့ တွက်ဆ ထင်မြင်ပြီး သည် အချုပ်ကား အခြေအနေကို လိုက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်နေပြီမို့ ရေသာက ခရိုင်ရဲမှူးဆီကို ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်သည် ။
ဒ်ါမွှေးမွှေး အိမ်ထဲကို ရောက်တော့ တကိုယ်လုံး မိုးရေတွေ စိုရွှဲနေသည် ။
အခုထိ မီးမပျက်သေးတာ တော်သေးသည် ။ နော်ပိုးက ဒေါ်မွှေးမွှေး အတွက် ဟင်းထမင်းတွေ နွှေးပေးဖို့ ပြင်ပေမယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးက “ ငါ မစားသေးဘူး..ရေချိုးလိုက်အုံးမယ်….နော်ပိုး..ညည်းလည်း ရေမိုးချိုးလိုက်အုံး..ညည်းကို ကြည့်ရတာ ညစ်ပတ်ပေရေနေသလိုဘဲ….” လို့ ပြောလိုက်ပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်သည် ။
နော်ပိုးလည်း သူမ ညစ်ပတ်ပေရေပြီး ရေမချိုးရသေးတာ သူမဖါသာ သိလို့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ အောက်ထပ် အိမ်အနောက်ဖက်က သူမ အခန်းလေးထဲကို ဝင်သည် ။ သည် အိမ်ကြီးမှာက အပေါ်ထပ်မှာ ရေချိုးခန်း ၂ခန်း.. ရှိပြီးအောက်ထပ်မှာက ရေချိုးခန်း တခန်း ရှိသည် ။
နော်ပိုးလည်း ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစား တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ညအိပ်ရင်း ဝတ်တဲ့ ထမိန်အနွမ်းလေးကို ဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန် မှန်ထဲကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါ အဝတ်အစား မပါတဲ့ ဖြူဝင်း အချိုးကျတဲ့ သူမကိုယ်လုံးတွေကို မြင်လိုက်ရလို့ ထမိန်ကို ရင်လျားဖို့ကို နှေးဆိုင်းသွားသည် ။ မှန်ထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ မိမိရဲ့ တင်းမာကော့လုံးနေတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာ…သေးကျဉ်တဲ့ခါးလေး ..စွင့်ဝိုက်ကားနေတဲ့ တင်ပါးတွေ..ဝမ်းပျဉ်သား ရှပ်ရှပ် ..ပေါင်တန်သွယ် နှစ်ဖက်ကို ကြည့်မိပြီး..“ ငါတယ် မိုက်ပါလား ” လို့ စဉ်းစားရင်း ခိကနဲ ရယ်လိုက်
မိသည် ။ အပျိုဖျန်းကလေး ပီပီ စိတ်ကူးယဉ်တတ်နေပြီမို့ ငါ့ကို ဘဲတွေ တအား သဘောကျကြမှာဘဲ လို့ တွေးမိနေသည် ။
ရင်သားစိုင်တွေက ရင်သီးကလေးတွေ အေးကနဲ ခံစားလိုက်လို့ ငါ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေပါလား ဆိုတာကို သ
တိဝင်ပြီး ကမန်းကတန်း ထမိန်လေးကို ရင်လျားလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းနဲ့ မနီးမဝေးက ရေချိုးခန်းလေးထဲကို ပြေးသွားလိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် စိုနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး ရေချိုးပြီးရင် ပြန်ဝတ်ဖို့ ထမိန်ခပ်နွမ်း
နွမ်း တထည်ကို ဆွဲယူကာ ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်လိုက်သည် ။ ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့မို့ ရေပူပူနဲ့ ရေချိုးဖို့ ပြင်လိုက်သည်။
သည် အချိန်မှာ မိုးသည်းသည်းထဲ အောင်ကောင်းသော်သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ရဲ့ ခြံကြီး အနောက်ကနေ စည်းရိုးကို
ကျော်ဝင်ပြီး ခြံထဲကို ရောက်နေပြီ ။ စစ်ရောင် မိုးကာ အင်္ကျီနဲ့ မိုးကာဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားတဲ့ အောင်ကောင်း
သော်သည် ခြံစောင့် အဖိုးကြီးရဲ့ တဲထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အဖိုးကြီးသည် အရင်တခါလို မအိပ်သေး ။
စာအုပ်လေး တအုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စား စွာနဲ့ ဖတ်နေသည် ။
အောင်ကောင်းသော် အိမ်ကြီးအနားကို ချဉ်းကပ်သွားလိုက်သည် ။
ဟင်…အောက်ထပ် အိမ်အနောက်ဖက်က အခန်းလေး မီးလင်းနေပါလား…..။
အလင်းရောင် တစွန်းတစ ထွက်နေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေး အနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်ပြီး အထဲကို ချောင်းကြည့်
အိုး….အောင်ကောင်းသော် တအား အံ့သြသွားသည် ။
သည်အိမ်ကို လာချောင်းလိုက်တိုင်း အောင်ကောင်းသော် ကံကောင်းလှချည်လား ။
ချောင်းမိတဲ့ အခန်းက ရေချိုးခန်းလေး ဖြစ်နေပြီး ဖြူဖွေး အချိုးကျ ပြေပြစ်တဲ့ ကရင်မလေးသည် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့
ရေချိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
ဟာ….အို…လှလိုက်တဲ့ကောင်မလေး ။ မိုးတွေက တဝေါဝေါ တဝှီးဝှီးနဲ့ သည်းထန်နေဆဲ အချိန် အောင်ကောင်းသော်သည် အထဲက ကရင်မလေးရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တွေကို အာသာတငန်းငန်းနဲ့ ချောင်းနေသည် ။
မီးရောင်အောက်မှာ ရေစိုနေတဲ့ ကရင်မလေးရဲ့ ဖြူဖွေးတဲ့ အသားအရည်..တင်းကော့နေတဲ့ ရင်သားစိုင်တွေ..
နီနီရဲရဲ ရင်သီးလေးတွေက တအား လှလွန်းနေသည် ။ ရေပန်းအောက်မှာ ရပ်ရင်း သူမကိုယ်တွေကို သူမလက်
အစုံနဲ့ ပွတ်တိုက်ရင်း ရေချိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းက အောင်ကောင်းသော်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ငေးမောနေမိ
စေပြီး ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် တန်ဆာကြီးကိုလည်း မာကျော ထောင်မတ်စေပြီ ။
ကရင်မလေးသည် သူမပေါင်တန်သွယ် နှစ်ချောင်းရဲ့ ကြားက ဖေါင်းမို့မို့ အင်္ဂါစပ်လေးကို ဆပ်ပြာနဲ့ ပွတ်ဆေး
နေတဲ့အချိန် မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ ပါးစပ်လေး မဟတဟနဲ့ ဖီလင်တက်သွားတာကို အောင်ကောင်းသော်
တွေ့လိုက်ရလို့ အမွှေးရေးရေးပါးပါး ပေါက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်လေးကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း သူ့ပေါင်ကြားက တန်ဆာ
ကို လက်နဲ့ ဖမ်းစမ်း ဆုပ်ကိုင် လိုက်မိသွားသည် ။
သည်ညတော့ အခွင့်သာရင် ခေါင်းစွပ် စွပ်ပြီး သည်ကရင်မ ချောချောလေးကို တက်ဆော်လိုက်မည် လို့လည်း တွေးလိုက်သည် ။ ကာမ အမှောင် ဖုံးသွားတဲ့အခါ လူတွေသည် အသိတရား ပျောက်ကုန်သည် ။ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့် ရဲအရာရှိတယောက်သည် မုဒိန်းကောင် အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားတော့မည် ။
ရေချိုးပြီးသွားလို့ တန်းပေါ် လွှားထားတဲ့ ထမိန်နွမ်းလေးကို လှမ်းယူလိုက်တဲ့ အချိန် ကရင်မလေးရဲ့ တင်ပါးအိအိ
တွေကို အနောက်ဖက်ကနေ အောင်ကောင်းသော် မြင်လိုက်ရသည် ။ အိုး..လှလိုက်တဲ့ ဖင်တုံးတွေ….။
ရှီး…..သည် ကောင်မလေးကို လိုးပစ်ချင်တဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေက တားမရ ဆီးမရ ပေါ်ပေါက်နေသည် ။ ထမိန်ကို ရင်
လျားအပြီး တဘက်လေး ခြုံပြီး ကောင်မလေး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်သွားသည် ။ ရေချိုးခန်းရဲ့မီးလည်း ပိတ်သွား
အောင်ကောင်းသော် ရွှေ့ပြီ ။ အရင်တခေါက်ကလိုဘဲ သရက်ပင်ကြီးပေါ်ကို တက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။
သည်နေ့က မိုးတွေက သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေသလို လေကလည်း ပြင်းထန်နေသည် ။ သရက်ပင်ကြီးပေါ်ကို သူ
တက်ဖို့ တော်တော် ခဲယဉ်းသည် ။ အောင်ကောင်းသော်သည် တဏှာစိတ်တွေ ပြင်းထန်နေတာမို့ မရရအောင်
တက်သည် ။ မီးလင်းနေတဲ့ အပေါ်ထပ် အခန်းထဲကို သစ်ကိုင်းပေါ် ခွထိုင်ပြီး ချောင်းလိုက်သည် ။
အိုး…..အပါးပါး….တယ်လည်း ကံကောင်းနေတဲ့ ငါပါလား….။
သည် အခန်းက ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အိပ်ခန်း ဆိုတာ ပြီးတဲ့တဲ့ အခေါက် ချောင်းကထဲက သူ သိထားပြီး ဖြစ်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ရေချိုးဖို့ သူမကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပြီးခါမှ ဖုန်း မြည်လာလို့ ဖုန်းကောက်ကိုင်
ကာ စကားပြောနေသည် ။ လက်တဖက်ထဲမှာက ထမိန်တထည်ကို ကိုင်ထားသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အချိုးကျတဲ့
ကိုယ်လုံးတွေကို မီးရောင်အောက်မှာ အကုန်လုံး မြင်နေရသည် ။ တင်းမာဆဲ လုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားကြီးတွေက တ
အားကို လှလွန်းနေသည် ။ နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုတွေက ဖြူဖွေးတဲ့ ရင်သားစိုင်တွေရဲ့ ခလယ်မှာ ထင်းထင်းကြီး
တွေ့နေရသည် ။ အမွှေးရိပ်ထားတဲ့ အင်္ဂါစပ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီးကလည်း ထင်းနေပြီး
နှုတ်ခမ်းသား ထူထူ နှစ်ဖတ်ကလည်း ပြေးယက်ချင်စရာကြီး ။
အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ တန်ဆာမှာ စောစောထဲက ကရင်မလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးကို မြင်ရကထဲက မာ
တင်းတောင်မတ်နေခဲ့တာ အခုလို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ တောင့်တင်း အချိုးကျတဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတွေကို မြင်
လိုက်ရတော့ ပေါက်ကွဲထွက်လုမတတ် တင်းမာ ကြီးထွားပြီး မတ်မတ်ထောင်နေပြီ ။
တတ်နိုင်ရင် ဖြစ်နိုင်ရင် သစ်ကိုင်းပေါ်ကနေ ပြူတင်းပေါက်ဆီကို လှမ်းဝင်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြမ်းပစ်လိုက်ချင်
စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်နေသည် ။
တုံးလုံးလဲနေတဲ့ အချုပ်ကားကြီးဆီကနေ လမ်းအတိုင်း ကျွဲကြီး….ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ ထွက်ခွာခဲ့
ကြသည် ။ ရဲသုံးယောက်တော့ သေပြီ ထင်တာဘဲကွ…..လို့ ကျွဲကြီးက ကျော်ထဲကို လှည့်ပြောလိုက်သည် ။
မိုးထဲလေထဲမို့ အော်ပြောရသည် ။
မိုးကြိုးတွေကလည်း တချိမ်းချိမ်း တဒိန်းဒိန်း ပစ်နေသည် ။
အင်း..ဟို ဆရာမကို ကျင့်တဲ့ နှစ်ကောင်လည်း လျောပြီ ထင်တာဘဲ..စကားမေးမရတော့ဘူး…သွေးတွေလည်း တ
အားရွှဲနေတယ်…ကိုကျွဲကြီးရေ…လို့ ကျော်ထဲက ပြန်အော်ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို အသင့်အနေအထားနဲ့ ကိုင်ထားရင်း…“ ဒို့ ဒီလို လမ်းမအတိုင်း သွားနေလို့ မဖြစ်
ဘူးကွ..ကျော်ထဲရ…အချုပ်ကား ရောက်မလာလို့ လိုက်လာရင် ဒီကောင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက် တိုးလိမ့်မယ်…ဒို့ လမ်း
ဘေးကို ဖဲ့ဆင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ်…ရွာနီးချုပ်စပ်က အိမ်တအိမ် တဲတတဲမှာ ခဏ ဝင်ခိုလိုက်ကြရအောင်..”
လို့ ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ကို ပြောလိုက်သည် ။
“ ဟုတ်တယ်..ကိုကျွဲကြီး….ကျုပ်တို့ကို ပိုက်စိပ်တိုက် လိုက်ရှာကြမှာဘဲ….” လို့ နောက်ဆုံးက လိုက်လာတဲ့ မောင်
မောင်မျိုးလင်းက ပြောလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကမို့ အခုလို လွတ်လာ
ရတာကို စိတ်ထဲက အရမ်း ဝမ်းသာနေသည် ။ ကျွဲကြီးတို့နဲ့ အလိုက်သင့် ခဏနေပြီး အိမ်နဲ့ ဆက်သွယ်..ငွေ
တောင်းလိုက်ပြီး နယ်စပ်ဖက်ကို ပြေးဖို့ စဉ်းစားထားသည် ။ ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲကိုတော့ သူနဲ့ ခေါ်မသွားချင် ။
သူတို့နဲ့ ဆိုရင် လူသိပြီး ခဏလေး ပြန်မိမှာ ဖြစ်သည် ။ သူတို့အတွက်လည်း သူ တာဝန်မယူနိုင် ။ မယူချင် ။
ကျော်ထဲကလည်း နယ်စပ်ဖက်ကိုဘဲ ပြေးမယ်လို့ မှန်းထားတာပါဘဲ ။ ကျွဲကြီးကိုတော့ သူ အားကိုးတာ အမှန် ။
ကျွဲကြီးက ခွန်အားဗလ တောင့်တင်းသန်မာသလို မိုက်တွင်းကလည်း နက်တော့ လောလောဆယ် ရဲတွေနဲ့ ထပ်
ရင်ဆိုင်ရရင်လည်း ကျွဲကြီးက အားကိုးရမယ့်ကောင်ကြီး ။
သူတို့ လမ်းမ အတိုင်း မသွားကြတော့ဘဲ ဘေးဖက်က လယ်ကွင်းတွေ ထဲကို ဆင်းလိုက်ကြသည် ။
“ ဟေ့..ဟိုးရှေ့မှာ မီးရောင်လဲ့လဲ့ မြင်တယ်…ရွာဘဲ ဖြစ်မယ်…အဲ့နားကို ကပ်သွား ကြည့်ရအောင်….” လို့ ကျွဲ
ကြီးက လက်နဲ့ ညွှန်ပြလိုက်လို့ ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ သူ ပြရာဖက်ကို ကြည့်လိုက်ကြသည် ။
မိုးသည်းထန်လွန်းနေလို့ မမြင်ရဘူး ။
ကျွဲကြီးက..“ ဟာ ဒီကောင်တွေ စောက်ကန်းတွေဘဲ..ဟောဟိုမှာလေကွာ….မီးရောင်..မင်းအဘ မီးရောင်..” လို့ သေ
ချာ ညွှန်ပြသည် ။
မီးရောင်ဆီကို သူတို့ ဦးတည်ပြီး လျှောက်လိုက်ကြသည် ။
မိုးသည်းနေတဲ့အထဲ လေကလည်း တဝှီးဝှီးတိုက်နေသည် ။ သည်မိုးထဲလေထဲ မှာ ကျွဲကြီး ကျော်ထဲ ( ခေါ် )
ကရင်လေး..မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ မီးရောင်လဲ့လဲ့ဆီကို ဦးတည်ပြီး ဗွက်တောထဲ ရုန်းသွားလိုက်ကြသည် ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးလာတဲ့အခါ နှစ်ထပ် တိုက်ခံအိမ်ကြီး တလုံး ဆိုတာကို သူတို့ တွေ့လိုက်ကြသည် ။
“ ငါတို့ ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ ဝင်ခိုနေကြမယ်…စားစရာ စားလို့ရမယ်….အင်း….ရာသီဥတု ငြိမ်သွားတဲ့အထိပေါ့…”
ကျွဲကြီးက အတွင်းက သော့ခတ်ထားတဲ့ ခြံတံခါးကြီး အနားကို ကပ်သွားပြီး အိမ်ကြီးဆီကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း
ပြောလိုက်သည် ။ အိမ်ကြီး အရှေ့ဖက် ခြံတံခါးနားက စည်းရိုးက မြင့်နေသလို အပေါ်ပိုင်းမှာ သံဆူးကြိုးလိပ်
တွေလည်း ရှိလိုက ဝင်ရ ခက်သည် ။
“ အနောက်ဖက်ကို သွားကြည့်ရအောင်….”
သူတို့ သုံးယောက် ခြံရဲ့ အနောက်ဖက်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ခြံစည်းရိုးနဲ့ ကပ်ပြီး ရှိနေတဲ့ သစ်ပင်တပင်ပေါ်ကို တက်နိုင်ရင် အဲဒီ သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခြံထဲကို ခုန်ချလိုက်လို့ ရသည် လို့ ကျော်ထဲက ပြောလို့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ ကရင်လေး..မဆိုးဘူး….အိုင်ကျူမြင့်တယ်..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျော်ထဲ ပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့ သစ်ပင်ပေါ်ကို ဖက်တက်လိုက်ကြသည် ။ မိုးရေကြောင့် စိုချောနေလို့ တက်ရ
ခက်ပေမယ့် ကျွဲကြီးက သူတို့ကို တွန်းတင်ပေးလို့ သူတို့ သစ်ပင်ပေါ်ကို ရောက်သွားကြသည် ။ သစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခုန်ချလိုက်ကြတော့ ခြံထဲကို ရောက်သွားသည် ။
ကျွဲကြီးက သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်ထားရင်း ပြောလိုက်သည် ။ “ လူ ရှိနိုင်တယ်….” ကျော်ထဲကလည်း လက်ထဲက ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်
ကို အသင့်ချိန်ရွယ်ထားရင်း “ ရန်မူလာရင် ပစ်သာပစ်ဗျာ…” လို့ ပြောလိုက်သည်။
မီးလင်းနေတဲ့ တဲကလေးထဲမှာ လူရှိဖို့များလို့ သူတို့သုံးယောက် တဲကလေးနားကို တိုးကပ် ချဉ်းကပ်သွားကြတဲ့အချိန် “ ဟိတ်..မင်းတို့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု ဖြစ်နေပြီကွ..အခု ချက်ချင်း ခြံထဲက ထွက်..” လို့ အော်ပြောလိုက်တဲ့ အသံကြောင့် သူတို့ ခြာကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတော့ ဒုတ်ကြီးတချောင်းကို ညာလက်က ကိုင်..လက်နှိပ်မီးကို ဘယ်လက်က ကိုင်ထားတဲ့ အဖိုးကြီး တယောက်ကို သူတို့သုံးယောက် တွေ့လိုက်ကြရသည် ။
ကျွဲကြီးက မိုးလေတွေ ကြားထဲ ကြွက်စုတ်လေး တကောင်လို ဖြစ်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရင်း
မျက်နှာထား တည်တည်ကြီးနဲ့ ရှိနေရာကနေ ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ဖြစ်လာပြီး….“ ဘူဒါးကြီး…..နောက်နေတာလား…” လို့
မေးလိုက်သည် ။ အဖိုးကြီးက “ မင်းတို့ ထွက်ကြကွာ..ငါ ရဲခေါ်လိုက်ရမလား…..” လို့ ပြောတဲ့အခါ သူတို့သုံးယောက်သည် ဘူးထွားထွားထွား……လို့ ပြိုင်တူ အော်ဟစ်လိုက်ကြပြီး….“ ရယ်ရတယ်…ဘဲကြီး…..မင်းဘိုးအေ ရဲတွေက ဘယ်လိုမှ မလာနိုင်ဘူး….ကားလမ်းရေကျော်နေတယ်….နောက်ပြီးတော့ ပြောချင်းပြောရင် ကျုပ်တို့က
ပြောရမှာ…ဒါ ဘာလဲ သိလား….” လို့ ကျွဲကြီးက ပြန်ပြောလိုက်ရင်း ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပြောင်းနဲ့ အဖိုးကြီးဘိုက်ကို
ဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ ကျော်ထဲကလည်း မြန်ဆန်စွာနဲ့ အဖိုးကြီးဆီကို လွှားကနဲ တိုးကပ်လိုက်ပြီးသေနတ်ဒင်နဲ့ အဖိုးကြီးရဲ့ ခေါင်းကို ထုချလိုက်သည် ။
အသံတောင် မထွက်နိုင်ဘဲ အဖိုးကြီး မြေကြီးပေါ်ကို ဒူးထောက်ရက် ကျသွားတဲ့အခါ မောင်မောင်မျိုးလင်းက အဖိုးကြီးကို ဆောင့်ကန်ထည့်
လိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက အဖိုးကြီးရဲ့ နားထင်ကို သေနတ်ပြောင်း နဲ့ တေ့လိုက်သည် ။
ကျော်ထဲက “ ကိုကျွဲကြီး…ထားလိုက်ပါ..သူ ကျုပ်တို့ကို ဘာမှ ရန်မမူနိုင်ပါဘူး….” လို့ တားလိုက်လို့ ကျွဲကြီးလည်း
သေနတ် ခလုပ်ကို မဖြုတ်ဘဲ..“ ခွေးကြီးး..အေးဆေးနေ ….သေသွားမယ်…” လို့ အော်ဟစ် ကြိမ်းမောင်းရင်း အဖိုးကြီးကို တဲလေးထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းကို “ ကြိုး… ရှာကြ..ဒီ အိုနာကြီးကို ကြိုး တုပ်ထားရမယ်…..” လို့ အော်ပြောလိုက်သည် ။
သည် အချိန်မှာ သစ်ပင်ဂွကြားက အောင်ကောင်းသော်သည် ခြံထဲက လူသံတွေ ကြားလိုက်လို့ အသာငြိမ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေသည် ။ ဘယ်သူတွေလဲ..မိုးလေ သည်းနေတဲ့အထဲ ရောက်လာတယ် ဆိုတော့ လူကောင်းသူကောင်းတွေတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး…ဓါးပြသူခိုးတွေဘဲ ဖြစ်မယ် ..လို့ တွက်ဆရင်း သူဆောင်လာတဲ့ သူ့ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို အသင့် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးတို့ ဖထီးကို တဲထဲကို ဆွဲသွင်းသွားကြတာတွေကို သူ တွေ့နေရသည် ။ ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ရဲ့လက်ထဲက သေနတ်တွေကို သူတွေ့သည် ။ သူ့မှာလည်း သေနတ် ရှိပေမယ့် ရင်မဆိုင်ရဲဘူး ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ ရဲနဲ့ လူဆိုး ရင်ဆိုင်ကြရင် ပစ်ခတ်ကြရင် ရဲတွေက နိုင်ပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့မှာ ကျတော့ လူဆိုးလက်ချက်နဲ့ ရဲတွေ ခံသွားရနိုင်သည် ။
သည် အချိန်မှာ အိမ်ကြီးထဲက ထမင်းစားခန်းမှာဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ထမင်းစားခန်းထဲမှာ နော်ပိုး ပြင်ပေးတဲ့ ထမင်းဟင်းကို တယောက်ထဲ ထိုင်စားနေသည် ။
သမီးနှစ်ယောက်က အပေါ်ထပ်က သူတို့ အခန်းတွေထဲ ရှိနေကြသည် ။
“ နော်ပိုး..နင် စားပြီးတာ သေချာလား….”
“ ဟုတ်..အန်တီ..ကျမ စားပြီးပါပြီ….”
“ အိုးတွေ အကုန် ဆေးကြောပြီးပြီလား….”
“ နဲနဲတော့ ဆေးဖို့ ကျန်သေးတယ်….အန်တီ…ကျမ သွားဆေးလိုက်မယ်…”
နော်ပိုး ထမင်းစားခန်းရဲ့ အနောက်ဖက်က မီးဖိုချောင်ဆီကို သွားလိုက်ပြီး အိုးနှစ်လုံးကို ဆေးကြောဖို့ ရေဘုံဘိုင်ရှိရာကို ရောက်သွားတဲ့အချိန် လူရိပ်တခု လိုလို မြင်လိုက်လို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မဲမဲ၀၀ လူထွားကြီး တယောက်ကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရသည် ။
ဘယ်အချိန်က ဘယ်လို အိမ်ထဲကို ရောက်လာသလဲ မသိဘူး ။
တံခါး ဖျက်ပြီး ဝင်တာလား ။ မိုးသံလေသံကြောင့် အသံ မကြားမိလိုက်ကြ ။
နော်ပိုးရဲ့ ကြောက်လန့်တကြား အော်သံကြီး ထွက်လာလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း..“ နော်ပိုး..ဘာဖြစ်လဲ..ဘာဖြစ်လဲ”
လို့ အော်မေးရင်း မီးဖိုချောင်ထဲကို ပြေးလာသည် ။
“ တိတ်စမ်း ကောင်မ….”
ကျွဲကြီးက နော်ပိုး ကို ပါးရိုက်လိုက်လို့ နော်ပိုး ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားတဲ့အချိန် ဒေါ်မွှေးမွှေး ကျွဲကြီးရဲ့ အနားကို
ရောက်လာသည် ။ ကျွဲကြီးက ရိုင်ဖယ်သေနတ်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ချိန်လိုက်သည် ။
“ ဟိတ်….ခိုင်းတာလုပ်..ခံမပြောနဲ့…ပစ်သတ်ပစ်လိုက်မယ် …”
ဒေါ်မွှေးမွှေး လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ။ ကြောင်ကြည့်နေဆဲ မှောင်ရိပ်ထဲက ကျော်ထဲ နဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်း
တို့ ထွက်လာကြသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက မီးဖိုချောင်က မီးရောင်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သေသေချာချာ စူးစိုက်ကြည့်ပြီး….“ ဟား…..ဒါ…ဒါ…..ကျုပ်တို့ကို တရားစွဲတဲ့ စွဲချရှေ့နေမကြီး ဘဲ….ဟင်း…ကြုံမှ ကြုံတတ်ပလေ…..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ကျော်ထဲကလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေး အနားကို သေနတ် တကားကားနဲ့ တိုးကပ်လာသည် ။
“ ဟေ့ ကောင်မကြီး….နင့်ကို တရားခွင်မှာ ထဲက ငါ ကြည့်နေတာ…နင့်ဖင်တုံးတွေ တော်တော် တောင့်တယ်..
တောက်….နင့်ကို ငါ လိုးမှ ဖြစ်တော့မယ်….” လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို အငမ်းမရ မျက်လုံးပြူးကာ ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက “ အေးဟ….တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာ….သည်ဟာမကြီးနဲ့ လာတိုးနေတယ်….ခင်ဗျား နံမည် ဘာလဲ…”လို့ အနားတိုးလာပြီး ပြောလိုက် မေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ပထမတကြိမ် ရုံးထုတ်တုံးက သူတို့ကို အမှုစ စွဲဆိုခဲ့တုံးက မြင်ဖူးခဲ့သည် ။ အားလုံး မုဒိန်း ၃၇၆ သမားတွေ ။ ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကောင်၂ကောင်က
ကျင့်လည်းကျင့် သတ်လည်း သတ်တဲ့ကောင်တွေ ။ လူသတ်မုဒိန်းသမားတွေ ။
ဒေါ်မွှေးမွှေး တအား လန့်နေသည် ။ တအား တုန်ကြောက်နေသည် ။ အပေါ်ထပ်မှာ ရှိတဲ့ သမီးနှစ်ယောက် အ
တွက်လည်း တအား စိတ်တွေ ပူနေမိသည် ။
“ ဟဲ့ကောင်မ..နင်ံနံမည် ဘာလဲ မေးနေတယ်လေ …”
ကျော်ထဲက ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်တုံးတွေကို လက်ဝါးကြီးနဲ့ ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်သည် ။
“ ငါ့နံမည် ..မွှေးမွှေး….”
“ နင်တို့ အိမ်သား ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ…….”
ဒေါ်မွှေးမွှေး မဖြေ ။
ကျော်ထဲရဲ့ လက်ဝါးကြီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ဖင်တုံးတွေအပေါ်ကို ထပ်မံ မိတ်ဆက်သွားသည် ။
ကျွဲကြီးက သူပါးရိုက်လိုက်လို့ လဲကျသွားတဲ့ နော်ပိုးကို သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်ပြီး…“ အဟေး….ဒီဟာမလေးကတော်တော် နိပ်တယ်ဟ……ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး…ဖင်တွေ ရင်တွေလည်း တောင့်တယ်..ဟိတ်..နင် ကရင်မလား…”လို့ မေးသည် ။ နော်ပိုးလည်း ခေါင်းလေး ညှိမ့်ပြရင်း..“ ဟုတ်တယ်…” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက နော်ပိုးကို ဆွဲထူလိုက်သည် ။
သည် အချိန်မှာ အပေါ်ထပ်က ပြာဇင်သိန်းနဲ့ဝါဇင်သိန်းတို့သည် နော်ပိုးရဲ့ အော်သံ ကျွဲကြီး ကျော်ထဲတို့ရဲ့ အသံ
တွေကြောင့် လှေခါးက ပြေးဆင်းပြီး ရောက်လာကြသည် ။
မုဒိန်းကောင် သုံးကောင်သည် ရုတ်တရက် ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ထပ် ရောက်ချလာလို့ အံ့အားသင့်နေကြ
ရာက သူတို့ မျက်နှာကြမ်းကြမ်းတွေလည်း ပြုံးပြုံးကြီးတွေ ဖြစ်သွားကြသည် ။
အင်း..စားရကံကြုံလို့ မုတ်ဆိတ်တော့ ပျားစွဲပြီဟ……ဟေဟေ့…..။
ကျွဲကြီးသည် သူ့သွားဝါဝါကြီးတွေ အားလုံးပေါ်သွားအောင် ရယ်လိုက်သည် ။
ကျော်ထဲသည် ညဝတ်အင်္ကျီလေး ကိုယ်စီနဲ့ တအား လှနေတဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ညီအမနှစ်ယောက်ကို သေသေချာချာ လေ့လာနေသည် ။ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့သည် သူတို့သုံးယောက်ကို တွေ့တာနဲ့ လှည့်ပြေးဖို့ ကြံလိုက်ပေမယ့် မောင်မောင်မျိုးလင်းက သူတို့အရှေ့ကနေ ထုပ်စီးတိုးတမ်း ကစားတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ ကာဆီး တားဆီးလိုက်သည် ။
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ ပြေးလို့ မရဘူး ။
“ ဟိတ်..အားလုံး..ထိုင်ကြ…ထိုင်…ထိုင်…ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်…” လို့ ကျွဲကြီးက အမိန့်ပေးလိုက်သည် ။
မိန်းမလေးယောက်…သူတို့က သုံးယောက် ။ ကျွဲကြီး စိတ်ထဲမှာ ဖင်တုံးတောင့်တောင့် အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကျင့်မလား….ဖြူဖြူတောင့်တောင့်ငယ်ငယ် ကရင်မလေးကို ကျင့်မလား…ဝေခွဲလို့ မရသေး ။ အဟီးဟီး…အားလုံးကို တယောက်ပြီ တယောက် ကျင့်မယ်………ဟားဟားဟားဟား……။
ကျော်ထဲကတော့ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ကို သွားရည်တမြားမြားနဲ့ သဘောကျနေပြီ ။
လှလှပပ တောင့်တောင့် တင်းတင်းလေးတွေ…။
အိမ်အပြင် သစ်ပင်ဂွကြားက အောင်ကောင်းသော်သည် အိမ်ကြီးထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ချောင်းမြောင်းကြည့်
နေသည် ။ သူ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိသေး ။ လူဆိုးသုံးကောင်..သေနတ်နှစ်လက် …သူက တယောက်ထဲ သေနတ်က တလက် ။
မိုးတွေကတော့ သည်းထန်နေဆဲ ။ လျှပ်စီးတွေ လက် မိုးတွေ ချုန်းနေဆဲ ။ အိမ်ကြီးထဲက မိန်းမလေးယောက်
ကတော့ မုဒိန်းသမားသုံးယောက်နဲ့ တိုးနေပြီ ။
မာင်မောင်မျိုးလင်းက “ ကဲ…ဘိုက်ဆာတဲ့ ကိစ္စကို အရင် ဖြေရှင်းလိုက်ရအောင်လား..ဘိုက်ပြည့်သွားတော့မှ
လီးဆာတဲ့ကိစ္စကို လုပ်ကြတာပေါ့..အေးဆေးပေါ့ဗျာ..တညလုံး အချိန်ရှိပါတယ်….ရဲတွေက ကျနော်တို့ကို လမ်းတလျှောက်ဘဲ လိုက်ရှာအုံးမှာပါ…..ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ အောင်းနေတာက ကျုပ်တို့အတွက် အစာလည်းဝဟီး….ဟိုဟာလည်းဝ…..အိုကေစိုပြေတယ်…..ကဲ ကောင်မလေး..ကရင်မလေး နင်က ထမင်းချက်လား..အိမ်ဖေါ်လား…စားစရာတွေ ထုတ်ခဲ့စမ်း…..” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျော်ထဲကလည်း ထောက်ခံသည် ။
“ ဟုတ်တယ်…ထောင်က နေ့လည်စာဘဲ စားခဲ့ရတာ…ဆာနေတာ အူကို လိန်နေတာဘဲ…အစား အရင် စားလိုက်
ကျွဲကြီးကတော့ မိုးရေရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ သူ့အင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း အဝတ်မဲ့သွားတဲ့ ကျွဲကြီး ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို ကြည့်မိလိုက်ပြီးမှ ကမန်းကတန်း မျက်စိလွှဲ
လိုက်သည် ။ မဲမဲတုတ်တုတ် ဗလကြီးကို မြင်လိုက်ရတာ ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲ ထသွားရသည် ။
ရင်ဘတ်မှာကလည်း အမွှေးလိန်ကောက်ကောက်တွေ အများကြီးနဲ့ ။
ပြာဇင်..ဝါဇင်နဲ့ နော်ပိုးတို့သည် ယောက်ျား အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ အပျိုလေးတွေမို့ မောင်မောင်မျိုးလင်း
ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေထဲ လီးဆာတဲ့ ကိစ္စ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြောင့် မျက်နှာလေးတွေ နီမြန်းပြီး မျက်စိမျက်နှာ
ပျက်သွားကြသည် ။ “လီး ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သူတို့တတွေ အတွက် တအား ရိုင်းစိုင်းနေသည်လေ ။
လူဆိုးကောင်တွေ က မကြာခင် သူတို့ကို မတရားကျင့်ကြလိမ့်မည် ဆိုတာလည်း သိနေကြလို့ တအား ကြောက်
နော်ပိုးလည်း စောစောကဘဲ ရေခဲသေတ္တာထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်းဘူးတွေ ခွက်တွေကို အကုန် ယူချ
လာပြီး ထမင်းစား စားပွဲကြီးပေါ်ကို တင်လိုက်သည် ။
“ ဟား….ဟင်းတွေ အစုံဘဲ……ကဲ ဆွဲမယ်ဟေ့….လာ…လာ…ဆွဲကြစို့…..” လို့ ကျွဲကြီးက အသံသြသြကြီးနဲ့
“ ကျမ…ဟင်းတွေ နွှေးလိုက်မယ်…” လို့ နော်ပိုးက ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြည့်ဘဲ ခေါင်းလေး ငုံ့ထားရင်း ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက “ နွှေးမနေနဲ့..ငါတို့ ဒီအတိုင်း စားမယ်..ငါတို့ စားနေတုံး ထွက်ပြေးတာတို့ ဖုန်းခေါ်တာတို့ တခုခု
မလုပ်ကြနဲ့နော်…ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်နေကြ….ပြီးတော့ ငါ့ကို အဆိုး မဆိုနဲ့..ငါက တအား ရက်စက်တဲ့ကောင်…” လို့
ပြောရင်း ထမင်းတွေကို ဇလုံကြီးတလုံးထဲ ထည့် ဟင်းတွေ လောင်းပုံပြီး အားရပါးရ စားလေသည် ။
“ ဟို၂ကောင်..စားလေ…စားထား….နောက် ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ မသိဘူး …သေပြေးရှင်ပြေး ပြေးချင် ပြေးရမှာ….
ဟားဟား….ထမင်းငတ်ချင် ငတ်မယ်…..” လို့လည်း ပါးလုပ်ပါးလောင်းနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျော်ထဲလည်း လက်ထဲ ကိုင်ထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးကို ခါးကြားထိုးလိုက်ပြီး ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေကို ခွက်တလုံးထဲ
ရောထည့်ပုံပြီး အားရပါးရ စားလေသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ပေါင်မုန့်
တလုံးကို ယူပြီး ဆွဲဖဲ့ကာ နော်ပိုး လာချပေးထားတဲ့ ဟင်းတွေထဲက အမဲသားဟင်းတွေနဲ့ စားသည် ။
“ ဟားဟား…ထမင်းဝရင် လီးတောင်တော့မယ်….စောက်ပတ် အကောင်းစားလေးတွေ တော့ အဖွင့်ခံရတော့မယ်”
လို့ ကျော်ထဲက စားရင်း ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ ကျော်ထဲရဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် စိတ်ထွက်သွားပြီး…“ မိုက်ရိုင်းလှချည်
လား..နင့်မှာ အမေနဲ့ နှမ မရှိဘူးလား..ကောင်လေး….” လို့ အော်လိုက်သည် ။
ကျော်ထဲ လက်ထဲက ထမင်းလုပ်ကို ခွက်ထဲ ပြန်ချလိုက်သည် ။
“ စောက်ကောင်မ..ခွေးမ….နင်က ဘာမို့ ငါ့ကို ဒီလိုလေသံနဲ့ ဟောင်တာလဲ…အခု ငါတို့က အင်ချပ် ဖြစ်နေပြီ ..
ငါတို့ လုပ်သမျှ နင်တို့ ခံရမယ်..ငါတို့ ခိုင်းတာကို လုပ်ရမယ်…” လို့ အော်ရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ဟင်းတွေ ပေနေ
တဲ့ ညာလက်နဲ့ လက်ပြန် ရိုက်ထည့်လိုက်သည် ။
လူသေးသလောက် လက်ပြင်းတဲ့ကျော်ထဲရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာက ကြမ်းပေါ်ကို
လဲကျသွားသည် ။ ပြာဇင် ဝါဇင်နဲ့ နော်ပိုးတို့က ပြေးထူမဖို့ လုပ်တော့ ကျော်ထဲက သူတို့ကိုလည်း လိုက်ရိုက်
“ ခွေးမ…လူပါးဝတယ်…ခဏကြာရင်..နင် ငါ့လီးကို စုတ်ရမယ်..လရည်ကို မြိုရမယ်….ဟင်း…..နင့်ဖင်ပေါက်ကိုလည်း
မျက်လုံးကလယ်ကလယ်နဲ့ ပြောနေတဲ့ ကျော်ထဲသည် စိတ်ဝေဒနာသည် တယောက် ဆိုတာ သေချာနေသည် ။
ကျွဲကြီးကတော့ ထမင်း အပီစားရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို စိတ်ကူးနဲ့ အဝတ်တွေ ချွတ်ကြည့်နေသည် ။ တကယ်တော့သူက သက်ငယ်မုဒိန်းကောင် တယောက် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလို အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းမကို စိတ်မဝင်စားဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒေါသတကြီး ပြန်အော်ဆဲချင်နေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သူ ကျင့်ချင်နေသည် ။ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်သမျှကို ခံတဲ့ မိန်းမကို သူ ကျင့်ရတာထက် ပြန်လှန် ရန်တွေ့ ခုခံတဲ့ မိန်းမကို နှိပ်စက်ပြီး ကျင့်တာကို သူ ကြိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းမတွေကို စိတ်လာတဲ့ကောင်။သူကလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ချိန်နေသည်။
ဘယ်လိုလုပ်မယ်..ကျင့်မယ် ဆိုတာကို ကြိုတင် တွေးဆနေသည် ။ တကယ်တော့ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ကျွဲ
ကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့က သေနတ်တွေကိုင်ပြီး ဆရာကြီး လုပ်နေတာကို စိတ်ထဲက မကျေနပ်လှ ။ သူသည် ကော
လိပ်ကျောင်းသား..ပညာတတ် ။ သူဌေးသားလည်း ဖြစ်သည် ။ တကယ်တမ်း ခေါင်းဆောင်သင့်တာက သူ ။
အခုတော့ သေနတ်လည်း မကိုင်ရ ။ နောက်လိုက် ဖြစ်နေသည် ။ ဒါကြောင့် သည် အိမ်ကြီးထဲ ဝင်လာကာစ က
တွေ့တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး သားလှီးဓါးတချောင်းကို ကိုင်ထားခဲ့သည် ။ အရေးရယ် အကြောင်းရယ် ဆိုရင် လက်နက်
ရှိမှ ဖြစ်မယ် မဟုတ်လား ။
ဒေါ်မွှေးမွှေး တအား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေသည် ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူ့ရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တရားခံ မုဒိန်းကောင်တွေသည် သူ့အိမ်ကို ဆိုက်ဆိုက်
မြိုက်မြိုက်ကြီး ရောက်လာခဲ့သည် ။
ဘယ်ဘဝက မကောင်းမှုတွေကြောင့်လဲ ။
သူတို့သည် အားလုံးကို မုဒိန်းကျင့်ကြမှာ သေချာနေသည် ။ သူတို့အမှုတွေကို ဒေါ်မွှေးမွှေး သေသေချာချာ
လေ့လာပြီးခဲ့တာမို့ ကျင့်ပြီးရင် သက်သေမရှိအောင် သတ်ပစ်လေ့ရှိကြတဲ့ လူသတ်သမားတွေ ဆိုတာကို
မုဒိန်းအကျင့်ခံရပြီး အသတ်ခံရတော့မှာမို့ သည် မုဒိန်းလူသတ်ကောင်တွေရဲ့ လက်ထဲက လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မ
လား ဆိုတာက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်း ကြီးစွာ ဖြစ်စေသည် ။
သမီးလေး နှစ်ယောက်တော့ ဒုက္ခပါဘဲ ။
သူ့ယောက်ျားကို အပြစ်တင်မိသည် ။ အားကိုးလို့ မရတဲ့ အဖိုးကြီး ဖထီး စောအားမေကို ခြံစောင့်ခိုင်းတဲ့ သူ့
ယောက်ျားကို ကျိန်ဆဲနေမိသည် ။ ဖထီးတယောက် ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်…..။
အောင်ကောင်းသော်သည် ပြူတင်းပေါက်ကနေ အိမ်ကြီးထဲကို ချောင်းကြည့်နေသည် ။
သူသည် ရဲတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် သတ္တိကောင်းသူတယောက် မဟုတ် ။ သူ ဒီကို တဏှာထ တဏှာရူးပြီး လာ
ခဲ့တာ ။ အခုလို လူဆိုးတွေနဲ့ ပက်ပင်းတိုးလိမ့်မယ် လို့မထင်ထားခဲ့ ။ သူ့မှာ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ် ပါခဲ့
ပေမယ့် သည် သေနတ်တွေက အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထဲက သေနတ်တွေ ။ မီးကျိုးမောင်းပျက်တွေ ။ ပစ်ရင် ထွက်ချင်
မှ ထွက်တဲ့ဟာတွေ ။ ကျည်ဆံတွေကလည်း အိုဟောင်းနေသည် ။ စိတ်မချရ ။ အားမကိုးရ ။
လူဆိုးတွေကလည်း သေနတ်တွေနဲ့ ။ ရင်ဆိုင် ပစ်ကြပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာက မထွက်ဘဲ သူ့ဟာက ထွက်သွား
ရင်လည်း မရှုမလှ သေပွဲဝင်ရမည် ။
ဒါကြောင့် အထဲက တိရစ္ဆာန်သုံးကောင်ကို သူ မယှဉ်ရဲဘူး ။ အကောင်းဆုံးက ပြင်သာက ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်
ခေါ်တာဘဲ ။ သစ်ပင်ကွယ်ကို သွားပြီး မိုးကာအင်္ကျီနဲ့ ကာပြီး သူ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ဟန်းဖုန်းကို ထုတ်ပြီး
ခေါ်လိုက်သည် ။ ဖုန်းက အလုပ်မလုပ်ဘူး ။
ဟိုငတိတွေကတော့ ထမင်းစားပြီးရင် စော်တွေကို မုဒိန်းကျင့်မှာ သေချာတယ် ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မုဒိန်းကျင့်
ချင်တဲ့ကောင် ပေမယ့် အခုလို မုဒိန်းကျင့်ခံရမယ့် ကောင်မလေးတွေကို တွေ့တော့ သနားသည် ။ အကျင့်မခံ
စေချင်ဘူး ။ ရဲတယောက် အနေနဲ့ တားဆီးရမယ် ဆိုတာလည်း သူ့စိတ်ထဲမှာ ရှိနေသည် ။ ကြောက်ကလည်း ကြောက်သည် ။
သူ ဘာလုပ်မလဲ ။ ဒူးတွေက မိုးအေးတာကြောင့် တုန်တာလား…။ ကြောက်နေလို့ တုန်နေတာလား ။ နှစ်ခုလုံးကြောင့် ဖြစ်မည် ။
ရွှေသူဌေးထောင်က လှမ်း ဆက်သွယ်လို့ ရောက်မလာတဲ့ အချုပ်ကားကြီးကို လိုက်ရှာဖို့ ပြင်သာရဲစခန်းက ရဲ
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာနဲ့ အဖွဲ့သည် နစ်ဆန်း အမျိုးအစား ပစ်ကပ်ရဲကားကြီးနဲ့ ပြင်သာကနေ ရွှေသူဌေးထောင်
ကို သွားတဲ့ လမ်းအတိုင်း ထွက်လာကြသည် ။
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် အခုလို လေထဲမိုးထဲ ထွက်လာရတာကို မလိုလား မနှစ်မြို့ဘဲ တလမ်းလုံး ကျိန်ဆဲ
တိုင်းထွာလာသည် ။ သူ မလာချင်ပေမယ့် အမိန့်ကို နာခံရတာမို့ သူ ထွက်လာရတာ ။ ခရိုင်ရဲမှူးက ခပ်မာမာ
နဲ့ ချက်ချင်း လိုက်သွားဖို့ သူ့ကို အမိန့်ပေးခဲ့သည် ။
သည်လောက် လေရော မိုးရော ထန်သည်းနေတဲ့အထဲ သွားခိုင်းတာတော့ လွန်တာပေါ့ ။ စိတ်ထဲက ( သူက
တော့ မသွားဘူး…ဟွန်း…တော်တော် တရားတဲ့လူ…) လို့ အပြစ်တင်နေသည် ။
သူတို့ တုံးလုံး လဲနေတဲ့ အချုပ်ကားကြီးကို တွေ့သည် ။ လေမိုးကြားထဲ ဆင်းကြရသည် ။ အချုပ်သား နှစ်
ယောက်ကို သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ညည်းငြူနေတာကို တွေ့ကြရပေမယ့် အချုပ်ကားစောင့် ရဲသုံးယောက်ကတော့
အသက် မရှိတော့ ။ သူတို့ရဲ့ သေနတ်တွေလည်း မတွေ့တော့ ။
စခန်းမှူး ဦးအောင်မြသာတို့ ပျားတုတ်ပြီ ။ အလုပ်များပြီ ။ အထက်လူကြီးတွေ စိတ်ဝင်စားကြပြီ ။
ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားတဲ့ မုဒိန်းလူသတ် တရားခံတွေကို အပူတပြင်း လိုက်လံ ရှာဖွေဖို့ ထိပ်ဆုံးက ရဲချုပ်
က အမိန့်တွေ ပေးပြီ ။ အထူး တပ်ဖွဲ့ ( ဆွပ် ) တွေကိုလည်း လွှတ်လိုက်ပြီလို့ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သူ့ဆီကို
စက်နဲ့ အကြောင်းကြားသည် ။
ကျွဲကြီးသည် ဇလုံထဲ ပုံထည့်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေကို လက်နဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး ပလုပ်ပလောင်း စားနေရင်းက
ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေကြရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ပြာဇင် ဝါဇင်နဲ့ နော်ပိုးတို့ကို မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ကြည့်နေသည် ။
ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေကြလို့ သူတို့ရဲ့ပေါင်တန်တွေနဲ့ တင်ပါးတွေကို ထင်းထင်းပေါ်ပေါ် မြင်နေရသည် ။
လည်ဟိုက် ဘလောက်စ် အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး..ပြာဇင်တို့ရဲ့ ရင်သား အပေါ်ပိုင်းတွေကိုလည်း တ
စွန်းတစ မြင်နေရသည် ။ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင် သည် အိမ်နေရင်း ညအိပ်တော့မှာမို့ ဘလောက်စ် အတွင်းမှာ အတွင်း
ခံ ဘရာစီယာ မဝတ်ထားကြ ။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရင်စိုင်တွေက ရင်သီးဖုလေးတွေကို အင်္ကျီသား ပါးပါး မှာ
ထင်းနေအောင် မြင်ရသည် ။
ကျွဲကြီးရဲ့ စိတ်တွေ ဒိုင်းကနဲ ထကြွသွားသည် ။
ပေါင်ကြားက တန်ဆာချောင်းကြီး နိုးကြွလာသည် ။ ခေါင်းကြီး ဆတ်ကနဲ ထောင်လာသည် ။
တဏှာရမက်ကြီးလွန်းတဲ့ကျွဲကြီးသည် အဖမ်းခံရ ထောင်ထဲရောက်သွားကထဲက မိန်းမ မလိုးရဘဲ ပြတ်လပ်နေခဲ့
တာ ကြာပြီမို့ သူတို့ လက်ခုပ်ထဲ ရောက်နေရတဲ့သည် စော်တွေကို ကြည့်ပြီး တအား လိုးချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြ
နေသည် ။ သူတို့တတွေရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ရင်စိုင်တွေကို စူးရှတဲ့ မျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေသည်။
ပြီးတော့..သူတို့တတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကြည့်နေသည် ။
သူ့လီးကို စုတ်ရမယ့် သည် နှုတ်ခမ်းတွေထဲ နော်ပိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူအိအိလေးတွေကို သူ အကြိုက်ဆုံး ။
တဝကြီး စုတ်ခိုင်းပြီး သည် ပါးစပ်လေးထဲကို သသူ ထိုးညှောင့် လိုးလိုက်မည် လို့ အားခဲထားသည် ။
သူတို့ အားလုံး စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားနေကြသည် ။ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေကြသည် ။
လူဆိုး မုဒိန်းကောင်တွေရဲ့ စော်ကားတာကို ခံကြရတော့မယ့် အခြေအနေကို ရောက်ရှိလို့ နေသည် မဟုတ်လား။
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့လည်း ကျွဲကြီးရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး အကြည့်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရင်ဘတ်တွေကို လက်ကလေး နှစ်ဖက်
နဲ့ ယှက်ကာ ထားလိုက်ကြသည် ။ ဘရာ မဝတ်ထားလို့ ရင်သီးလေးတွေ အင်္ကျီသားမှာ ကပ်ပြီး ထင်းထင်း တွေ့နေရတယ် ဆိုတာ သူတို့ သိသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ထမင်းစားလို့ ပြီးသွားလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ ဆီကို အရင်ဦးဆုံး
“ ကဲ….သောက်ကောင်မကြီး….ဆွဲချကြီး….ထစမ်း ….”
ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း သူ့ကို အစိုးရရှေ့နေ လို့ သူတို့သုံးယောက် မမှတ်မိကြဘူးလို့ ထင်နေတာ အခုလို မောင်
မောင်မျိုးလင်းက ဆွဲချကြီး လို့ အမည်တပ် ခေါ်လိုက်တော့ လန့်သွားသည် ။ အော်..သူ ငါ့ကို မှတ်မိနေပါလား..
ဆိုပြီး ။ မိန်းမ ဝါသနာကြီးတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် တရားရုံးထဲမှာ ထဲက ဖင်တောင့်တောင့်နဲ့ ဆွဲချ ဥပဒေ
အရာရှိမ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို သတိထားမိခဲ့ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ လမ်းလျှောက်သွားရင် တုန်ခါနေတဲ့ တင်ပါးအိအိကြီး
တွေကို တပ်မက်စွာနဲ့ ငေးမောနေခဲ့တာ ဖြစ်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို သေချာ ကြည့်ပြီး မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ ဝှူး………ကောင်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း….
ခင်ဗျား….ဖင်လိုးခံဘူးလား …..” လို့ မေးလိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးက မဖြေ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ ခင်ဗျား စောက်ခွက်ကို ပြင်လိုက်စမ်း…..စောက်ချိုးကို ပြင်လိုက်
စမ်း……..” လို့ ခပ်ထန်ထန် ငေါက်လိုက်ပြီး သူ့ခါးကြားမှာ ထိုးထားတဲ့ သားလှီးဓါးကြီးကို ဆွဲထုတ်
“ မေးရင် ဖြေနော်…..လည်ပင်းကို လှီးသတ်လိုက်မယ်…..ကျုပ်မေးတာက ခင်ဗျား ဖင်ခံဘူးသလား……..မေးနေတာ..
ဒေါ်မွှေးမွှေး ခေါင်းငုံ့ထားပြီး ခေါင်းခါပြသည် ။
ပြာဇင်က တိုးတိုးလေး..“ အရမ်း မိုက်ရိုင်းတာဘဲ…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက ပြာဇင် ပြောတာကို ကြားလိုက်သည် ။
“ ဟားဟားဟား……ကောင်မလေး….နင် သိထားဖို့က ငါတို့က ထောင်ပြေး မှုဒိန်းကောင်တွေ..လူသတ်သမားတွေ..
ငါတို့ ဘယ်လောက် မိုက်ရိုင်းတယ် ဆိုတာ နင်တို့ မကြာခင် ပိုသိလာလိမ့်မယ်…ဟားဟားဟားဟား…..” လို့
ပြောရင်း ပြာဇင့် ရင်ဘတ်မို့မို့တွေကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။ ဘရာမပါတာကြောင့် လုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားကော့
ကော့တွေကို ကျွဲကြီး ကိုင်မိသွားသည် ။ သည် အထိအတွေ့ကြောင့် ကျွဲကြီးမှာ….“ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း”
လို့ ပါးစပ်က ရွတ်လိုက်ပြီး ထပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို “ ပါးစပ်က ဖြေ…..အသံထွက်ဖြေ…..” လို့ မာမာကျောကျောနဲ့ ပြောသည်။
ဓါးကြီးနဲ့ လည်ပင်းကို ထောက်ထားလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး…“ မခံဘူးဘူး…” လို့ ခပ်တိုးတိုး ဖြေလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ သဘောကျနေကြသည် ။ ကျွဲကြီးက “ ဖင်ခံဘူးသွားအောင် မင်း ဖင်လိုးလိုက်
ပေါ့ကွာ..ဟားဟားဟား…..” လို့ ပြောပြီး အော်ရယ်လိုက်သည် ။ ကျော်ထဲလည်း ထမင်း စားပြီးသွားလို့ သူ့ပေ
ရေနေတဲ့ လက်တွေကို လက်သုတ်ပုဝါတထည် နဲ့ သုတ်လိုက်ပြီး “ ကဲ ပြောနေကြာတယ်…မောင်မောင်မျိုးလင်း..
ကောင်မကြီးကို လိုးကွာ..ဖင်ကိုလိုး….အားလုံး ရှေ့မှာ လိုးစမ်း…” လို့ ပြောလိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း သမီးနှစ်
ယောက်နဲ့ နော်ပိုးတို့ အရှေ့မှာ မဖွယ်မရာ အလုပ်ခံရမှာကို အရမ်း ထိတ်လန့်သွားသည် ။
“ နင်တို့ လိုတာ စားသွား..ယူသွား လူကိုတော့ ဒုက္ခမပေးကြနဲ့….” လို့ အော်လိုက်သည် ။
ဖျန်း..ကနဲ အသံနဲ့အတူ ဒေါ်မွှေးမွှေး အနောက်ကို ယိုင်သွားရသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ပါးကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ။
ကျော်ထဲက ခြောက်လုံးပြူး တရမ်းရမ်းနဲ့ “ မေးတာဖြေ..လုပ်တာခံ…ခိုင်းတာလုပ်ကြ…ငါတို့စကားကို မနာခံရင်
နင်တို့ နာမယ်…အသာတကြည် ပြေလည်အောင်နေကြ..အသားအနာမခံကြနဲ့…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ဓါးဦးချွန်နဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ လည်ပင်းကို ထောက်လိုက်ပြီး….“ ကြားလား….ကောင်မ…..နင်
ကြားလား…..” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို သူ့လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ အိမ်နေရင်း အချိန်
မို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် အတွင်းခံ ပင်တီ ဝတ်မထား ။
ကျော်ထဲကလည်း အားကျမခံ နော်ပိုးကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး ထမင်းစား စားပွဲမှာ မှောက်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ နော်ပိုး
က တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ သူ ခိုင်းတာကို မလုပ်လို့ နော်ပိုးရဲ့ ဖင်တွေကို ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်
ကျွဲကြီးက တဟားဟား အော်ရယ်ပြီး အနားမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေဆဲ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ ညီအမ အနားကို
တိုးကပ်သွားပြီး သူ့ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည် ။ ရေရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ သူ့ပုဆိုးသည် ဘုတ်ကနဲ ကြမ်းပြင်ကို ပြုတ်
ကျသွားသည် ။ ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်နေတဲ့ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ မျက်နှာလေးတွေ အနားမှာ ငေါငေါကြီး
ထကြွစပြုနေတဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ တန်ဆာမဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီး ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် ။ တထွာသာသာ အကွာအဝေး
မှာ အတန်တုတ်ရှည်မဲကြီး ရှိနေလို့ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ သူတို့ မျက်နှာလေးတွေကို တဖက်ကို လှည့်ထားလိုက်
ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် နံဟောင်နေတဲ့ အနံ့အသက်ဆိုးကြီးကို သူတို့ ရလိုက်ကြသည် ။
“ ဟိတ်..ဒီဖက်ကို လှည့်….လှည့်စမ်း..ငါ….ရိုက်ထည့်လိုက်ရမလား……”
သူတို့ရှေ့မှာ သူတို့အမေ ဒေါ်မွှေးမွှေးကိုရော နော်ပိုးကိုရော တဖျန်းဖျန်း ရိုက်နှက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတာမို့ ပြာ
ဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ ကျွဲကြီးဖက်ကို ပြန်လှည့်လိုက်ကြရသည် ။ ပြာဇင်ရဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ ဒုတ်မဲကြီးသည် ပို
လို့ နီးနီးကပ်ကပ် ရှိနေသည် ။
ကျွဲကြီးက “ ကောင်မလေး..နင့်နံမည် ဘာလဲ…” လို့ မေးလိုက်သည် ။
ပြာဇင်က မဖြေချင်ပေမယ့် ကြောက်လို့ ခပ်တိုးတိုး..“ ပြာဇင်..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက “ အဟား…ပြာ
ဇင်တဲ့လား…တော်တော်လှတဲ့ နံမည်လေးဘဲ..ကဲ ပြာဇင်..နင့်ပါးစပ်လေးကို ဟလိုက်စမ်း……” လို့ ပြောလိုက်ရင်း
ပြာဇင့်မျက်နှာအနားကို သူ့ဒုတ်မဲတုတ်တုတ်ကြီးကို တိုးကပ်လိုက်သည် ။ အမွှေးမဲမဲတွေနဲ့ ဂွေးစိမဲမဲလုံးလုံးကြီးတွေက လှုပ်ရမ်းနေကြသည် ။
ပြာဇင်က သူခိုင်းသလို ပါးစပ်ကို မဟဘူး ။ ဒုတ်မဲမဲကြီးရဲ့ ထိပ်ဖူးညိုညိုကြီး ပြာဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ထိတွေ့မိ
သွားသည် ။ ပြာဇင် ခေါင်းကို အနောက်ကို ဆုတ်လိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေး လှည့်ပြီး အော်သည် ။
“ ငါ့သမီးတွေကို မထိကြနဲ့..သေနာကောင်တွေ….”
ကျွဲကြီး ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည် ။
“ စောက်ကောင်မ..ပါးစပ်ပိတ်ထား…မောင်မောင်မျိုးလင်း..ကောင်မကြီးကို တခြား အခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်စမ်း….
အဲဒီမှာ ဖင်လိုးလိုက်…” လို့ အော်ပြောလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ အိုကေ….ကိုကျွဲကြီး….ကျုပ် ကောင်းကောင်း ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်…..” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်
မွှေးမွှေးရဲ့ လည်တိုင်ကို ဓါးနဲ့ တေ့ထောက် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး တဖက်ခန်းဖက်ကို ဆွဲခေါ်သွားသည် ။
“ ကျုပ် တကယ် ထိုးထည့်လိုက်မှာနော်….သေသွားမယ်…အေးအေးဆေးဆေး…လိုက်ခဲ့…”
စားပွဲပေါ် မှောက်ကုန်းနေရတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ကျော်ထဲက သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ဘေးကို တွန်းခွဲ
လိုက်သည် ။ ပြီးတော့ နော်ပိုးရဲ့ ထမိန်လေးကို ဆွဲလှန်လိုက်သည် ။ နော်ပိုးက ထမိန်ကို ဆွဲဖုံးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်
ကျော်ထဲက သူမကျောပြင်ကို လက်နဲ့ ဖိတွန်းထားလို့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရ ။ ထမိန်လေး ခါးအထိ လန်တက်သွား
ရပြီး ဖြူဖွေးတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ အောက်ပိုင်း အလှအပတွေ ထင်းထင်းကြီး ပေါ်သွားသည် ။ စွင့်ကားလုံးနေတဲ့ တင်ပါး
အိအိတွေ နဲ့ ပေါင်တန်ရှည် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေ….ပြီးတော့ ဖင်ကြားက အမြောင်းလိုက် ထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်
“ အဟား…စောက်မွှေး ပြောင်အောင် ရိပ်ထားပါလား….လှလိုက်တဲ့ စောက်ကတုံးလေး….ဟီး……”
ကျော်ထဲရဲ့ လက်က နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ဆီကို ရောက်သွားသည် ။
သည်အချိန်မှာ အိမ်အပြင်ဖက်က ချောင်းနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်အနောက်ဖက်က တဲလေးထဲမှာ
ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ ခြံစောင့်အဖိုးကြီး ဆီကို ရောက်သွားသည် ။
ပထမဆုံး အဖိုးကြီးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆို့ထားတဲ့ စွပ်ကြယ်စုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ ပြီးတော့ ခြေနဲ့လက်
တွေကို တုပ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကို ဖြေပေးလိုက်သည် ။
“ ကျေးဇူးပါဘဲကွာ..မင်းက ဘယ်သူတုံး…”
“ ဦးလေး…ကျနော်က ရဲအုပ်တယောက်ဘဲ..အိမ်ထဲမှာ လူဆိုးတွေ ရောက်နေပြီ …ဦးလေး အပြင်ထွက်ပြီး ရဲကို အ
ကြောင်းကြား အကူတောင်းပေးပါလား…ကျနော်ကတော့ အထဲက လူဆိုးတွေကို နှိပ်ဖို့ လုပ်လိုက်အုံးမယ်…”
“ အေး..အေး….ကျုပ် သွားလိုက်မယ်…..”
အဖိုးကြီး မိုးရေထဲ အမှောင်ထုထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတော့ အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်ကြီးဆီကို ပြန် ချဉ်းကပ်
လိုက်သည် ။ မီးလင်းနေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ အထဲကို ပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
အိမ်ဖေါ်မလေး နော်ပိုးသည် ထမင်းစား စားပွဲကြီးပေါ်မှာ မှောက်ကုန်းထားနေရပြီး အနောက်ကနေ ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ကောင်က ဒူးထောက် ထိုင်ချရင်း ဖင်ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျာကြီးနဲ့ ယက်နေတာကို
တွေ့လိုက်ရသလို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ သမီးချောလေး နှစ်ယောက်ကို ပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး
ကျွဲကြီးက သူ့မဲမဲတုတ်တုတ် တန်ဆာချောင်းကြီးကို ထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားနေသည် ။
အောင်ကောင်းသော်လည်း ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသည် ။ ညာလက်နဲ့ သေနတ်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အထဲဝင်ပြီး သေနတ်နဲ့ ချိန် ဖမ်းလိုက်ရမလား…စဉ်းစားနေသည် ။ မိုးကတော့ စဲသွားပြီ ။
လျှပ်စီးတွေကတော့ လက်နေဆဲ ။
သည်အချိန်မှာ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ခေါင်းကို တစုံတယောက်က လေးလံမာကျောတဲ့ အရာဝတ္ထု နဲ့ ထုချလိုက်
လို့ အောင်ကောင်းသော် အော်တောင် မအော်နိုင်ဘဲ မြေကြီးပေါ်ကို မှောက်ရက် လဲကျသွားသည် ။
“ ခွေးသား..မင်းက ဘယ်သူလဲ….” ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပြီး သူ့နံကြားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန်လိုက်တာ
ကိုလည်း ခံလိုက်ရသည် ။
အနောက်က တိုက်ခိုက်သူက အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ လက်ထဲက လွတ်ကျသွားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူး သေနတ်ကို
ပြီးတော့ သေနတ်ပြောင်းနဲ့ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်သည် ။ ဒင်နဲ့လည်း ထုသည် ။
“ ခွေးသားပုလိပ်….မင်း ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ…..”
ကျွဲကြီးလည်း ငြင်းဆန်နေတဲ့ ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်လေးထဲကို သူ့တန်ဆာတုတ်တုတ်မဲမဲကြီးကို အတင်း ထိုးသွင်းနေ
တဲ့အချိန် တံခါး ကျွီကနဲ ပွင့်လာပြီး လူတယောက်ကို အင်္ကျီလည်ဂုတ်ကနေ တရွတ်တိုက် ဆွဲသွင်းလာတဲ့
မောင်မောင်မျိုးလင်းကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ဟေ့ကောင်..သူက ဘယ်သူလဲကွ…”
“ ဒီကောင် ပုလိပ် ဖြစ်မယ်…သေနတ်လည်း ပါတယ်…ဘယ်ရမလဲ..အနောက်ကနေ အုတ်ခဲနဲ့ ထုပြီး ရေလည် နှိပ်
ပစ်လိုက်တယ်….” လို့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးလည်း ပြာဇင်ကို ကြမ်းနေရာကနေ ကြမ်းပေါ်မှာ မှောက်ရက် ညည်းငြူနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဖက်ကို
“ ဒီကောင့် အိတ်ကပ်တွေကို ရှာလိုက်….”
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ကျွဲကြီးက ဆရာကြီးလုပ် အမိန့်ပေးနေတာကို မကြိုက်တဲ့ ပုံနဲ့ ဆတ်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်ပြီး…“ ကိုကျွဲ..ခင်ဗျား ဆရာ သိပ်လုပ်တယ်ဗျာ….ကိုယ့်ဖါသာ ရှာပေါ့..ဘာလို့ လာခိုင်းနေတာလဲ..” လို့ ပြန်အော်ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးလည်း မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ဒေါသတကြီးနဲ့..“ မင်းက ခိုင်းတာ မလုပ်ဘဲ ဘာလို့ ပြန်ဟောင်နေတာလဲ
မင်းက ဘာကောင်လဲ..” လို့ အော်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက အောင်ကောင်းသော် ဆီက ရထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို အဆင်သင့်ကိုင်ထားရင်း
ကျွဲကြီးကို ရင်ဆိုင်လိုက်သည် ။
“ ကိုကျွဲ..အချင်းချင်းတွေဗျာ..ခင်ဗျားက ဖိုက်ချင်လို့လား….”
ကျွဲကြီးလည်း သူ့ရိုင်ဖယ်သေနတ်နဲ့ တော်တော် ဝေးကွာနေသည် ။ တခုခု ဖြစ်ရင် ဒေါသရှေ့ထားတတ်ကြတဲ့ လူမိုက်တွေမို့ လက်နက်ကို အားကိုးကြသည် ။ လက်နက်နဲ့ ဝေးနေပြီး သေနတ် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက လက်ဦးမှု ရနေတာကို တွေ့တော့ ကျွဲကြီး လက်လျော့လိုက်ပြီး..“ မဖိုက်ချင်ပါဘူးကွာ…
ဖိုက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး ….ငါတို့ စည်းလုံးကြမှ ဖြစ်မယ်..ကဲ ငါဘဲ ရှာလိုက်ပါမယ်…” လို့ ပြောလိုက်ပြီး အောင်ကောင်း
သော်ရဲ့ အိတ်ကပ်တွေကို လှန်လှော် နှိုက်ပြီး ရှာလိုက်သည် ။
“ ဟ.ဒီကောင်..ဒုရဲအုပ် ကွ….ခွေးသား..ဒီအိမ်ကို ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ မသိဘူး….”
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ခေါင်းကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး ညည်းနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ပြီး
ကျွဲကြီးက “ ဟိတ်ကောင်..မင်း ဟိုစော်ကြီးကို ဘယ်မှာ ထားခဲ့လဲ..” လို့ အလန့်တကြား မေးလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ ကျုပ် ဟိုဖက်ခန်းမှာ ကြိုးနဲ့ တုပ်ထားခဲ့တယ်..ကျုပ် ပြူတင်းပေါက်က ဒီပုလိပ် အိမ်ထဲ
ချောင်းကြည့်နေတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်လို့ အပြင်ထွက်ပြီး ဆော်လိုက်တာ…” လို့ ပြောလိုက်ရင်း အောင်ကောင်းသော်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်၇င်း စစ်မေးနေသည် ။
ဒါကို ကျွဲကြီးက ခါးထောက်ပြီး ကြည့်နေသည် ။ ကျွဲကြီးသည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…နဲ့ ။ ဂွေးတန်းလန်း လီးတန်းလန်းနဲ့ ။ ဝါဇင်သည် မြင်းတကောင်ရဲ့ လီးတန်လို ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ လတန်ချောင်းကြီးကို ခိုး
ကြည့်နေသည် ။ ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ ထနေရသည် ။ ဒါကြီးနဲ့ ပိပိထဲ အထိုးခံရရင် ဘယ်လိုများ
ဖြစ်မလဲ လို့ တွေးလိုက်မိနေသည် ။
ထမင်းစား စားပွဲမှာ ကုန်းပေးထားရတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ယက်နေတဲ့ ကျော်ထဲသည်
လည်း ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်လို့ သူ့တန်ဆာချောင်း တုတ်တုတ်ညိုညိုကြီးကို ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ တွေ့နေရသည် ။
ကျော်ထဲသည် စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရင်း ကွင်းတိုက်နေသည် ။ သူ့ဂွေးစိနှစ်လုံးသည် လှုပ်ခါရမ်းလျက်နေသည်။ နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေတာတွေကို တွေ့ရလို့ ပြာဇင်တို့ ညီအမသည် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေရတာတော့ အမှန်ဘဲ ။
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်လည်း  ကျွဲကြီးက သူတို့ကို အတင်း ကြမ်းနေရာက ဖမ်းမိလာတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဖက်ကို လှည့်သွား
နေတဲ့အချိန် အလစ်မှာ ထပြေးဖို့ ကြံစည်လိုက်ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် ကျွဲကြီးက လျင်သည် ။ မြင်သည် ။
သူတို့အကြံကို ရိပ်မိသွားသည် ။ သူတို့ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်သည် ။
“ ဟိတ်…..ဒီလို မလုပ်နဲ့လေ…..ပြန်ထိုင်…..”
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ ဆောင့်ကြောင့်လေးတွေ ပြန်ဖြစ်သွားသည်။
“ ဒီလို ထပြေးလို့ ဘယ်ရမလဲ စောက်ကောင်မတွေ …ဟ..နင်တို့ စောက်ပါးစပ်တွေကို ဟစမ်း….”လို့ အော်
ငေါက်လိုက်ပေမယ့် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က မျက်လွှာလေးတွေ ချပြီး သူတို့ ပါးစပ်တွေကို မဟကြ ။
စောစောက လီးမဲမဲတုတ်တုတ် နံနံကြီးနဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ထဲ တအား ထိုးထည့်ခဲ့တော့ သူတို့ ဘယ်ဟချင်ပါ့မလဲ။
ကျွဲကြီးက ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ သူတို့ကလေးတွေရဲ့ ပါးဖြူဖြူလေးတွေကို ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်လိုက်သည် ။
“ ဟ…ဟ……နင်တို့ စောက်ပေါက်လေးတွေကို ဟကြ…..စိတ်ထွက်လာလို့ တအား ပိတ်ရိုက်လိုက်ရင် နင်တို့
နာသွားမယ်…ဖူးယောင်ပေါက်ပြဲပြီး အကျည်းတန်သွားမယ်…အေးအေးဆေးဆေး ဟ..နင်တို့က ငါ့လက်ခုပ်ထဲက ရေ
ဖြစ်နေပြီ ..ဘယ်လိုမဆို ငါ့လီးကို စုတ်ပေးကြရတော့မယ်..ငါလိုးတာကို ခံကြရတော့မယ်…အသာတကြည် စုတ်
လိုက် အလိုးခံလိုက်ရင် နင်တို့အတွက် ပိုကောင်းမယ် ..ငါ ဂတိပေးတာက ငါ နင်တို့ကို လိုးပြီးရင် မသတ်ဘူး ဆိုတာဘဲ ….”
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်လည်း သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ အရိုက်ခံလိုက်ရရင် မလွယ်မှန်းသိသည် ။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပါးစပ်လေး
တွေကို ဟပေးလိုက်ရသည် ။
ကျွဲကြီးက ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို သူ့လီးကြီး ကို ထိုးထည့်လိုက်သည် ။လီးကြီးက တုတ်လွန်းလို့ ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ မဆန့်မပြဲ
“ စုတ်..စုတ်….စုတ်လေ . . စုတ် . . ”
ကျွဲကြီးက ဒစ်လုံးမြုပ်ရုံ ဝင်နေတဲ့ သူ့လီးကို ဆက်ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက စုတ်ဖို့ တအားအော်လိုက်
တာနဲ့ ပြာဇင်လည်း လီးကြီးကို ကဗျာကရာ စုတ်လိုက်သည် ။
“ နင့်လက်တဖက်နဲ့ လီးအရင်းကို ကိုင်ထား..နောက် လက်တဖက်နဲ့ ငါ့လဥတွေကို ကိုင်ထားပြီး ပွတ်ပေး….
ဖွဖွ ပွတ်ပေး….ဟဲ့..ဟို စောက်ကောင်မ..ကြည့်ထား..နင့်အမ စုတ်နေတာကို ကြည့်ထား…ပြီးရင် နင်လည်း စုတ်
ရမယ် …အဲ..နင့်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်စမ်း ….”
ဝါဇင်လည်း ပြာဇင်က ကျွဲကြီးရဲ့ လီးအရင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခေါင်းတငြှိမ့်ငြှိမ့်နဲ့စုတ်ပေးနေတဲ့ အချိန်
ကျွဲကြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူမ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရသည် ။ လုံးဝန်းဖွေးနုနေတဲ့ ဝါဇင်ရဲ့ အပျိုနို့လုံးလေးတွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် ။
နို့နှစ်လုံးက လှလွန်းလို့ ကျွဲကြီးကော အနားမှာ အောင်ကောင်းသော်ကို နှိပ်စက် မေးမြန်းနေတဲ့ မောင်မောင်မျိုး
လင်းကော မျက်လုံးအပြူးသား ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ ငေးမောသွားကြသည် ။ နို့သီးခေါင်း နီရဲရဲလေးတွေက အပြင်ကို စူထွက်နေကြသည် ။
ကျွဲကြီးသည် ပြာဇင်ရဲ့ စုတ်တာကို ခံနေရင်း ဝါဇင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။
ပြာဇင်သည် အရင်က လီးစုတ်ဖူးသူ မဟုတ်ကြောင်း ကျွဲကြီး သိသည် ။
“ နင့်သွားတွေနဲ့ မခြစ်မိစေနဲ့…နင့်လျာလေးနဲ့ ကစားပေး…လျာကို အငြိမ်မနေနဲ့ လထစ်ကို လှည့်ထိုးပေး….”
ပြာဇင့် အင်္ကျီလေးကိုတော့ ကျွဲကြီးက ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သည် ကောင်မလေးသည် သူ့ညီမလေးလိုဘဲ နို့
တွေက အပျံစား အမိုက်စား ဆိုတာ ကျွဲကြီးရော မောင်မောင်မျိုးလင်းကော တွေ့လိုက်ရသည် ။
မောင်မောင်မျိုလင်းသည် ကျွဲကြီးက နှစ်ယောက် တယောက် ဖြစ်နေလို့ သူ့ကို ကောင်မလေး တယောက်ကို ပေး
ဖို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက “ ဟေ့ကောင်..မင်းမှာ ဟိုဟာမကြီး ရှိသားနဲ့ လာတောင်းမနေနဲ့..မင်းဟာမကြီး
မင်းသွား လိုးစမ်း….” လို့ ခပ်ထန်ထန်နဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ကျွဲကြီးနဲ့ ဖက် မဖြစ်ချင်တာနဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်
မွှေးမွှေးကို ထားခဲ့တဲ့ အခန်းထဲကို ပြန်သွားလိုက်သည် ။
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ ညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းဗလာကိုယ်တွေကို မြင်ရတာရယ်..ပြာဇင် ကျွဲကြီးကို လီးစုတ်ပေးနေတာတွေကို တွေ့ရလို့ တအားကိုထန်သွားပြီ ။ စောစောထဲက ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကရင်လေးက အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ် ကုန်းခိုင်းပြီး စောက်ပတ်ကို လျာနဲ့ ယက်နေတာကို တွေ့ထားကထဲက ထန်နေတာ ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးကို စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ညှိုးထိုးသွင်း မွှေပြီး နို့စို့နေတုံး အပြင်က အသံကြားတာနဲ့ ထွက်သွားပြီး
ရဲအုပ် ဆိုတဲ့ အကောင်ကို သွားဆော်ထည့်ပြီး ဖမ်းနေရတာနဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးတုပ်ပြီး ထားခဲ့ရတာ ။
အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်လိုက်တော့ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ကြိုးတုပ်ထားခံနေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ဟီး…..အပြင်မှာ ရဲတယောက် ရောက်နေတာနဲ့ ဆော်ထည့်ပြီး စစ်နေရတာနဲ့ ကြာသွားတယ်ဗျာ…ကဲ မမ…
အလုပ်ပြန်စလိုက်ကြရအောင်…ဒီလို လုပ်ပါလား….ကျနော့်ကို အရင်ဆုံး မမ က လီးစုတ်ပေး……..” လို့ ပြောလိုက်
ရင်း သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ လီးတုတ်တုတ်ကြီး မတ်မတ်တောင်နေတာကို ဒေါ်မွှေးမွှေး
လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းပြီး မောင်မောင်မျိုးလင်းက သူ့လီးကြီးကို ဒေါ်
မွှေးမွှေး ပါးစပ်ပေါက်နားကို တိုးကပ်ပေးလိုက်သည် ။
စောစောက ကျွဲကြီးက ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို ပြောသလိုမျိုး အတုခိုးပြီး သူက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို “ မမ က
ကျနော့် လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေပြီ …ဒီတော့ မမ ကျနော် ခိုင်းတာကို လုပ်လိုက်..အသား အနာမခံချင်နဲ့…
မမ ငြင်းဆန်လည်း ကျနော်က လိုးမှာဘဲ..မမ နာတာဘဲ အဖတ်တင်မယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
သို့ပေမယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူခိုင်းသလို သူ့လီးကို စုတ်ပေးဖို့ ပါးစပ်ကို ဟမပေး ။
“ ခက်တာဘဲ မမရယ်….မမက သိပ် အထာကိုင်တာဘဲ….”
မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးပေါင်တန်ကြားကို လက်နဲ့ ဖမ်းစမ်းလိုက်သည် ။
မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။
စောစောက သူ့လက်ညှိုးနဲ့ ဒီ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ထိုးမွှေတဲ့အချိန် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ စောက်ရည်တွေ တအား ထွက်
လာလို့ တစွပ်စွပ် အသံတွေတောင် ထွက်လာခဲ့ရသည် ။ အခုလည်း သူမကို ဆွပေးမည် ဆိုတဲ့ အကြံ ရည်ရွယ်
ချက်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်လိုက်တာ ။
စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုး ထိုးသွင်းလိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ပါးစပ်က အသံလေး ထွက်လာသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် သူ့လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည် ။
“ မမ…..မမယောက်ျား….မရှိတဲ့ အချိန် မမ စောက်ပတ် ယားလားဟင်……”
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ညှိုး အသွင်းအထုတ် အလုပ်ခံနေရချိန် သည်လို မေးခွန်းမျိုးကို လာမေး
နေလို့ မဖြေဘဲ မျက်နှာလွှဲကာ နေနေသည် ။
“ မမ..မေးရင် ဖြေလေ ..မမ…….စကားနားထောင်နော်…မမကို မနှိပ်စက်ချင်ဘူး……”
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ကျွဲကြီးကို အတုယူပြီး စော်ကြီးရဲ့ ပါးပြင်ကို မနာအောင် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဖတ်ကနဲ
ဖတါကနဲ ရိုက်လိုက်သည် ။
မာကျောတဲ့ လေသံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ရင်း သူမ နို့သီးလေးတဖက်ကို လက်နဲ့ ဖိချေလိုက်သည် ။
“ ခိုင်းတာကို လုပ်..လီးကို စုတ်ပေး…ခင်ဗျား လင်ကို လီး စုတ်ပေးနေကျဘဲ မဟုတ်လား…..မမရယ်…စုတ်..စုတ်…”
ဒေါ်မွှေးမွှေး အခက်တွေ့နေသည် ။ သူခိုင်းတာကို မလုပ်ရင်လည်း ရိုက်နှက် နှိပ်စက်မှာက မလွဲမသွေဘဲ ။
စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လက်ညှိုးနဲ့ သွင်းထုတ်နေတာကလည်း ကာမသွေးတွေကို ကြွလာစေသည် ။ ဒစ်ကားကား
နီညိုညိုကြီးကို စုတ်ဖို့ ဝန်လေးနေသည် ။
ဖျတ်ကနဲ ပါးတဖက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ရိုက်တာ ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း နှုတ်ခမ်းတွေကို
ဟလိုက်ရသည် ။ သူ့ဒစ်လုံးကြီး ချက်ချင်းဘဲ ပါးစပ်ထဲကို ဝင်လာသည် ။ သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်း တချိန်
ထဲမှာ အစိကို ချေပွတ်လာသည် ။
ပါးစပ်အပြည့် လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ငုံစုတ်ပေးလိုက်ရပြီ ။
သူ့လက်တဖက်က စောက်စိကို ကလိနေသလို ကျန်တဲ့ လက်တဖက်ကလည်း နို့တလုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးနေပြီး
တချက်တချက် နို့သီးမာမာလေးကို ချေပေးနေသည် ။
“ လီးကို ကိုင်ပြီး စုတ်…လက်တဖက်က ဂွေးစိတွေကို ပွတ်နယ်ပေး…..”
အလိုလို သူ့အမိန့်တွေကို နာခံ လိုက်နာမိနေရပြီ ။
“ အိုး….အား..ဟုတ်ပြီ……မမ……မမ…လိမ္မာတယ်…..အိုး..စုတ်…စုတ်……..ပြီးရင် ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ်….”
သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရင်း ဂွေးစိတွေကို နယ်ပေးနေရသည် ။ သူက စုတ်နေတာနဲ့ အားမရဘဲ ပါးစပ်ထဲကို ကော့
သူ့လက်တဖက်က ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ပေါင်ကြားကို ရောက်သွားသည် ။ ဖူးကြွဖေါင်းနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးဆီကို ။
နှုတ်ခမ်းသားထူထူနဲ့ အကွဲကြောင်းကို ကိုင်လိုက်တော့ အရည်တွေ နစ်နေအောင် ရွှဲနေတာကို စမ်းမိသွားသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်း ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ တခွီးခွီး ရယ်လိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးရင်း စိတ်တွေ လာပြီး သဘာဝ အရည်တွေ စိမ့်ထွက် စိုစိုရွှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ။
မောင်မောင်မျိုးလင်း ရယ်လိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူ့လတန်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရင်းက ဖျတ်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ မမ လည်း စိတ်တွေ လာနေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ သဘောကျသွားတာပါ…” လို့ ပြောရင်း သူ့လိင်တန်ကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ထိုးလိုက်သည် ။
“… တော်တော့ မမ…ဒီလောက် စုတ်ပေးရင် လုံလောက်ပြီ……”
မောင်မောင်မျိုးလင်းက အစုတ် ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း ပါးစပ်ထဲက တုတ်ဖြိုးရှည်လျားတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လိင်တန်ကို ချွတ်ဖြုတ်လိုက်ရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ် လက်ချောင်းတွေကတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲ တစွပ်စွပ်နဲ့ ထိုးဆောင့်နေဆဲဘဲ ။
“ မမ ကျနော် ဆွပေးနေတာ..ကောင်းလား..မှန်မှန်ဖြေ…..”
ဒေါ်မွှေးမွှေးက ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ရယ်လိုက်ပြီး….“ ဒီလိုမှပေါ့..မမ….စာတတ်ပြီ……..မေးတာကို ပါးစပ်ကနေ ဖြေလိုက်….စကား
ပြောတတ်တယ် မဟုတ်လား….ဟားဟားဟား……” လို့ ထပ်ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း “ ကောင်းတယ်..”
လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ တကယ် ကောင်းလို့လား..သူ ရိုက်နှက် နှိပ်စက်မှာ စိုးလို့ ဖြေတာလားတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးဘဲ သိလိမ့်မည် ။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မောင်မောင်မျိုးလင်းကတော့ သူနဲ့ ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံတဲ့ မေးတာကို ဖြေ ခိုင်းတာကို
လုပ်တဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကျေနပ် သဘောကျသွားသည် ။
ဆွနေတဲ့ လက်ချောင်းတွေကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲက ထုတ်နုတ်လိုက်ပြီး….“ မမ..ဖင်ကုန်းလိုကစမ်း…ဖင်
တွေကို ထောင်လိုက်ပြီး အဖုတ်ကြီးကို နောက်စွင့်ပေးလိုက်စမ်း…..” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း မဆိုင်းမတွ ချက်ချင်းဘဲ သူခိုင်းတာကို လုပ်လိုက်သည် ။
ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ဖင်ကြီးတွေ ကုန်းထောင်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မီးရောင်အောက်မှာ တအား ကြည့်လို့
ကောင်းနေသည် ။ နို့လုံးကြီးတွေက ကုန်းလိုက်တဲ့အချိန် တုန်ခါ လှုပ်ရမ်းသွားကြသည် ။ အရည်တွေ တအား
စိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို မောင်မောင်မျိုးလင်းက သဘောကျနေသည် ။
ရဲတွေ လက်က သူတို့ လွတ်ချင်မှ လွတ်မည်ကို မောင်မောင်မျိုးလင်း သိသည် ။ လွတ်အောင် ထွက်ပြေးမှာဘဲ ။ ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မရဘူးလေ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလို အခွင့်အရေး ရတုံး အပီကို အရသာ ခံသွားလိုက်အုံးမယ် လို့ စဉ်းစားရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေ ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်မြောင်းကြီးကို လျာပြားကြီးနဲ့ အောက်ဖက်ကနေ အထက် ပင့်ယက်တင်လိုက်သည် ။
မမျှော်လင့်ဘဲ စောက်ပတ် အယက်ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး တွန့်သွားသည် ။ တုန်သွားသည် ။
လျာကြီးက နီညိုညို အကွဲကြောင်းကြီး ကို စုန်ချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးနေပြီ ။
ဒေါ်မွှေးမွှေး ပါးစပ်က ညည်းငြူသံတွေ ထွက်လာသည် ။
သည်လို စောက်ဖုတ် အယက်မခံရတာ ကြာပြီ ။ ယောက်ျား ရခါစတုံးကတော့ လင်ဖြစ်သူက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို
အမြဲလို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးခဲ့သည် ။ ကလေးတွေရ အသက်ကြီး မလာကြတော့ လင်ဖြစ်သူက လုပ်ချင်သေးပေ
မယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးက လက်မခံတော့ ။ သမီးတွေကလည်း အပျိုမလေးတွေ ဖြစ်လာကြပြီ ။ တခန်းစီ နေကြပေ
မယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေး လိပ်ပြာ မသန့်ဘူး ။
အခုလို မရတာ ကြာခဲ့တဲ့ဟာ ရလိုက်တော့ တအား ခံလို့ ကောင်းနေသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းကလည်း ဘာဂျာသမား ။ ဒေါ်မွှေးမွှေး မသိတာက မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ဘာဂျာကျွမ်းရုံ
မကဘူး ။ ဖင်ချပါ ကျွမ်းတဲ့ ဖင်လိုးသမား တယောက် ဆိုတာကိုပါဘဲ ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရင်း ကပ်ရက် ရှိနေတဲ့ စအိုပေါက်ညိုညိုလေးကို ကြည့်ပြီး ဖီ
လင်တွေ တက်လာသည် ။ သည် ခရေပွင့်လေး ထဲကို သူ့ဒစ်ကားကြီး သွင်းထည့်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်
လာသည် ။ စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရာက လျာထိပ်နဲ့ ခရေပွင့်လေးကို တို့ထိလိုက်သည် ။
စအိုပေါက်ကို စပြီ လျာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ဖင်တုံးကြီးတွေ တုန်သွားသည် ။
သူမ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်ခြင်းသာ ..။
မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ပြောလည်း မပြောရဲ ။ တားလည်း မတားရဲ ။
သည် အချိန်မှာ ကြိုးတုပ်ရက်နဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် မောင်မောင်မျိုးလင်း ရိုက်နှက်
ကန်ကျောက်ထားခဲ့လို့ နာကျင်နေတဲ့ကြားက ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို လီးစုတ်ခိုင်းနေတဲ့ ကျွဲကြီးဖက်ကို
အောင်ကောင်းသော်သည် ဂျိုစောင်းမှာရော လည်ဂုတ်မှာရော ဒါဏ်ရာတွေ ရနေပြီး ဝမ်းဘိုက် မှာရော ကျောမှာပါ
အကန်ခံထားရတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကလည်း နာကျင်နေတဲ့ကြားက ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုး..ကျွဲကြီးနဲ့ ကောင်မလေး နှစ်
ယောက်တို့ရဲ့ ကျင့်ကြံနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် သူ့ငပဲတန်ကြီးမှာ မာကျော တောင်မတ်နေသည် ။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာလည်း ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကရင်လေးက နော်ပိုး ဆိုတဲ့ ကရင်မလေးကို စားပွဲစောင်းမှာ စလိုးနေပြီ ။
ကရင်မလေးရဲ့ အော်သံက ကျယ်လောင်လှသည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကို လုပြီး စုတ်ပေးနေရတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက်
လည်း ကရင်မလေးရဲ့ အော်သံကြောင့် အဲဒီဖက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ကြသည် ။ ကရင်မလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဒလစပ် ထိုးညှောင့်နေတဲ့ ကျော်ထဲရဲ့ လီးတန် တုတ်တုတ်ညိုညိုကြီးက ကြက်သီးထစရာကြီး ။
ကျွဲကြီးက ကောင်မလေးတွေကို တချိန်ထဲ နှစ်ယောက် အတူတူ စုတ်ခိုင်းထားသည် ။ ညီအမနှစ်ယောက် ပြိုင်တူ
စုတ်နေရလို့ တယောက်က လိင်တန်ကို ပါးစပ်ထဲ ငုံစုတ်နေတဲ့အချိန် တယောက်က တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေးဥ
မဲမဲကြီး နှစ်လုံးကို စုတ်လိုက် လျာနဲ့ ယက်လိုက် လုပ်ပေးနေရသည် ။
ကျွဲကြီးက ကျော်ထဲ လိုးနေတာကို ကြည့်နေကြတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို “ မကြာခင် နင်တို့ကိုလည်း
အဲလို လိုးမှာ….ဟီး…နင်တို့ ကြိုက်မှာပါ……” လို့ ပြောရင်း စုတ်နေတဲ့ပြာဇင့် ပါးစပ်ထဲကို ဖိဖိညှောင့်နေသည်။
“ ဟိတ် ဟိုကောင်မလေး….နင့်နံမည် …ဘယ်သူ…..”
“ အေး..ဝါဇင်…နင် ငါ့အနားတိုးစမ်း…..”
ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့သည် ကျွဲကြီး ချွတ်ပစ်လိုက်လို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာ အဝတ်မှ မရှိနေတော့ဘူး ။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး
တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ မိမွေးတိုင်း အလှအပတွေကို ကျွဲကြီး တဝကြီး ခံစားနေသည် ။
ပေါင်တန်သွယ်လေး နှစ်ချောင်းရဲ့ ကြားက မို့ဖေါင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကို သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ သပ်
လက်ဝါးကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ အသပ်ခံလိုက်ရလို့ ဝါဇင်လည်း သိမ့်သိမ့်တုန်သွားရသည် ။ စောက်စိလေးကို ပွတ်မိ
ပြာဇင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်တဖက်နဲ့ နယ်ချေ ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ ဝါဇင်ရဲ့ အကွဲကြောင်းက နှုတ်ခမ်းသား
ထူထူလေးတွေကို စမ်းနေတဲ့ ကျွဲကြီးသည် လောကစည်းစိမ်ကို အပြည့်အ၀ ခံစားနေပေသည် ။
သည် အချိန်မှာ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ်က ခြံစောင့်ကြီး စောအားမေသည် လေမိုးကြားထဲ အကူအညီတောင်းဖို့
လမ်းမကြီး ဖက်ကို ကြိုးစားပြီး သွားနေသည် ။
ခပ်ဝေးဝေးမှာ မဲမဲ မဲမဲ နဲ့ လူတစု ကို စောအားမေ တွေ့လိုက်သည် ။
အကူအညီတောင်းဖို့ သည် လူတွေဆီကို စောအားမေ ဦးတည်လိုက်သည် ။
“ ဟေး….ဟေး…” လို့လည်း ပါးစပ်က အော်ခေါ်လိုက်သည် ။ သည် လူတွေကလည်း သူ့ကို မြင်သွားပုံရသည် ။
သူ့ဖက်ကို လျှောက်လာကြသည် ။
အနီးကို ရောက်လာတော့ သူတို့သည် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မဟုတ်ဘဲ ပုဆိုးတိုတို ဝတ်ထားပြီး ဓါးလွတ်တွေ ကိုင်
ထားကြတဲ့ လူတွေ ဖြစ်နေသည် ။ အပေါ်ပိုင်း ဗလာနဲ့ ဒီလူလေးယောက်သည် အသားအလွန်မဲပြီး ပိန်ကပ်ကပ်
ဆိုတာကို စောအားမေ တွေ့လိုက်ရသလို သူတို့ရဲ့ လက်တွေထဲမှာလည်း ကိုင်းခုတ်ဓါးတွေကို ကိုင်ထားကြတာ
ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရလို့ အနောက်ကို ပြန်ဆုတ်မိသည် ။
“ ဟိတ်..အဖိုးကြီး..မပြေးနဲ့..လိုက်ခုတ်လိုက်လို့ ပွဲချင်းပြီးသွားမယ်….”
လူလေးယောက်က စောအားမေကို ဝိုင်းထားလိုက်ကြသည် ။
“ ခင်ဗျား..ဘယ်ကလဲ.ဘယ်ကို သွားမလို့လဲ…..”
“ အဘ….အဘ…နွားလေး ပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာရင်း.မိုးထဲလေထဲ….လမ်းပျောက်သွားလို့ပါ……”
“ ဟားဟားဟား…….တော်တော် နုံတဲ့ အဖိုးကြီး….နွားပျောက်လို့တဲ့..မပူနဲ့..နွားတွေ့ရင် အမဲပေါ်လိုက်မယ်…”
သူတို့ထဲက တယောက်က စောအားမေရဲ့ ကျောကုန်းကို ဓါးပြားနဲ့ ဗျန်းကနဲ တအား ရိုက်ထည့်လိုက်သည် ။
“ အား…..မလုပ်ပါနဲ့ လူလေးတို့ရယ်..အဘ အသက်ကြီးပါပြီ….”
“ အသက်ကြီးတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ…အသက်ကြီးတဲ့ ခင်ဗျား လီးကြီးသလား ကြည့်ရအောင်…မှန်းစမ်း…”
သူ့ပုဆိုးကို ရုတ်တရက် ဆောင့်ဆွဲချွတ်လိုက်တာ ခံရလို့ စောအားမေ လက်နဲ့ ကဗျာကရာ ဖမ်းဆွဲလိုက်ပေ
မယ့် လေကလည်း ပြင်းနေလို့ ပုဆိုး ကျွတ်သွားသည် ။
လူလေးယောက်က တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်ကြသည် ။
“ လီးကလေးက လက်တောက်လောက်လေး….ဝါးဟားဟားဟားဟား…….ဘူးဝါးဟားဟားဟား…….”
“ အဘကို ချမ်းသာပေးပါ လူလေးတို့ရယ်….”
“ သွားစမ်းဗျာ….မသာကြီး….သတ်မိလိမ့်မယ်….အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးကြီး…”
“ ကဲပါကွာ…..တိုးမောင်း..ဟောဟိုက မီးလင်းနေတဲ့ဆီ သွားကြည့်ကြရအောင်..တခုခု ရလိုရငြား…..”
စောအားမေသည် သူ့ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်တာ ခံရလို့ ကတ္တရာ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မှောက်ရက်လေး လဲကျသွား
ရသည် ။ လူလေးယောက်သည် မီးရောင်လဲ့လဲ့ မြင်နေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံကြီးဖက်ကို ဦးတည်ပြီး သွားနေ
“ ဘုရား..ဘုရား….သူတို့ အိမ်ဖက်ကို သွားနေကြပြီ..ငါလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်..တနေရာရာကနေ အကူအညီ တောင်းဖို့ဘဲ အရေးကြီးတယ်……”
ဒူးပြဲလက်တွေ ပွန်းပဲ့သွားပေမယ့် စောအားမေသည် ကြိုးစား လူးလဲ ထလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးသည် ဝါဇင်လေးရဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာကို စမ်းမိ
လိုက်သည် ။ ကောင်မလေးသည် သူ့ကို ကြောက်လို့ သူခိုင်းတာတွေကို လုပ်နေရတာ ဖြစ်ပေမယ့် အထိအတွေ့
အမြင်ကြောင့် သဘာဝစိတ်တွေ လာပြီး အရည်တွေ ရွှဲနေပြီ ။
“ အဟီး…..နင်လည်း စောက်ပတ်ကြွလာပြီ မဟုတ်လား..ကောင်မလေး…ဒါ..သဘာဝဘဲလေ…..ယောက်ျားလီးနဲ့ထိ
တွေ့ရင် စိတ်ထကြမှာဘဲ…ကျော်ထဲ လိုးနေတာကိုလည်း နင်တို့ ကြည့်နေတာကိုး….စောက်ရည်တွေ ရွှဲနေတော့
ကျွဲကြီးရဲ့ လက်ညှိုးတုတ်တုတ်ကြီးက ဝါဇင်ရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းကို စုန်ချီ ဆန်ချီ ပွတ်ပေးနေတော့ ဝါဇင်လည်း
ဖင်တကြွကြွနဲ့ တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာရသည် ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွန့်တွန့်လေးတွေနဲ့ စောက်စိလေးကို ကျွဲကြီး
က ဖိချေပေးနေပြန်တော့ ဝါဇင်မှာ ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုး လိုးနေတာကို မြင်ကထဲက စိတ်က ကြွနေတာ ဆိုတော့
တအား ခံလိုက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်မိရပြီ ။ နဘေးမှာ အမဖြစ်သူ ပြာဇင်ကလည်း ကျွဲကြီးရဲ့ လီးတုတ်ကြီးကို တပြွတ်
ပြွတ်နဲ့ အပီအပြင် စုတ်ပေးနေရသည် ။
“ ကဲ အကြီးမ..ခဏ ရပ်အုံး…အငယ်မကို ပေးစုတ်လိုက်…..”
ကျွဲကြီးက ပြာဇင့်ကို အစုတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ပြာဇင်လည်း စုတ်ရတာ ပါးစပ်တွေ ပူထူ ညောင်းနေပြီ ။ လီး
တန်တုတ်ကြီးကို ပါးစပ်ထဲက ချွတ်ထုတ်လိုက်သည် ။ ဝါဇင်လည်း ကျွဲကြီးက သူမဆံပင်ကနေ ဆွဲယူခေါ်လိုက်လို့
ကျွဲကြီး အရှေ့ကို ရောက်သွားသည် ။
“ အငယ်မ..စုတ်တော့….အကြီးမ..ငါ့မျက်နှာပေါ်ကို တက်ခွလိုက်….”
ဝါဇင်လည်း ကျွဲကြီး ခိုင်းတာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်သည် ။ မဲမဲတုတ်တုတ် လတန်ရှည်ကြီးကို အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်
ကိုင်လိုက်ပြီး စစုတ်လိုက်သည် ။ လီးက တုတ်လွန်းလို့ ဝါဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ပြည့်နေသည် ။
“ စုတ်..စုတ်……အား..ကောင်းတယ်….စုတ်စမ်း..လျာကစားပေး..နင့်လျာကို လျှောက်လှုပ်ပေး..ကလိပေး…အင်း….
ပြာဇင်က တတွတ်တွတ် ပြောနေတဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို တက်ခွထိုင်လိုက်သည် ။
ပြာဇင်ရဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်သည် ကျွဲကြီးရဲ့ ပါးစပ် တည့်တည့်ကို ဖိသွား ထိသွားသည် ။
ကျွဲကြီးက အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းရဲ့ အကွဲကို လျာနဲ့ သိမ်းယက်ပစ်လိုက်သည် ။ ပြာဇင် “ အို့..” လို့ အသံလေး
ထွက်ပြီး ဖင်လေး ကြွသွားသည် ။ ကျွဲကြီးက စောက်စိနေရာကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ စုတ်လိုက်ပြန်သည် ။
သည် အချိန်မှာ ဝါဇင်က ဂွေးစိကြီးတွေကို လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ထားရင်း အတန်ကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးနေသည် ။
ကျော်ထဲကတော့ နော်ပိုးကို စားပွဲစောင်းမှာ ကုန်းခိုင်းပြီး ဆောင့်ထည့်နေရာက ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖါကြီး ဆီ
ကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည် ။ နော်ပိုးမှာလည်း ကျော်ထဲ စစလုပ်တုံးကတော့ ကြောက်လို့ ခံလိုက်တာ ဖြစ်ပေ
မယ့် လုပ်တာတွေကို ခံရင်း ခံရင်း စိတ်ပါလာသည် ။ ဆိုဖါဆီကို ရောက်တာနဲ့ ပက်လက် အိပ်ပေးကာ ပေါင်တန်
တွေကို ဘေးတဖက်တချက်ကို ဖြဲကားပေးလိုက်သည် ။
ကျော်ထဲလည်း အသာတကြည် သူလိုတာကို ပေးနေတဲ့ နော်ပိုးကို သဘောကျသွားသည် ။
ကျော်ထဲသည် သူ့ကို ဆန့်ကျင်သူ ဆိုရင် မိန်းမသားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သက်ညှာသူ မဟုတ် ။ ဘုရားကျောင်းထဲက တ
ရားဟောဆရာမလေး နှစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီးတဲ့နောက် သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာမှာ သည် ဆရာမလေးတွေက
သူ့ကို ပြန်လှန် သတ်ပုတ် ခုခံသလို နစ်နစ်နာနာ ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့အတွက် သူသည် ဒေါသတွေ တားဆီးလို့
မရအောင် ပေါက်ကွဲသွားပြီး သတ်ပစ်ခဲ့တာ ။
အခုတော့ နော်ပိုးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီးလည်း သူ သတ်ပစ်ဖို့ စိတ်မကူး ။ နော်ပိုး သူ့နောက်ကို လိုက်မယ် ဆိုရင်
သူက သူနဲ့ တပါတည်းတောင် ခေါ်သွားချင်နေသည် ။ နော်ပိုးနဲ့ သူနဲ့ လူမျိုး တူတာ မက ဘာသာစကားချင်း တူတာကြောင့် သူ သဘောကျနေသည် ။
ကျော်ထဲလည်း ပက်လက် ပေါင်ဖြဲပေးထားတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ အဖုတ်ထဲကို သူ့တုတ်ကြီး ထိုးနှစ်လိုက်သည် ။
တုတ်ဖြိုးလှတဲ့ တုတ်ကြီးက ပျိကနဲ ဝင်သွားသည် ။ နော်ပိုးရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တဖက်ပြီး တဖက် ပြွတ်ကနဲ
ပြွတ်ကနဲ စို့ရင်း ဖိဖိလုပ်ပြီ ။ စွိကနဲ စွိကနဲ အသံတွေ ထွက်လာသည် ။
သည် အချိန်မှာ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည်လည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တဖန်းဖန်း တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ အပီ ဆွဲနေသည်။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မတတ်သာလို့ ကြောက်လို့ ခံနေရတာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့လင်ထက် အသက်လည်းငယ် အား
လည်းကောင်း လိင်တန်လည်း ပိုကြီးပိုရှည်တဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လိုးတာတွေကို ခံရတာ အရသာက တအား
ကောင်းနေလို့ စိတ်ထဲမှာ ကြိုက်မိသွားသည် ။ မလုပ်တော့ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်မှာကိုတောင် စိုးပြီး သူ့ကို ပြန်ဖက်
ရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ပေးနေမိသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စိတ်ပါလက်ပါ ကော့ပေးနေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး
ကို တွေ့ပြီး အံ့အားသင့်နေသည် ။ သူမကို လုပ်ရတာလည်း ပို စိတ်ထန်လာသည် ။ ဒလကြမ်းနင်း ဆောင့်ထည့်တော့သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း မောင်မောင်မျိုးလင်း ဆောင့်ထည့်သမျှကို တုံ့ပြန်ကော့ပေးရင်း တဟင်းဟင်းနဲ့ အသံထွက်
ရင်း ခံနေသည် ။ သူမအဖြစ်က မုဒိန်းသမားရဲ့ အဓမ္မ ကျင့်တာကို ခံနေရတာနဲ့ မတူဘဲ အလိုတူ အလိုပါ စိတ်တူသဘောတူအလိုးခံနေတာနဲ့ တူနေသည် လို့ မုဒိန်းမှုပေါင်းများစွာကို တရားစွဲသူအဖြစ် တွေ့ခဲ့တဲ့ ဥပဒေဝန်ထမ်း တယောက်မို့ သိနေသည် ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး ။ စိတ်ရဲ့ အလိုကို လိုက်ပြီး သူဆောင့်ထည့်တာတွေကို အရသာခံ နေမိလိုက်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် စို့လိုက်ကိုင်လိုက် ညှစ်လိုက် လုပ်ရတာ တအား ကျေနပ်သလို သမီးနှစ်ယောက် အမေ ဖြစ်တာတောင် စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ ကြပ်နေဆဲ
သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း ကြိုက်သည် ။
စိတ်တိုင်းကျ အားကုန် ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီး တအား တအား ကောင်းလာသည် ။ ကောင်းလာသည် ။ အရမ်း အရမ်း ကောင်းသွားသည် ။ အား…….အား……..အား……..။ တကိုယ်လုံး ကျင်တက် ကောင်းသွားတဲ့ အရသာနဲ့
အတူ သူ့လီးထဲက အရည်ပျစ်ပျစ်တွေကို အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ တဖျတ်ဖျတ် ထုတ်လွှတ်လိုက်လေသည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးမှာ မောင်မောင်မျိုးလင်း မပြီးခင်ထဲက နှစ်ကြိမ်တောင် ပြီးခဲ့တာမို့ တအား ကျေနပ်နေပေမယ့် ဒင်း
ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ သူမအထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်တာကိုတော့ အရမ်း လန့်သွားသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းကလည်း ပြီးသွားတာနဲ့ သူ့တန်ဆာကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်လို့
ဒေါ်မွှေးမွှေးက “ ငါ ရေဆေးလို့ ရမလား….” လို့ သူ့ကို မေးလိုက်သည် ။ “ အင်း…” လို့ မောင်မောင်မျိုးလင်း
က ဖြေသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေး ရေချိးခန်းဆီကို ချက်ချင်းဘဲ ပြေးသွားလိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး
သေးပေါက်လိုက်သည် ။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ကို ဆေးကြောသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်း လည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတဲ့ အိမ်သာခွက်ထဲ သေးကော့ပန်းနေရင်း လိုးခဲ့
ရတာကို စမြုံ့ပြန်နေသည် ။ တော်တော် လိုးလို့ကောင်းတဲ့ စော်ကြီး ။ နောက်တချီ ဆိုရင် ဖင်ကိုပါ ချမယ် ..။
ဧည့်ခန်း ဆိုဖါပေါ်မှာ တဖန်းဖန်း တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ အပီ လိုးဆောင့်နေတဲ့ ကျော်ထဲသည် သူ့အလိုကို လိုက်
သူ့အလိုးကို တချက်မငြီးဘဲ ခံတဲ့ နော်ပိုးကို တအား သဘောကျသွားပြီး သည် အိမ်ကနေ ထွက်သွားရင် အပါ
ခေါ်သွားဖို့ စဉ်းစားနေသည် ။ အင်း….စောက်ပတ်က ဘယ်အချိန် လိုးလိုးရတယ်…ကောင်မလေးကို ခေါ်သွား
မယ်..အရေးကြီးတာက မိုးမလင်းခင် ဒီကနေ ခွာရမယ်….ရဲတွေက သည် အနီးအနားကို ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာကြမှာ
သေချာတယ်….လို့ သူ တွက်ဆနေသည် ။ တအား လိုးနေပေမယ့် သူ့လွတ်မြောက်လမ်း..သူ့အန္တရာယ်ကိုလည်း
သူ စဉ်းစားသည် ။
ကျွဲကြီးရဲ့ မျက်နှာပေါ် ခွထိုင်ထားပေးရတဲ့ ပြာဇင်ရော ကျွဲကြီးရဲ့ လီးမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရတဲ့ ဝါဇင်
ရော မလှမ်းမကမ်းမှာ ဆိုဖါပေါ် အပီ လိုးနေတဲ့ ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုးကို တွေ့နေရသည် ။ ဒါကြောင့်လည်း သည်
ညီအမနှစ်ယောက်စလုံးသည် မုဒိန်ုးသမားကြီး ကျွဲကြီးရဲ့ အတင်း ခိုင်းစေတာတွေကို အလိုမတူဘဲ ကြောက်လို့
လုပ်ပေးနေရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါသည် သဘာဝ အရည်တွေနဲ့ စိုလူးပေပွ လို့ နေသည် ။
ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတာကို အင်တာနက်ပေါ်မှာသာ မြင်ဘူးပြီး အခုလို ကိုယ့်အရှေ့ နီးနီးကပ်ကပ်
မှာ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူးကြလို့ အပျိုရိုင်းမလေး နှစ်ယောက်မှာ အခုလို စောက်ရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေရအောင် စိတ်တွေ
ထဲလှုပ်ရှားနေရတာ ဖြစ်သည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကြီးကို ကိုင်နေရ စုတ်နေရတာကလည်း ရွံလည်းရွံ ကြောက်လည်း
ကြောက် စိတ်လည်း လှုပ်ရှားဖေါက်ပြန်နေကြရသည် ။
သည် အချိန်မှာ အောင်ကောင်းသော်သည် လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံနေရပြီး ပေါက်ပြဲ ဒါဏ်ရာတွေ ရနေတာတောင်
သည် ကာမမြင်ကွင်းတွေကို အနီးကပ် ရှုစားနေရတာကြောင့် သူ့ပေါင်ကြားက တန်ဆာကြီးသည် ကာကီဘောင်း
ဘီထဲက ငေါငေါကြီး ထိုးထောင်နေသည် ။
ကျွဲကြီးသည် သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ဝဲနေတဲ့ ပြာဇင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ ပင့်ယက်နေရင်းက အောင်ကောင်းသော် ကို သတိရသွားပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ဒုတ်ကြီး ဘောင်းဘီ
ထဲက ထောင်မတ်နေတာကို တွေ့လိုက်တော့..“ ခွေးမသား ပုလိပ်..စောက်ရေးထဲ လီးတောင်နေတယ်….မအေလိုး
စောက်ရူး….” လို့ လှမ်းဆဲလိုက်လေသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို အဝတ်အစား ပြန်ဝတ်ခွင့် မပေးဘူး ။
“ ခင်ဗျား..ဒီအတိုင်းဘဲ နေဗျာ…ခင်ဗျား ကိုယ်လုံးက တော်တော် လှတယ်…..” လို့ ပြောရင်း တင်ပါးအိအိကြီးတွေ
ကို ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်သည် ။
“ ချမ်း…..ချမ်းလို့ပါကွာ….အဝတ် ပြန်ဝတ်ပါရစေ….”
“ မရဘူး….ခင်ဗျား…နဲ့ မကြာခင်ဘဲ ထပ် လိုးကြအုံးမှာ…ဝတ်မနေပါနဲ့ မထူးပါဘူး…..”
စောအားမေးသည် မိုးစက်တွေ မျက်နှာကို ပက်ဖျန်းနေတဲ့ကြားက သူ့ရှေ့တည့်တည့် အဝေးကြီးမှာ မီးရောင်
ကို တွေ့လိုက်လို့ တအား ဝမ်းသာသွားသည် ။
“ ဟာ…..ကား…ကားတစီး လာနေတယ် . . .”
သည် အချိန်မှာ စောအားမေကို ဓါးပြားနဲ့ ရိုက်..ပုဆိုးဆွဲချွတ်..တွန်းလှဲသွားတဲ့ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ လူလေးယောက်
သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ်ကြီးရဲ့ အနားကို ရောက်ရှိနေကြပြီ ။
သူတို့သည် သည်နေရာနဲ့ သိပ် မဝေးလှတဲ့ ကားလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးက “ လောင်ကွင်းရွာ” ကလူတွေ ဖြစ်သည် ။ ဆင်းရဲတွင်း နက်လွန်းလို့ စားစရာမရှိ ဝတ်စရာမရှိ နေစရာက မိုးမလုံတဲ့ ဘဝမှာ မထူးဘူး ဆိုပြီး ကိုင်းခုတ်
ဓါးလွတ် ကိုယ်စီ ဆွဲကိုင်ပြီး တွေ့ရ လုမည် ..ရရာတိုက်မည် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ထွက်လာကြသူတွေ ။
ဒီ တိုးမောင်း….အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတူး တို့သည် အချုပ်နဲ့ထောင်ကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင် ဆိုသလို အမြဲ
ရောက်နေကြသူတွေ ဖြစ်သည် ။ သူတို့သည် ဓါးပြမှု အမှုတွဲ တတွဲထဲ နဲ့ ထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာသူတွေ ဖြစ်သည် ။
“ ဟိတ်….ငှက်ရိုး….အိမ်ထဲမှာ လူရှိမယ်ကွ…ပြူတင်းပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက်စမ်း…..”
“ အေးပါကွ..လခွီးမှာဘဲ ဆာလိုက်တာ ဘိုက်က တဂွီဂွီ မြည်နေတယ်……” လို့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့လူက ပြောလိုက်ရင်း
ပြူတင်းပေါက် နားကို တိုးကပ်သွားသည် ။
“ ဟာ….နှစ်ယောက် တယောက် လီးစုတ်..အဖုတ်ယက်တွေ လုပ်နေကြတယ်…..ဟိုက်..ဟိုတယောက်ကလည်း လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံထားရတယ်……ဘာတွေလဲ…..ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ……..”
တိုးမောင်းတို့ လူစု ပြူတင်းပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်ပြီး အထဲက ကျွဲကြီး..ပြာဇင်..ဝါဇင်တို့ နဲ့ ကြိုးတုပ်ခံထား
ရတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို မြင်သည် ။ သူတို့သည် ကျော်ထဲနဲ့နော်ပိုး အတွဲကိုတော့ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရကြ ။
ကားသည် တစတစနဲ့ နီးလာသည် ။
စောအားမေသည် လက်နှစ်ဖက်မြှောက်..ပါးစပ်ကလည်း တဟေးဟေး အော်ပြီး ကားကို တားသည် ။ တိုက်ချသွား
မှာစိုးလို့ ရှေ့တည့်တည့်က မတား ။ လမ်းဘေးကနေ တားသည် ။ ကားကြီး ကျွိ….ကျွိ…….ဘရိတ်ဖမ်းသံနဲ့ ရပ်သွားသည် ။
“ ကယ်ကြပါအုံး….ဒုက္ခတွေ ရောက်နေလို့……..ဟင်…..ရဲတွေပါလား…….”
“ ဦးလေးကြီး….ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲ…..”
တိုးမောင်း..အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတူးတို့ တယောက်ကို တယောက် ကြည့်လိုက်ကြသည် ။
အထဲမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်နဲ့ ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ လူထွားကောင်ကြီးနဲ့ ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ သွေးတွေ ပေလူးနေတဲ့ ငတိတကောင်ဘဲ ဆိုတော့ သူတို့က လေးယောက် ။ အထဲ ဝင်ကြရုံဘဲ ။
လူထွားကောင်မဲကြီးကို ဖနောင့်နဲ့ပေါက် ကောင်မလေးတွေကို တက်လိုး…..စားစရာသောက်စရာ ရှာစားကြဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ အိမ်နောက်ဖေး ဖက်ကို သူတို့ ရောက်သွားပြီး တံခါးပေါက်
ကနေ အိမ်ထဲကို ဝင်ဖို့လုပ်တော့ တံခါးပေါက်က သော့ဖျက်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတာ တွေ့ရလို့ အခက်အခဲ မရှိဘဲ သူတို့ အိမ်ထဲကို ရောက်သွားကြသည် ။ လူမဲထွားကြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ ပျော်ပါး
နေတဲ့ထမင်းစားခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းကြား နေရာလေးကို သူတို့ ဓါးတွေ ကိုင်ထားရင်း သွားလိုက်ကြတဲ့အခါ သူတို့ ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်ကုန်သည် ။
ကျွဲကြီးသည် အိမ်နောက်ဖေးဖက်က အသံတွေ ကြားတာနဲ့ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့ကို တိုးဖယ်ပစ်လိုက်ပြီး သူ နံရံမှာ ထောင်ထားတဲ့ ရိုင်ဖယ်ကို ပြေးဆွဲလိုက်သည် ။ ထို့အတူဘဲ နော်ပိုးကို တအား တက်လိုးနေတဲ့ ကျော်ထဲ ကလည်း ဖျတ်ကနဲ နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကို ဆွဲနုတ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ကောက်စည်း စားပွဲပေါ် ချထားတဲ့ ၃၈ဘို့ ခြောက်လုံးပြူးကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။
တိုးမောင်း..အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတိုး တို့လည်း သူတို့ကို ရိုင်ဖယ်နဲ့ ချိန်ရင်း စောင့်နေတဲ့ လူထွားမဲကြီးနဲ့ ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ချိန်ထားတဲ့ လူပိန်သေးသေး တယောက်ကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်
ရလို့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိကြဘဲ ကြောင်အန်းအန်းတွေ ဖြစ်သွားကြသည် ။
“ ဟေ့ကောင်တွေ..မင်းတို့ ဘာကောင်တွေလဲ..ဘာလာလုပ်တာလဲ..သေချင်သလား..လက်ထဲက ဓါးတွေကို ချလိုက်…..”
ကျွဲကြီးက ရိုင်ဖယ်နဲ့ ချိန်ထားရင်း အော်ပြောလိုက်သလို ကျော်ထဲကလည်း ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ချိန်ရင်း…“ ဓါးတွေ ချလိုက်..ပစ်ထည့်လိုက်ရမလား…” လို့ အော်လိုက်သည် ။
တိုးမောင်းတို့သည် သူတို့ ဓါးပြတိုက်စားလာတဲ့ သက်တမ်း တလျှောက် ဓါးကိုဘဲ ကိုင်ဘူးသူတွေ ဖြစ်သည် ။ ဓါးတောင် ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း ဓါး မဟုတ် ။ သေနတ်နှစ်လက်နဲ့ ချိန်ထားတာ ခံရလို့ အတော့်ကို ဖြုန်သွားကြပြီး တိုးမောင်း အုန်းမောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့က သူတို့ရဲ့ လက်တွေထဲက ကိုင်းခုတ်ဓါးတွေကို ကြမ်းပေါ်ကို လွှတ်ချလိုက်ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် သူတို့လေးယောက်ထဲမှာ
အမိုက်ကန်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့ကောင်က မိုက်မိုက်ကန်းကန်း လုပ်လိုက်သည် ။ ကွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ ဆီကို ဓါးနဲ့ ပြေးဝင်ပြီး ခုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။
ကျယ်လောင်တဲ့ ကော်ဒိုက်ယမ်း ပေါက်ကွဲသံ …။
ငှက်ရိုးရဲ့ လည်ပင်းသည် သွေးတွေ ဒလဟော ပန်းထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်ကြရပြီး ငှက်ရိုး အရုပ်ကြိုးပြတ် ဘုံးကနဲ လဲကျသွားသည် ။
ပစ်လိုက်သူက ကျော်ထဲနဲ့ ကျွဲကြီး တို့ မဟုတ်ဘူး ။
အောင်ကောင်းသော်ဆီက ရထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်း ။
“ ဘယ်လိုလဲ ရောင်းရင်းတို့ရဲ့…..လက်မနှေးနဲ့လေ ….ပစ်စရာ ရှိရင် အဲလို ပစ်ပလိုက်ရတယ်…..ဟင်းဟင်း…….”
တိုက်မောင်းတို့ အရမ်းကို လန့်သွားသည် ။ သူတို့လူ ငှက်ရိုးတယောက် သွေးအိုင်ထဲမှာ အသက်ပျောက်နေပြီလေ ….။
ကျွဲကြီးက တိုက်မောင်းတို့ကို ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ကိုယ်တုံးလုံး ကြိုးတုပ် ခံထားနေရသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်ကို လိုးနေရာက အသံဘလံတွေကြောင့် အလိုး ရပ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးပြန်တုပ်… သေနတ်ကို ဆွဲပြီး အပြင်ခန်းကို ထွက်သွားသည် ။
ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ အိမ် အနောက်ဖက်က ဝင်လာတဲ့ တိုက်မောင်းတို့ လူစုကို သေနတ်နဲ့ ချိန် ရင်ဆိုင်နေခိုက် ပြာဇင်..ဝါဇင်နဲ့ နော်ပိုးတို့ အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ကြပြီး အခန်းထောင့်မှာ အသာငြိမ်နေခိုက် မောင်မောင်မျိုးလင်း အောက်ဖပ်က အိပ်ခန်းထဲက သေနတ်ကြီးနဲ့ ထွက်လာတာကို တွေ့လိုက်ကြရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက တိုက်မောင်းတို့ လူစုကို မဲနေလို့ ပြာဇင်တို့ သုံးယောက်ကို မမြင် ။
သေနတ်သံ ဒိန်းကနဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန် ပြာဇင်တို့သည် အိပ်ခန်းထဲကို ပြေးဝင်လိုက်ကြတဲ့အချိန် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ကြိုးတုပ် ခံထားရတဲ့ သူတို့အမေ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ သမီးတို့..မာမီ့ကို ကြိုး ဖြေပေးကြ…မြန်မြန် …..”
ပြေဇင်က ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးဖြေပေးနေတဲ့ အချိန် ဝါဇင်က “ မာမီ..မာမီ့ကို သူတို့ ဟိုဟာ လုပ်ကြလားဟင်…..” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ဖြေရခက်တာကြောင့် ..မဖြေချင်တာကြောင့်..
“ ဘာတွေ မေးနေတာလဲ..ဒို့ ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်….” လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက် ပြောလိုက်သည် ။ ဝါဇင်က “ ဟိုမဲမဲကောင်ကြီးက မီးတို့ကို စုတ်ခိုင်းတယ်…..နော်ပိုးကိုတော့ ဟိုပိန်ပိန်
ကောင်က လုပ်တယ်…” လို့ ဆက်ပြောလိုက်သည် ။
နော်ပိုးက “ နောက်ထပ် လူဆိုးတွေ ရောက်လာပြီး သူတို့ထဲက တယောက်က သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်တယ် ထင်တယ်…..” လို့ ပြောသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း အဝတ်တွေ အမြန် ပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး
အိမ်ထဲကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ လုပ်ရမည်မို့ ပြူတင်းပေါက်က ထွက်ပြေးကြဖို့ ကြိုးစားတော့သည် ။
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် မိုးရေတွေ ရွှဲရွှဲစိုပြီး တုန်တုန်ရီရီနဲ့ သူတို့ကားကို တားတဲ့ အဖိုးကြီး ပြောတာတွေကို သေသေချာချာ နားထောင်နေသည် ။
သူတို့ ရှာနေတဲ့ လွတ်ပြေးသွားတဲ့ အချုပ်သားတွေသည် သည် စောအားမေ ဆိုတဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ တရားရုံးက ဆွဲချအစိုးရ ရှေ့နေ ဒေါ်မွှေးမွှေးနဲ့ ဗိုလ်မှူးဇင်မောင်သိန်း တို့ရဲ့ ခြံထဲ အိမ်ထဲကို ရောက်နေကြသည် ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာနဲ့ သည်နေရာကို စောအားမေကို လိုက်ပြခိုင်းသည် ။ တခြား အဖွဲ့တွေကိုလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံကို သူတို့ သွားနေပြီ ဆိုတာကို စက်နဲ့လှမ်း အကြောင်းကြားလိုက်သည် ။
လွတ်ပြေးသွားတဲ့ မုဒိန်းကောင် အချုပ်သားတွေသည် လူသတ်ဖို့ကို ဝန်လေးသူတွေ မဟုတ်တဲ့အပြင် အချုပ်ကားစောင့် ရဲတွေ ဆီက သေနတ်တွေလည်း ရသွားကြလို့ အလွယ်တကူ ကြက်ကလေးငှက်ကလေး သွားဖမ်း သလို ရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူသေကိုယ်သေ ပစ်လားခတ်လားတွေ ဖြစ်တော့မှာက သေချာနေသည် ။
အဲဒီ ခြံအထိ ကားသွားလို့ ရသည် လို့ စောအားမေ က ပြောပြပေမယ့် ကားစက်သံနဲ့ ကားမီးရောင်ကြောင့် လူဆိုးကောင်တွေက သူတို့ လာနေတာကို ကြိုသိသွားမှာ စိုးလို့ ကားနဲ့ မသွားဘဲ ခြေလျင် သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့လူတွေကို အခြေအနေကို ရှင်းပြလိုက်သည် ။ သူ့ကို သူ့အထက်က ရဲမှူးကြီးကလည်း စက်နဲ့ ပြန်ခေါ်ပြီး “ ပစ်မိန့် ” ပေးလိုက်လို့ သူ့လူတွေကို အချုပ်သား လူဆိုး မုဒိန်းကောင်တွေကို ပစ်ဖမ်းနိုင်ကြောင်း ခုခံရင် ပစ်ဖို့ မှာကြားလိုက်ပြီး စောအားမေကို ရှေ့က ထားပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံဆီကို ချဉ်းကပ်သွားကြသည် ။
ခြံနားကို နီးကပ်လာကြတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ သေနတ်တွေကို အသင့် အနေအထားနဲ့ ကိုင်ရင်း လူဖြန့်လိုက်ကြသည် ။
ရုတ်တရက် ကျယ်လောင်တဲ့ သေနတ်သံ တချက် အိမ်ကြီးဆီက ကြားလိုက်ရသည် ။
စောအားမေသည် “ ဘုရား..ဘုရား…ဆရာမတို့ကို ရန်မူပြီလား…..လုပ်ပါအုံး ဆရာတို့ရယ်…..” လို့ တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ စခန်းမှူး ဦးအောင်မြသာလည်း လူဆိုးတွေ ဖက်က သေနတ်သုံးလိုက်တာကို သိလိုက်ရလို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားပြီး သူ့သေနတ်ကို အဆင်သင့် ထိုးချိန်ရင်း မောင်းပြန် စတင်း သေနတ်ကိုင် ရဲသားကို သူ့အရှေ့ကနေ သွားခိုင်းလိုက်သည် ။
“ဆန်းမြင့်ဝင်း…ကိုယ်က လက်ဦး ပစေကွာ..ဆော်သာဆော်..” လို့လည်း ပြောလိုက်သည် ။
သည် အချိန်မှာ အိမ်ကြီးထဲမှာ….
ကျော်ထဲ..ကျွဲကြီး ..မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့က နောက်မှ ဝင်လာတဲ့ ဓါးကိုင် တိုးမောင်းတို့ လူစုကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားပြီး ဒူးထောက်ခိုင်းထားနေတဲ့ အချိန် ..။
ဓါးနဲ့ ပြေး ခုတ်ဖို့ လုပ်တဲ့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ ပွဲချင်းပြီးနေပြီ ။ ကြမ်းပြင်မှာ ကားရားကြီး သွေးအိုင်ထဲ အသက်ပျောက်နေပြီ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခံထားရတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ကြိုးတွေကို သူ့ခါးမှာ ထိုးထားတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး သားလှီးဓါးနဲ့ ဖြတ်တောက် ပေးလိုက်သည် ။ ဒီကောင့်ကို အသုံးချ ခိုင်းလို့ ရအောင်….။
ကျော်ထဲက “ သေနတ်သံကြောင့် သည်ကို ရဲတွေ ရောက်လာနိုင်တယ်….ငါတို့ သည်နေရာက ခွာကြရင် ကောင်းမယ်…..” လို့ ပြောလိုက်တော့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ သေချာတာပေါ့….
ကရင်လေး….ဒီပုလိပ်ကောင်ရဲ့ ကားက ခြံအနောက်ဖက်က ခြုံတွေ အကွယ်မှာ ရပ်ထားတာ…စောစောက ငါ သူ့ကို စစ်မေးထားလို့ သိတယ်…အဲဒီကားနဲ့ ဒို့ ပြေးကြမလား…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက “ ဟိတ်ကောင်..လူတတ် မလုပ်နဲ့ …ကားနဲ့ ပြေးလို့ ရမလား..မင်းဘိုးအေ..ရဲတွေက ကားလမ်းမှာ တပုံတခေါင်း ရှိနေမှာ မင်း နားမလည်ဘူးလား..ချီးဘရိန်းရဲ့…..” လို့ လှမ်းဟောက်လိုက်ရင်း….တိုက်မောင်းတို့ကို သေနတ်ပြောင်းနဲ့ ထိုးပြရင်း..“ ဒီမအေပေးတွေကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ…ရှင်းပစ်လိုက်မလား……” လို့ မေးလိုက်သည် ။
ကျော်ထဲက “ သတ်ပစ်ရင်လည်း သေနတ်တော့ မသုံးနဲ့တော့…မျိုးလင်း..မင်းကိုင်ထားတဲ့ ဓါးနဲ့ဘဲ အသံတိတ် လည်လှီး သတ်လိုက်ကွာ….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
သူတို့ကို လည်လှီးသတ်ဖို့ ပြောနေလို့ ဒူးထောက် ထိုင်နေရတဲ့ တိုက်မောင်း..အုန်းမောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့ အရမ်းကို ခြောက်ခြားသွားကြသည် ။ သည် အချိန်မှာ ကျွဲကြီးက ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ဖက်မှာ လူရိပ် မြင်တယ် ဆိုပြီး မီးဖိုချောင် ဖက်ကို ရိုင်ဖယ်ကြီးကိုင်ရင်း ပြေးသွားသည် ။ အနောက်ဖက် တံခါးကနေ ပြေးထွက်သွားသည် ။ ကျော်ထဲက ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ကြည့်သည် ။
“ ဟင်..ကောင်မတွေ ပြေးကုန်ပြီ…..”
ကျော်ထဲရဲ့ အော်သံကြောင့် မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ပြာသွားသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး ရမှာကို နှမျောသွားသည် ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အုန်းမောင်းတို့ တိုက်မောင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားရလို့ မလိုက်နိုင် ။
“ ကရင်လေး..လိုက်…လိုက်…..လိုက် ဖမ်း……” လို့ အော်လိုက်သလို အောင်ကောင်းသော်ကိုလည်း အုန်း မောင်း တိုက်မောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့ကို တခုခုနဲ့ တုပ်နှောင်ဖို့ ခိုင်းလိုက်သည် ။
အောင်ကောင်းသော်လည်း တုပ်ဖို့ ကြိုး မရှိတာနဲ့ တိုက်မောင်းတို့ ခါးက ပုဆိုးကို ချွတ်ခိုင်းပြီး ဆုပ်ဖြဲပြီး တုပ်ဖို့ လုပ်သည် ။ သည်ကောင်တွေက အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်တဲ့ကောင်တွေ မဟုတ်လို့ ပုဆိုး ချွတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ အခါ ဂွေးတန်းလန်းနဲ့ ဖြစ်ကုန်သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်တွေကို ဆွဲကိုင်ပြီး နော်ပိုးနဲ့ အတူ အိမ်အနောက်ဖက်ကို ပြေးသည် ။
ဟိတ် ရပ် မပြေးနဲ့ …..
လူဆိုးတွေက မြင်သွားပုံရသည် ။ အနောက်ကနေ အော်ရင်း ပြေးလိုက်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စော်တွေဆီကို ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ ပြေးလိုက်သွားတာကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန် အောင်မောင်း..တိုက်မောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့သည် မောင်မောင်မျိုးလင်းက သေနတ်နဲ့ ချိန်မထားတော့တာကို သိလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဆွဲဖြဲ ပြီး ကြိုးအဖြစ် သုံးဖို့ လုပ်နေတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဆိုတဲ့ ကောင် ကလည်း ဘာလက်နက်မှ မရှိလို့ ခုခံဖို့ အချိန်ကောင်းဘဲ လို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသလို သူတို့ စောစောက လွှတ်ချထားတဲ့ ကြမ်းပေါ်ကဓါးတွေကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကြပြီး အောင်ကောင်းသော်နဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ကို ခုတ်ကြလေသည် ။
ပေတိုးက အောင်ကောင်းသော်ကို ဝင်ခုတ်သလို အုန်းမောင်းနဲ့ တိုက်မောင်းက မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ဝင်ခုတ်ဖို့ ပြေးသွားသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဖျတ်ကနဲ လှည့်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်သည် ။
ဒိန်းကနဲ အသံနဲ့ ခုတ်ဖို့ ဓါးကြီး မြှောက်ကိုင်ထားတဲ့ အုန်းမောင်း ခုတ်တဲ့ဆီကို မရောက်လိုက် ။ သူ့လက် လှုပ်ရှားမှု ထက် မြန်တဲ့ ကျည်ဆံက သူ့ခေါင်းကို ထိုးဖေါက်သွားသည် ။ သူ့ကိုယ်ကြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ဖိုင်းကနဲ မထိတွေ့ ခင်မှာ သူ့အသက်က ပျောက်နေပြီ ။
တိုက်မောင်းသည် ရှေ့ဆက် မတိုးရဲတော့ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက သူ့နဖူးတည့်တည့်ကို သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်ထားလို့ ။
“ ခွေးသား..ဓါးကို ချ….”
အောင်ကောင်းသော်ကို ခုတ်ဖို့ လက်မြှောက်လိုက်တဲ့ ပေတိုးကို မောင်မောင်မျိုးလင်းက လှမ်းပစ်လိုက်တာ ။ ချက်ကောင်း မမှန်ပေမယ့် ပေတိုး ပုခုံးစွန်းကို ထိမှန်ပြီး ပေတိုး လက်ထဲက ဓါး လွတ်ကျသွားသလို နာနာကျည်းကျည်း အော်ရင်း ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ပေတိုးကို လက်သီးနဲ့ ပြေးထိုးသည် ။
ယမ်းခိုးတွေ ဝေနေသည် ။ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ပေတိုး လဲကျသွားသည် ။ အောင်ကောင်းသော်က ခြေထောက်နဲ့ ဆက်ကန်သည် ။ တိုက်မောင်းကို ပုဆိုးစနဲ့ လက်ပြန်တုပ်နှောင်ကြသည် ။
ခြံဝိုင်းထဲ ရောက်နေတဲ့ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာတို့ ရဲအဖွဲ့ဝင်တွေသည် နောက်ထပ် သေနတ်သံ ၂ချက်ကြောင့် အိမ်နားကို မကပ်ရဲဘဲ နေရာယူပြီး စောင့်ကြည့်နေတုံး ခြံအနောက်ဖက်က သေနတ်သံ ၂ချက် ထပ် ကြားလိုက်ရပြန်သည် ။
ဦးအောင်မြသာက လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်ကနေ မေးသည် ။
“ ကျနော်တို့ကို စပစ်လို့ ပြန်ပစ်တာ..လှကြိုင် ထိသွားတယ်..ဆရာ……”
ရဲကြပ်ဘပုရဲ့ အသံက တုန်ခါနေသည် ။
ခြံအနောက်ဖက်က ဝိုင်းဖို့ သွားတဲ့ ရဲအဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်တာ ။ သေနတ်သံတွေ တဒိန်းဒိန်း ထပ် ကြားလိုက်ရပြန်သည် ။
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာတို့ သေနတ်သံ ကြားရတဲ့ ခြံအနောက်ဖက်ကို ပြေးသွားလိုက်ကြသည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက ရဲတွေ ခြံအနောက်ဖက်ကို ပြေးလိုက်သွားကြတာကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး အိမ်ရှေ့ပေါက်ကနေ ပြေးသည် ။
အောင်ကောင်းသော်လည်း မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လက်ထဲမှာ သေနတ် ရှိတာကြောင့် အနောက်က မလိုက်ရဲဘူး ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ပြေးထွက်လာတာကို အိမ်ရှေ့တနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ခြံစောင့်ကြီးစောအားမေက တွေ့လိုက်လို့..“ ဒီမှာ ပြေးပြီ တယောက်…..ဒီမှာ..ဒီမှာ…….လာဖမ်းကြ….” လို့ အော်သည် ။
မောင်မောင်မျိုးလင်းက သွေးရူးသွေးတန်း ပြေးနေရာက စောအားမေ ကို သေနတ်နဲ့ လှည့်ပစ်သည် ။ ဖထီးစောအားမေကို မထိ ။ သို့ပေမယ့် ရဲတယောက် သူပြေးသွားတဲ့ ဖက်ကနေ ဗြုံးကနဲ ပေါ်လာပြီး သူ့ကိုရိုင်ဖယ်နဲ့ ပစ်ထည့်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ခေါင်းကိုထိသွားပြီး လဲကျသွားသည် ။
အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်ထဲက ပြေးထွက်လာသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ပစ်ချလိုက်တဲ့ ရဲသားက အောင်ကောင်းသော်ကို ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘဲ သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်လိုက်သည် ။
အောင်ကောင်းသော်က လက်နှစ်ဖက် မြှောက်ရင်း…“ ငါ..တရားရုံးက ဒုရဲအုပ်…..ကွ..” လို့ အော်ပြောလိုက်တော့ ရဲသားလည်း သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး အောင်ကောင်းသော်ကို မှတ်မိသွားသည် ။
“ ဟာ..ဆရာ..ဆရာက သွေးတွေ ပေလူးနေလို့ ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘူး….” လို့ ပြောသည် ။
စခန်းမှူး ဦးအောင်မြသာ တို့ အဖွဲ့ အိမ်နောက်ဖေးကို ရောက်သွားချိန် သူ့တပည့်တချို့ သေနတ်ထိမှန် လဲကျနေတာကို တွေ့လိုက်ရသလို ရဲကြပ်ဘပုနဲ့ အဖွဲ့က ပစ်ခတ်လို့ သေနေတဲ့ လူဆိုးနှစ်ကောင်ကို တုံးလုံး ပက်လက် တွေ့လိုက်ကြရသည် ။ ရဲကြပ်ဘပုက “ ကျနော်တို့နဲ့ အနီးကပ် ပစ်ကြတာ..ကျနော်တို့လူ နှစ်ယောက်….လှကြိုင်နဲ့ မောင်မောင်ဆန်း ထိသွားပြီး သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ပွဲချင်းပြီးဘဲ ဆရာ…..” လို့ သတင်းပို့သည် ။
အိမ်ရှင် ဒေါ်မွှေးမွှေး…သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်မလေး တို့က ရဲတွေနဲ့ ကျွဲကြီး….ကျော်ထဲတို့ ရင်ဆိုင် ပစ်ခတ်ကြတဲ့ အချိန်မှာ မြေကြီး ပေါ်မှာ မှောက်အိပ်နေခဲ့ကြလို့ အထိအခိုက် မရှိကြဘူး လို့လည်း ရဲကြပ် ဘပုက သတင်းပို့သည် ။
ညသည် ခဲယဉ်းစွာနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် မနက် မိုးသောက်တော့မည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေး အိမ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး အကြမ်းဖက် စီးနင်းထားတဲ့ မုဒိန်းမှု တရားခံပြေးတွေသည် မရှုမလှ သေပွဲ
ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြီးအကဲတွေနဲ့ မြို့နယ်နဲ့ တိုင်းက အုပ်ချုပ်မှု အကြီးအကဲတွေ အ
ကုန် ရောက်ရှိနေကြသည် ။
သူတို့ ရောက်မလာကြခင်ထဲက စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒေါ်မွှေးမွှေး..သမီးငယ် နှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်မ
လေး တို့ကို ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို ပြောပြဖို့ မေးသည် ။ သူတို့က လူဆိုးတွေသည် မီးဖို အနောက်ခန်းက တံခါးကို ချိုးဖျက်ပြီး ဝင်လာကြသည် ….စားစရာ တောင်းစားကြသည် …မနက်အထိ သည်အိမ်ထဲမှာ ခိုအောင်း
နေကြမည်…လမ်းစားရိတ်အဖြစ် ငွေလိုတာမို့ ငွေ ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းကြသည် လို့ ပြောပြ ကြသည် ။
“ အမကြီးတို့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာ ရှိသလား…” လို့ မေးတဲ့အခါ ပါးတချက်နှစ်ချက်လောက် အရိုက်
ခံရသည် လို့ ဖြေသည် ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အဖြေကို သိပ် ဘဝင်မကျလှလို့ သမီး
နှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်နော်ပိုးကို မေးသည် ။ သူတို့ကလည်း လူဆိုးကြီးတွေက ပါးရိုက်တယ်..တွန်းတယ်..လို့ဘဲ
ဖြေသည် ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန် စော်ကားတာတွေ ရှိသလား…အထပ်ထပ် မေးပေမယ့် ဘာမှ လုပ်
တယ်လို့ မဖြေကြဘူး ။
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒုရဲအုပ်အောင်ကောင်းသော်သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အိမ်မှာ ရောက်နေတာကို နားမလည် ဘဝင်မကျဘူး ။ “ ခင်ဗျား…ဘယ်လို ရောက်နေတာလဲ..” လို့ မေးတဲ့အခါ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့
အဖြေက မရေမရာနဲ့ ။ အချုပ်ကား မှောက်ပြီး ရောက်လာတဲ့ ကျွဲကြီးတို့တတွေက သူ့ကို ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်လို့
တကိုယ်လုံး ဒါဏ်ရာတွေ ရတဲ့အကြောင်း အောင်ကောင်းသော်က ပြောသည် ။
ဘာကြောင့် သည် မြို့စွန်က ဒေါ်မွှေးမွှေး ခြံထဲကို ခင်ဗျား ရောက်နေတာလည်း လို့ မေးတဲ့အခါ “ ကျနော် တ
ဖက်မြို့ကို အသွား လူတစု သည်ဖက်ကို သေနတ်တွေကိုင်လျက်နဲ့ သွားနေကြတာ တွေ့လိုက်လို့ အနောက်က
လိုက်ကြည့်လို့ပါ…” လို့ ဖြေသည် ။
“ ခင်ဗျားက ဒါ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ် ဆိုတာကို မသိဘဲ သည်အိမ်ဆီကို ရောက်လာတာလား..” လို့ မေးတော့
“ ဟုတ်ပါတယ်…” လို့ ဖြေသည် ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် သူ့ကို မသင်္ကာဘူး ။ သည်လူ တခုခုတော့
တခုခုဘဲလို့ တွေးနေသည် ။
ကျွဲကြီး….ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ အားလုံး ရဲတွေနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကုန်သည် ဆိုတော့
ဒေါ်မွှေးမွှေး..ဝါဇင်..ပြာဇင်တို့..နော်ပိုးတို့သည် သူတို့ကို လူဆိုးတွေက မုဒိန်းကျင့် အကြမ်းဖက်ကြတာကို မပြော
ကြတော့ ။ ပြောလို့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုကြရရင် လူကြားထဲ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ကြရမည် မဟုတ်လား ။
နောက်မှ အိမ်ဆီကို ရောက်လာတဲ့ ဓါးကိုင် အုန်းမောင်း တိုက်မောင်း ပေတိုးတို့သည် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က ကျွဲကြီးကိုလီးစုတ်ပေးနေကြရတာကို ပြူတင်းပေါက်က မြင်ခဲ့ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် သည်နှစ်ယောက် အနက် ပေတိုးကလည်း ပုခုံးကို သေနတ် ထိထားတာကြောင့် သွေးလွန်လို့ ဆေးရုံကို အမြန် ပို့လိုက်ရသည် ။ မသေဘဲ ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ တိုက်မောင်းကို ရဲတွေက အဖက်လုပ်ပြီး မိန်းမတွေကို ကျွဲကြီး
တို့က မုဒိန်းကျင့်ကြသလား ဆိုတာကို မမေးကြ ။
အောင်ကောင်းသော်သည် ဝါဇင်ပြာဇင်တို့ ညီအမတွေကို ကျွဲကြီး လီးစုတ်ခိုင်းတာ အဖုတ်ယက်တာတွေ အကုန် မြင်သည် ။ နော်ပိုးကို ကျော်ထဲ ရေရေလည်လည် လိုးတာလည်း မြင်သည် ။ သို့ပေမယ့် မိန်းမတွေ အားလုံးက
သူတို့ ဘာမှ အလုပ်မခံရပါဘူး လို့ ထွက်ဆိုနေတော့ သူ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ အသာငြိမ်နေလိုက်သည် ။
သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သည်အိမ်ကို ဘာကြောင့် ရောက်နေရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ယုတ္တိရှိအောင် မဖြေနိုင်
လူမဆန်အောင် မုဒိန်းကျင့် လူသတ်ခဲ့ကြတဲ့ မုဒိန်းကောင်တွေသည် အသေဆိုးနဲ့ အားလုံး သေသွားကြရတာကို စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာ ကြည့်ပြီး “ မကောင်းတဲ့ကောင်တွေဟာ သူတို့ လုပ်ခဲ့သလိုဘဲ ပြန် ခံသွားကြရတာ
ဘဲကွာ…..” လို့ ညည်းသလို ပြောလိုက်လို့ သူ့တပည့် ရဲကြပ်ဘပုကလည်း “ ဟုတ်တယ်..ဆရာ…အချုပ်ကား
မှောက်တော့ ဆရာမကို တက်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ချစ်တိုင်းကောင်းနဲ့ ဖိုးကံကောင်း ဆိုတဲ့ နှစ်ယောက်လည်း ခြေထောက်တွေ အားလုံး ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အထိ အခြေအနေ ဆိုးသွားတယ်..ဒါ ကံကြီးထိုက်တာဘဲ ဆရာ..ကိုယ့်
ကို ပညာသင်ပေးတဲ့ မိဘနဲ့ တဂိုဏ်းထဲ ထားရမယ့် ဆရာသမားကို ကျူးလွန်စော်ကားတာလေ….” လို့ ဝင်ပြော
မနက် ဆယ်နာရီတိတိ ။
ရဲတွေ အားလုံး ပြန်သွားကြပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်မွှေးမွှေးနဲ့ ပြာဇင် ဝါဇင် နော်ပိုးတို့သည် ရေချိုး သန့်စင်ပြီးကြပြီး
သူတို့ အိပ်ခန်းတွေ အသီးသီးမှာ နားနေကြသည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မောင်မောင်မျိုးလင်း တအား လိုးခဲ့တာတွေကြောင့် ယခုတိုင် ကျိန်းစပ် နာကျင်နေတဲ့ သူမရဲ့စောက်ဖုတ်နဲ့ စအိုပေါက်တို့ကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်နေရင်း မောင်မောင်မျိုးလင်း လိုးတာတွေ ယက်တာတွေကို
သဘောကျ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ သူမအဖြစ်ကို ပြန်တွေးနေမိသည် ။
ထို့အတူဘဲ ပြာဇင်နဲ့ ဝါဇင်တို့သည် သူတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းတွေ ထဲမှာ ကုတင်ပေါ် လှဲရင်း ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကြီးကို စုတ်ပေးခဲ့ရတာတွေ..ကျွဲကြီးက သူတို့ရဲ့ အပျိုစင် နို့တွေကို ကောင်းကောင်း ဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ခဲ့တာတွေ..နို့သီးလေး
တွေကို စို့ခဲ့တာတွေ..သူတို့ စောက်ဖုတ်နဲ့ စအိုပေါက်တွေကို ယက်ခဲ့တာတွေ ကို ပြန်လည် တွေးတောနေမိကြပေသည် ။
ကျွဲကြီးရဲ့ အတင်းအကြပ် အဓမ္မ အနိုင်ကျင့်ပြီး ခိုင်းလို့ သူ့လီးမဲမဲကြီးကို စုတ်ပေး ယက်ပေးခဲ့ရပေမယ့် သူတို့အတွက် ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပြီး ကျွဲကြီးက သူတို့စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်း ဆွပေး နို့တွေ
ကို နယ်ချေပေး..စို့ပေးပြီး နောက်ဆုံး စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ ကလိယက်ပေးတော့ သည် အထိအတွေ့တွေကို
သဘောကျ သာယာသွားမိကြသည် ။
လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆက်လက် နေကြရဦးမှာမို့ မုဒိန်းအကျင့်ခံရတယ် လို့ ထွက်ဆိုကြလို့ မ
ဖြစ်ဘူး လို့ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ပြောခဲ့လို့ ရဲတွေကို သူတို့ကို ဘာမှ အလုပ်မခံရပါဘူးလို့ဘဲ ထွက်ဆို ခဲ့ကြသည် ။
နော်ပိုးကတော့ သူမ ခိုက်သွားစွဲသွားရတဲ့ ကရင်လေး ကျော်ထဲကို သတိရ မြင်ယောင်ပြီး တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ငိုနေသည်။
ကျော်ထဲ ပေးသွားတဲ့ ဝေဒနာတွေက ခုထိ ခံစား သိရှိနေရတုံးဘဲလေ ။ တအား လိုးသွားလို့ စောက်ဖုတ်ရော
ဖင်ပေါက်လေးရော တစစ်စစ်နဲ့ ကျိန်းစပ် နာကျင်နေဆဲဘဲ မဟုတ်လား ။
အောင်ကောင်းသော်သည် မောင်မောင်မျိုးလင်း နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ထားတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကို ဆေးရုံမှာ ဆေးထည့်ပတ်တီးစည်းပြီး နားနေလျက် ရှိသည် ။ သူသည် ညဆိုးတညမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ယခုတိုင် အံ့သြနေဆဲဘဲ ။ မထင်မမှတ်ဘဲ မုဒိန်းသမား အချုပ်တရားခံပြေးတွေနဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့ရပြီး သူသည် အပြင်းအထန် နှိပ်စက်တာခံခဲ့ရသည် ။ သည်ညမှာ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကို ကျွဲကြီး စိမ်ပြေနပြေ လီးစုတ်ခိုင်းတာတွေ သူတို့ နို့တွေကို စို့တာကိုင်တာ တွေ..သူတို့ စောက်ဖုတ်တွေကို ယက်တာစုတ်တာတွေကို အနီးကပ် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ။
နော်ပိုး ဆိုတဲ့ အိမ်ဖေါ်ကရင်မချောချောလေးကို မုဒိန်းကောင် ကျော်ထဲက စောက်ဖုတ်ကိုရော ဖင်ပေါက်ကိုရော
လိုးခဲ့တာတွေကို သူ မြင်ခဲ့ရသည် ။ ဒါတွေကို ပြန်လည် တွေးတော မြင်ယောင်နေရင်း အောင်ကောင်းသော် တ
ယောက် လီးကြီး မတ်မတ်ထောင် လာရသည် ။
တကယ်တော့ သူသည် သည် သားအမိတွေကို ကျင့်ချင်လို့ သည်အိမ်ကို မိုးထဲလေထဲ ရောက်သွားခဲ့တာပါ ။
သူက မကျင့်ရ မကျင့်ဖြစ်ဘဲ အချုပ်တရားခံပြေးတွေက အားရပါးရကြီး ကျင့်သွားခဲ့ကြသည် ။ သည် သားအမိနဲ့
အိမ်ဖေါ်မလေးသည် သူတို့ကို လူဆိုးကောင်တွေက ဘာမှ မလုပ်ဘူးလို့ ထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြသည် ။
သူတို့တတွေနဲ့ မကြာခင် သည် ကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည် လို့ အောင်ကောင်းသော် စဉ်းစားနေသည် ။ သည် အဖြစ်အပျက်တွေကို လူတကာကို ဖွင့်မပြောစေချင်ရင် သူ့ကိုလည်း ပေးလိုးဖို့ သူ တောင်းဆို အကြပ်ကိုင်မည်
လို့ အကွက်ချကြည့်နေသည် ။